နေ့စဉ်သတင်းများ စုဆောင်းတင်ပြခြင်း၊ နစေ့ဉျသတငျးမြား စုဆောငျးတငျပွခွငျး – Federal Journal
(No. 24, May 8, 2020)
၁။ KNU ၏ COVID-19 ကာကွယ်ရေး ဂိတ်ကို တပ်မတော်မှ မီးရှို့ဖျက်ဆီး၍ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့
၂။ ကယားပြည်နယ် အစိုးရ၏ ဒေသန္တရအမိန့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ဟု ဝေဖန်ခံရ
၃။ စစ်ဘေးရှောင်များအတွက် ထောက်ပံ့သည့် စားနပ်ရိက္ခာတချို့ AA ထံ ရောက်နေ
၄။ စစ်ဘေးရှောင်များအတွက် အကူအညီများ သယ်ဆောင်ပေးနေသည့် ယာဉ်များကို ပစ်ခတ်တားဆီးခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက် ခြင်းနှင့် ရိက္ခာပစ္စည်းများအား လုယက်ဖျက်ဆီးခြင်းများ မပြုလုပ်ရန် ချင်းလူငယ်များကွန်ရက် တောင်းဆို
၅။ ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးအတွက် ကိုယ်စားလှယ်များ Quarantine ဝင်ရမည်
၆။ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ AA တို့ အပစ်ရပ်ကြဖို့ ချင်းလူငယ်အဖွဲ့တောင်းဆို
၇။ နမ့်ခမ်း တောင်သူများ ရွှေလီမြစ်ထဲသို့ ပြောင်းများ သွန်ပစ်နေရ
၈။ ကယားပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ရှိ ဌာနဆိုင်ရာအချို့တွင် အရာရှိဦးရေထက် ယာဉ်အစီးရေများနေ အသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲ ထိန်းသိမ်း စရိတ်များ၊ အလေးထားစစ်ဆေးပေးရန် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ပြည်သူ့ငွေစာရင်း ကော်မတီပြောကြား
၉။ တပ်မတော်စစ်ကြောင်း ဝင်ရောက်နေရာယူတဲ့အတွက် မင်းပြားရွာသား ၄၀ဝ၀ ကျော်ထွက်ပြေးနေ
၁၀။ မြန်မာကို ငွေကြေးခ၀ါချမှု အမည်ပျက်စာရင်းထဲ ထည့်သွင်းဖို့ အီးယူ ပြင်ဆင်
၁၁။ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး မွန်ပြည်သစ်ပါတီက အစိုးရကျန်းမာရေးဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းမည်
၁၂။ ရေဖြူမြို့နယ်တွင် ရွာသားတစ်ဦး မြေမြှုပ်မိုင်းကြောင့် ခြေတစ်ဖက်ပြတ်
၁၃။ KNU/KNLA-PC ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောဌေးမောင် ဈာပန ကျင်းပပြီးစီး
၁၄။ ရဲအယောင်ဆောင်ဖမ်းဆီးဖို့ ကြိုးစားသူတွေကြောင့် တောင်ကုတ် NLD အဖွဲ့ဝင်တွေ တိမ်းရှောင်နေရ
၁၅။ ဟားခါးတက္ကသိုလ်တွင် ထားရှိသည့် Facility Quarantine လုပ်သူများ ဝင်ရောက်ပုံမှာ မမှန်ကန်ဟုဆို
၁၆။ NCA ထိုးအဖွဲ့များနှင့် သမ္မတ ဖွဲ့စည်းသည့် COVID-19 ပူးပေါင်းသည့် ကော်မတီတို့ အလွတ်တွေ့ဆုံ
၁၇။ ရွေးကောက်ပွဲအစီအစဉ်အတွက် ညှိနှိုင်းဖို့ ပါတီတချို့ လိုလား
၁၈။ မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်က သထုံဆေးရုံ နှင့် ရေးမြို့နယ်ဆေးရုံတို့၌ အသက်ရှူစက်နှစ်ခုစီရှိဟု ပြောကြားခဲ့သော် လည်း မြေပြင် အခြေအနေ နှင့် ကွဲလွဲနေဟု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ပြောကြား
၁၉။ ရသေ့တောင်မှာ ကျောင်းဆရာမတစ်ဦး မိုင်းထိလို့ ဒဏ်ရာရ
၂၀။ ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတွင် ဘတ်ဂျက်ကိစ္စဆွေးနွေး
၂၁။ ရာမောင်တံတားအနီး ဈေးသည်အမျိုးသမီး ၁ ဦး လက်နက်ကျည်ထိမှန် ဒဏ်ရာရ
၂၂။ ကန်ပိုင်တီ Quarantine များကို မြစ်ကြီးနားသို့ ပြောင်းရွေ့ရန်စီစဉ်နေ
၂၃။ ရခိုင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၄) အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ကျော် ကွယ်လွန်
၂၄။ ဟားခါးမြို့ Facility Quarantine ထားရှိမှုတွင် အဆင်ပြေနေသော်လည်း အစိုးရ ကူညီမှုကြောင့်မဟုတ်ဟုဆို
၂၅။ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က ဦးဆောင်ပြီး Mask ကမ်ပိန်းပြုလုပ်မှု လူစုလူဝေး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သဖြင့် ဝေဖန်ခံရ
၂၆။ တရားရုံးက လွှတ်ပေးသည့် တောင်ကုတ် ဒေသခံ ၅ ဦး ဗုံးခွဲမှုဖြင့် ပြန်အဖမ်းခံရ
၂၇။ ညမထွက်ရအမိန့် ထုတ်ထားချိန် မြဝတီတွင် ငါးဂိမ်းလောင်းကစားရုံ ဖမ်းမိ
၂၈။ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေး စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ထပ်မံ လိုအပ်
၂၉။ ကိုဗစ်မွေးရပ် ဝူဟန်တွင်အကျဉ်းကျသူ မြန်မာနိုင်ငံသားများ မူဆယ်နယ်စပ်ဂိတ်သို့ ပြန်ရောက်
ဖာပွန်-ကမမောင်း ကြားတွင်ရှိသော KNU -ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး မူတြော်(ဖာပွန်) (တပ်မဟာ-၅) ခရိုင် ၏ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေး ဂိတ်(၂)ခုကို မြန်မာ့တပ်မတော်က ယမန်နေ့ (မေလ ၆ ရက်)တွင် ဝင်ရောက် မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်း ကြောင့် နှစ်ဖက်အကြား တင်းမာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာ(၅) ဘက်က ပြောသည်။
မူတြော်(ဖာပွန်)ခရိုင်၊ ဒွယ်လိုးမြို့နယ်၊ လေးဖိုထ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝါသိုးခိုကျေးရွာနှင့် ကတိုင်တိ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖားလို့ လမ်းခွ တို့တွင် ကေအဲန်ယူ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် ကရင်အမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့(KNPF)တို့မှ ၎င်းတို့ ထိန်းချုပ် နယ်မြေများအတွင်း ကိုဗစ်ရောဂါ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုမရှိစေရန် လိုအပ်သည့် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုများ လုပ်ဆောင်နေစဉ် တပ်မတော် အမှတ်(၈) စစ်ကွပ်ကဲရေးဌာနချုပ် (စကခ)လက်အောက်ခံ ခြေမြန်တပ်ရင်း (ခမရ-၄၀၅)နှင့် (ခမရ-၄၁၀) မှ ဝင်ရောက်တားမြစ်ပြီး ဂိတ် စခန်းများကို မီးရှို့ခဲ့ကြောင်း မူတြော်ခရိုင်၏ ကျန်းမာရေးမှူး စောညွန့်ဝင်းက ယခုလိုပြောသည်။ “မနေ့က စစ်တပ်က လာပြီး တော့ ကျနော်တို့ချထားတဲ့ဝါသိုးခိုက ကျန်းမာရေးဂိတ်တဲကိုလာဖျက်ပစ်လိုက်တယ်။ နောက်ပြီး ဖားလို့လမ်းခွမှာရှိတဲ့ ကျနော် တို့ ဂိတ်မှာ တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကို မောင်းထုတ်ပြီး ဂိတ်တဲ တွေကို မီးရှို့လိုက်တယ်။ ဒါက သူတို့(စစ်တပ်) နယ်မြေတဲ့ မင်းတို့ လာပြီးရှိနေစရာမလိုဘူးဆိုပြီး သူတို့က ကျနော်တို့ကို ပြောပြီးမောင်းထုတ်လိုက်တာပဲ”ဟု ၎င်းက ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
ထိုသို့ တပ်မတော်ဘက်က လာရောက်တားမြစ်မောင်းထုတ်မှုများ ပြုခြင်းကြောင့် ယမန်နေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီ ၁၂ မိနစ်နှင့် ၂ နာရီကျော်တွင် ဝါသိုးခိုကျေးရွာ၌ ပစ်ခတ်မှုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ညနေ ၃ နာရီ ၄၁ မိနစ်ခန့်တွင် ကတိုင်တိ ကျေးရွာအုပ်စု ဖားလို့လမ်းခွရှိ မီးရှို့ခံခဲ့ရသည့်ဂိတ်တဲနားတွင် ပစ်ခတ်မှုတစ်ကြိမ် စုစုပေါင်း ပစ်ခတ်မှုသုံးကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း စောညွန့်ဝင်း က ဆက်ပြောသည်။ ထို့အပြင် ယနေ့ မေလ ၇ ရက်နေ့အချိန်ထိ နှစ်ဖက်ကြား ပစ်ခတ်မှု အနည်းငယ်ရှိသေးပြီး ၎င်း ပစ်ခတ်မှု များကြောင့် တပ်မတော်ဘက်တွင် ထိခိုက်ကျဆုံးမှု ရှိ၊ မရှိ မသိရသေးဘဲ ကေအဲန်ယူဘက်တွင် ထိခိုက်မှုမရှိကြောင်း ၎င်း ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် ဝါသိုးခိုဒေသခံအချို့မှာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရကြောင်း ကေအဲန်ယူက ဆိုသည်။ အဆိုပါ ကိစ္စရပ် နှင့် ပတ်သက်ပြီး အရှေ့တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်(ရတခ) ပြောခွင့်ရ ဗိုလ်မှူးကြီး မောင်မောင်လတ်က “ ကျနော်တို့ ဆီတော့ တင်ပြထားတာမရှိသေးဘူး။ ကျနော် မသိသေးလို့လေ။ ကျနော် အခုလိုက် မေးလိုက်ပါအုံးမယ်” ဟု ယနေ့ နေ့လည်တွင် ကေအိုင်စီသို့ပြောသည်။
ကေအဲန်ယူ အနေဖြင့် ၎င်းတို့ ထိန်းချုပ်နယ်မြေများအတွင်း COVID-19 ကပ်ရောဂါ ကူးစက်ပြန့်ပွား မှုမရှိစေရေး အတွက် မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့က ကေအဲန်ယူ(ဗဟို)မှ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ အရေးပေါ် တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (Covid Pandemic Emergency Respond Team)ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ၎င်းတို့ နယ်မြေအသီးသီးတွင် ကျန်းမာရေး အသိပညာပေးမှုများ၊ ရောဂါ ကာကွယ်တားဆီးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ဒေသတွင်း စည်းမျဉ်းစည်း ကမ်းများကို ထုတ်ပြန်ပြီး ၎င်းတို့ တပ်မဟာ၊ ခရိုင်၊ တပ်ရင်း၊ တပ်စိပ်အသီးသီးကို ညွှန်ကြားချက်ပေး ပို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ http://kicnews.org/2020/05/knu%e1%81%8f-covid-19-%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%80%e1%80
ကယားပြည်နယ်အတွင်း မေလ ၃ ရက်နေ့ ရက်စွဲပါ ဒေသန္တရအမိန့်သည် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီ စံချိန်စံနှုန်းများကို ချိုးဖောက်နေသည်ဟုဆိုကာ ကယားပြည်နယ် ဒေသခံများက ကန့်ကွက်လျက်ရှိသည်။ ကယားပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၏ တရားဝင် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ၌ မေလ ၃ ရက်နေ့ ည ၁၀ နာရီ ၁၂ မိနစ် အချိန်တွင် ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ အများ ပြည်သူများ သိရှိလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန် မြို့နယ် ၇ မြို့နယ် (လွိုင်ကော်၊ ဘော လခဲ၊ ဒီးမော့ဆို၊ဖရူဆို၊ ရှားတော၊ဖားဆောင်း၊ မယ်စဲ့) မှ ဒေသန္တရ အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်းဟူ၍ ဖော်ပြခဲ့သည်။
သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အသီးသီးမှ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် အဆိုပါ ဒေသန္တရအမိန့်တွင် အများ ပြည်သူ အကျိုးငှာ ရည်ရွယ်၍ ပြည်သူများအနေဖြင့် စည်းကမ်းချက် ၁၀ ချက်ကို တိကျစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ပျက်ကွက်ပါက တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သတိပေးထားသည်။ ကရင်နီပြည်လူငယ်များသမဂ္ဂ (UKSY) တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (၂) ခွန်းသောမတ်က “လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကိုယ့်ဆန္ဒကို ထုတ်ဖော်လို့မရအောင် အမိန့် အာဏာနဲ့ အသုံးချပြီး ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့မြင်တယ်။ ဒီဟာကို ကန့်ကွက်သလို သက်ဆိုင်ရာအစိုးရက လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ မညီတဲ့ ဒီမိုကရေစီစံနှုန်း ချိုးဖောက်ထားတဲ့ ဒီဒေသန္တရအမိန့်ကို ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ ပြောချင်တယ်” ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
အဆိုပါ ဒေသန္တရအမိန့်ပါ စည်းကမ်းချက် ၁၀ ချက်အနက် နိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံတော်အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများအားအကြည်အညို ပျက်စေမည့် အပြောအဆို၊ အရေးအသား၊ ရုပ်ပုံကားချပ်၊ ပိုစတာ၊ ဗီနိုင်း၊ လက်ကမ်း စာစောင်များ စသည်တို့ကို နည်းလမ်း အမျိုးမျိုးဖြင့် မည်သည့်နေရာတွင်မျှ မပြုလုပ်ရဟူ၍ ပါရှိသည်။ ထို့ပြင် ပြည်သူလူထုအား ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေမည့် စကားလုံးအသုံးအနှုန်းဖြင့် လှုံ့ဆော်၊ စည်းရုံးခြင်း၊ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခြင်းများ မပြုလုပ်ရ၊ ဥပဒေနှင့် မညီညွတ်သော မဟုတ် မမှန်သည့် အချက်အလက်များ ပါဝင်သော သဘောထားများ ထုတ်ပြန်၊ ဖော်ပြဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ မပြုလုပ်ဟူ၍လည်း ဖော်ပြ ထားသည်။
လွိုင်ကော်အခြေစိုက် Lain နည်းပညာ အထောက်အကူပြု အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သလို ပြည်နယ်အရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာ နေသူ လည်း ဖြစ်သည့် ကိုကျော်ထင်အောင်က အဆိုပါ ဒေသန္တရအမိန့်သည် ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနှင့် မညီသကဲ့သို့ ၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးကို ကျော်လွန်နေသည့် ထုတ်ပြန်ချက်ဟု သုံးသပ်သည်။“ကပ်ရောဂါနဲ့ လည်း ဘာမှမသက်ဆိုင်တဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်လို့ ဒါသည် လုံးဝ မလိုအပ်ဘူး။ ထုတ်လည်း မထုတ်ပြန် သင့်ဘူး” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ ကျနော် တို့အခွင့်အရေးကို အဲဒီလိုပဲ လုပ်လို့ရတဲ့ အာဏာကို အသုံးချပြီး ထုတ်ပြန်နေအုံးမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ ဖော်ဆောင်ချင်တဲ့ လမ်းကြောင်းတွေ၊ စုပေါင်းလုပ်ဆောင်ချင်တဲ့ လမ်းကြောင်းတွေ ရောက်မှာ မဟုတ်ဘူး” ဟုလည်း ခွန်းသော မတ်က ထောက်ပြသည်။ ဖရူဆိုမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးပဲ့ဒူက ပြည်နယ်အစိုးရအနေဖြင့် လုပ်စရာရှိသည်ကို လုပ်နေသလို ဝေဖန်သူများအနေဖြင့်လည်း လွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲလွဲခွင့် ရှိသည့်အတိုင်း ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒကို ဖော်ထုတ်နေခြင်း ဟုသာ မြင်မိကြောင်း မှတ်ချက်ပြုသည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/05/05/ 222033.html
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတွင် စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်များအတွက် နိုင်ငံတကာမှ ထောက်ပံ့သည့် စားနပ်ရိက္ခာတချို့မှာ ရက္ခိုင်စစ်တပ် (AA) လက်ထဲသို့ နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ရောက်ရှိနေသည်ဟု တပ်မတော်နှင့် အစိုးရတာဝန်ရှိသူများကပြောသည်။ စစ်ဘေးရှောင်များအတွက် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု အကူအညီများရရှိရန် ဝေးလံပြီး သွားလာရခက်ခဲသော နေရာ များ၌ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ (ICRC) ကို သွားလာ ဝင်ထွက်ခွင့်ပြုထားပြီး ၎င်းတို့ထောက်ပံ့သော ရိက္ခာအချို့မှာ ရပ်/ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမှ တဆင့် AA ထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်များ ရှိနေသည်ဟု သမ္မတရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးက ပြောသည်။
AA ၏ တပ်စခန်းများကို သိမ်းဆည်းရာတွင် နိုင်ငံတကာ အထောက်အပံ့ ပစ္စည်းများကိုပါ တွေ့ရှိသိမ်းဆည်းရသည့် ဖြစ်စဉ် များလည်း ရှိသလို ဖမ်းဆီးရမိသူများကို စစ်ဆေး ပေါ်ပေါက်ချက်များ အရလည်း AA သည် အထောက်ပံ့ရိက္ခာများ ရရှိခြင်းကို အတည်ပြုနိုင်ကြောင်း တပ်မတော် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ဆိုသည်။ AA နှင့် ဆက်သွယ်ပြီး ထိုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်သူများအား ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်များ လက်ဝယ် စားနပ်ရိက္ခား ရောက်ရှိရန်မည်သည့်နည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်ရမည်ကို အဖြေရှာသင့်ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ် မြေပုံ မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖေသန်းက ပြောသည်။
နိုင်ငံတကာ အထောက်အပံ့ ရိက္ခာများ AA ထံ ရောက်ရှိနေသည် ဆိုသည့် အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ AA က တစုံ တရာ ထုတ်ပြန် ဖြေရှင်းထားသည်ကို မတွေ့ရသေးသော်လည်း WFP ယာဉ်တန်း တိုက်ခိုက်မှု အပါအဝင် WHO၊ ICRC အဖွဲ့ နှင့် အရပ်သား ယာဉ်များကို ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည်မှာ AA လက်ချက် မဟုတ်ကြောင်း တပ်မတော်၏ တဖက်သတ် စွပ်စွဲ ချက်များသာ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် တပ်မတော်နှင့် AA တို့ ဖြစ်ပွားသည့် တိုက်ပွဲများ ကာလအတွင်း အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးငယ်များ အပါအဝင် အရပ်သား ထိခိုက်သေဆုံးမှုများရှိနေပြီး တိုက်ပွဲများကြောင့် နေရပ် စွန့်စွာ တိမ်းရှောင် ထွက်ပြေးနေရသည့် စစ်ဘေးရှောင် ပြည်သူ ၁ သိန်းကျော် ရှိပြီ ဖြစ်သည်။ https://burma.irrawaddy .com/news/2020/05/05/222044.html
၄။ စစ်ဘေးရှောင်များအတွက် အကူအညီများ သယ်ဆောင်ပေးနေသည့် ယာဉ်များကို ပစ်ခတ်တားဆီးခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက် ခြင်းနှင့် ရိ က္ခာပစ္စည်းများအား လုယက်ဖျက်ဆီးခြင်းများ မပြုလုပ်ရန် ချင်းလူငယ်များကွန်ရက် တောင်းဆို
စစ်ဘေးရှောင်များအတွက် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားသည့် အကူအညီများ၊ သယ်ဆောင်ပေးနေသည့် ကူညီရေးယာဉ် များအား ပစ်ခတ်တားဆီးခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းနှင့် စစ်ဘေးရှောင်များ၏ ရိက္ခာပစ္စည်းများအား လုယက်ဖျက်ဆီးခြင်းများ၊ ဒေသခံ ချင်း လူထုထံမှ ငွေကြေးကောက်ခံခြင်းနှင့် ကြက်၊ ဝက်၊ ဆန် စသော စားနပ်ရိက္ခာများအား အတင်းအဓမ္မ ယူဆောင် ခြင်းများ မပြုလုပ်ရန် ချင်းလူငယ်များကွန်ရက်က မေ ၃ ရက် ရက်စွဲဖြင့် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ လက်ရှိအချိန်အထိ ချင်းပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားနေသော တပ်မတော်နှင့် AA တို့၏ တိုက်ပွဲများကြောင့် ချင်း လူမျိုးအရပ်သား သေဆုံးသူ ၃၃ ဦး၊ ဒဏ်ရာရရှိသူ ၄၀ ကျော်၊ မတရားဖမ်းဆီးခံ ရသူ ၂၀ ကျော်၊ စာသင်ကျောင်းပေါင်း ၁၀၈ ကျောင်းကျော် ပိတ်ထားရပြီး ရွာပေါင်း ၂၁ ရွာကျော် ဖျက်ဆီးခံရကာ လူဦးရေတစ်သိန်းကျော်မှာ တိုက်ပွဲများကြောင့် ဒုက္ခ ရောက်နေကြောင်း ချင်းလူငယ်ကွန်ရက်၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါဝင်သည်။
ချင်းပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ကျေးရွာများတွင် လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်း၊ အရပ်သားများအား လူသားဒိုင်းအဖြစ် အသုံးချခြင်း၊ အရပ်သားများအပေါ် စစ်ရာဇဝတ်မှုများ ကျူးလွန်ခြင်းနှင့် အရပ်သားများ နေထိုင်ရာ မြို့ရွာများတွင် စစ်ရေး လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် မည်သည့်လှုပ်ရှားမှုမျိုးမျှ မလုပ်ဆောင်ရန်လည်း ချင်းလူငယ်ကွန်ရက်က တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရက စစ်ဘေးရှောင်များ နေထိုင်ရာ စခန်းများကို တရားဝင် အသိအမှတ်ပေးရန် နှင့် လိုအပ်သည့် လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာ အစီအမံများ၊ မူဝါဒများကို အမြန်ဆုံးချမှတ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးပြီး ချင်းပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပိတ်ထားသည့် အင်တာနက်လိုင်းများအား အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးရန်လည်း ချင်း လူငယ်ကွန်ရက်က တောင်းဆိုခဲ့သည်။ https://news-eleven.com/article/172298
ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၉) ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းဝေးတက်ရောက်မည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ မေလ ၁၀ရက်မှ ၁၇ ရက်ထိ Quarantine ဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကချင်ပြည်နယ် လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦးထွန်းတင်ထံမှ သိရသည်။
“၁၈ မြို့နယ်ကလာကြတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့တွက် အဝေးကလာကြတဲ့သူတွေမို့ သူတို့မှာရောဂါအခြေနေ ဘယ်လိုရှိ လဲဆိုတာ ကျနော်တို့ဘာမှမသိပါဘူး။ အဲကြောင့် ကျနော်တို့အနေနဲ့အားလုံးတွက် အကာကွယ်ဖြစ်မယ်လို့ ယူဆတဲ့ အတွက် လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ (၁၉) ကြိမ်မြောက်လွှတ်တော်အစည်းဝေးတွင် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ အတွက် ဘတ်ဂျတ် အတည်ပြု ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ပြီး ယခင်ပုံမှန်အစည်းဝေးကဲ့သို့ သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို မေးခွန်းမေးမြန်းခြင်း ခွင့်ပြု မည် မဟုတ်ကြောင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ကဆက်ပြောသည်။
နယ်မှရောက်ရှိလာမည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များတွက် Q ကာလတွင်း အစားအသောက်များအား လွှတ်တော်ရုံးမှ စီစဉ် ပေးမည်ဖြစ်ပြီး Q နေရာသည် လွှတ်တော်ရိပ်သာတွင် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ “အန်တီတို့ နယ်ဝေးကလူတွေဆို ၉ ရက်နေ့ အရောက်လာရမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ခုလတ်တလောအခြေနေမှာတော့ Covid-19 ဖြစ်နေပေမယ့်လည်း ဘတ်ဂျတ်ကိစ္စ က အရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့တွက် လွှတ်တော်ကနေ ဘတ်ဂျတ်အတည်မပြုပေးဘူးဆိုရင် ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ လည်ပတ်နေတဲ့ အုပ်ချုပ်မှု ယန္တရားက ရပ်ဆိုင်းသွားမယ်။”ဟု ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းစစ်ကော်မတီဝင် ဆော့လော် မြိ့နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခေါ်မာဝူက ပြောသည်။ လွှတ်တော်ကို အများဆုံး ၃ ရက်သာ ကျင်းပမည်ဟု သိရသည်။ https://burmese.kachinnews.com/2020/05/05/%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%8a%e1%80%ba%e1%
မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ ရခိုင်လက်နက်ကိုင်AAအဖွဲ့တို့ စစ်ရေးတင်းမာနေဆဲ ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝမြို့နယ်ဘက်မှာ တိုက်ပွဲ အကြားပစ်ခတ်မှုကြောင့် ချင်းလူမျိုးတွေ အရပ်သားတွေ ထိခိုက်သေဆုံးမှု တိုးလာနေပါတယ်။ နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်း အရပ် သား သေဆုံးဒဏ်ရာရတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် အပေါ်ရှုံ့ချပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာကြဖို့ ချင်းလူငယ်ကွန်ရက် ပြောခွင့်ရ ဆလိုင်းမာန်ဟုန်က VOA ကို ပြောပါတယ်။
စစ်လေယာဉ်နဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ချင်းလူမျိုး ၂၉ ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး၊တိုက်ပွဲအတွင်း လူသားဒိုင်း အသုံးပြုမှုတွေကို နှစ်ဘက် တပ်ဖွဲ့တွေ မလုပ်ဆောင်ဖို့နဲ့ AA နှင့်တပ်မတော် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးဖို့ ချင်းလူငယ်ကွန်ရက် အဖွဲ့ကနေ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် တောင်းဆိုခဲ့တာပါ။ ပလက်ဝမြို့နယ်အတွင်း ထိခိုက်မှုရှိနေတာဟာ AA အဖွဲ့ကနေ နှောက်ယှက် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် လို့ တပ်မတော်ပြောခွင့်ရ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်။ ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်ဘက်မှာ တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ် တွေမှာ လက်နက်ကျည်ထိမှန်မှုကြောင့် အရပ်သားတွေ သေဆုံးမှု ဒဏ်ရာရမှု နေအိမ်မီလောင်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ မြန်မာစစ်တပ် ဘက်ကရော AAဖက်ကပါ သူတို့အဖွဲ့လက်ချက်မဟုတ် ကြောင်းငြင်းဆိုနေကြပါတယ်။
ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝမြို့နယ်ဖက်မှာ တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အတွင်း ထောင်နဲ့ချီတဲ့အရပ်သားတွေလဲ ပလက်ဝမြို့အတွင်းနဲ့ ဆမီးမြို့ နယ် ခွဲမှာ စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေး ကို စနစ် တကျ လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ အရပ်သား သေဆုံးမှုကိစ္စတွေကို သေချာစွာ စုံစမ်းပေးဖို့ကို ချင်းလူငယ်ကွန်ရက်အဖွဲ့ကနေ ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ လက်ရှိပလက်ဝမြို့နယ်ဘက်မှာ ဒီမေလဆန်းကစပြီး ဒီကနေ့အထိ နှစ်ဘက်တိုက်ပွဲပြင်း ထန်နေဆဲရှိပါတယ်။ https://burmese.voanews.com/a/myanmar-army-and-aa-fighting-chin-youth-urge-for-ceas efire-/5406625.html
မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ် ဒေသဖြစ်သည့် နမ့်ခမ်းမြို့နယ်တွင် ခြံထွက် ပြောင်းများ တရုတ်ပြည်သို့ ရောင်းခွင့်မရသဖြင့် ရွှေလီ မြစ်ထဲသို့ သွန်ပစ်လိုက်ရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ မေလ ၅ ရက် ယနေ့တွင်လည်း နမ့်ခမ်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ခြံထွက် ပြောင်း များ တရုတ်ပြည်သို့ တင်ပို့ရန်ခက်ခဲသဖြင့် ရွှေလီမြစ်ထဲသို့ ထော်လဂျီ အစီးရေ (၂၀)ခန့် သွန်ပစ်လိုက်ရကြောင်း နမ့်ခမ်း တောင်သူ စိုင်းသန်းမြင့် က သျှမ်းသံတော်ဆင့် သို့ ပြောသည်။ “ အဲ့ထော်လဂျီတွေ တရုတ်ပြည်ကို သွားရောင်းဖို့ စောင့်နေ တာ ၅ ည လောက်ရှိပြီ။ အခုပြောင်းတွေ ပုတ်ကုန် ခြောက်ကုန်ပြီဆိုတော့ ရွှေလီမြစ်ထဲသွန် လိုက်တာရှိတယ်။ နောက် လမ်း တွေပေါ် သွန်ချ လိုက်ရတာတွေရှိတယ်” ဟု စိုင်းသန်းမြင့် က ဆိုသည်။
မြန်မာ – တရုတ်နယ်စပ် မူဆယ်မြို့တွင် ဧပြီ ၂၄ ရက်က အသက် ၈၇ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီး တဦး COVID-19 လူနာ အဖြစ် ကျန်းမာရေးဌာနကကြေငြာပြီးနောက်ပိုင်း တရုတ်ဘက်မှ အာဏာပိုင်များက တင်းကျပ်စစ်ဆေးကာ နမ့်ခမ်းမြို့နယ် နယ်စပ်နေ ၁၉ ရွာမှ ဒေသခံများတပိုင်တနိုင် စိုက်ပျိုးမှုမှရသည့် ခြံထွက်သီးနှံများပင် တင်ပို့ရောင်းချခွင့်မရသည်အထိ နယ်စပ်ဂိတ်များ ပိတ်ရန်အမိန့် ထုတ်ထားလိုက်သည်။ နယ်စပ်ဂိတ်များကို ရက်ပေါင်း ၆၀ အကြာ ပိတ်ထားမည်ဖြစ်ပြီး ဥပဒေကျူးလွန်ကာ တနိုင်ငံနှင့် တနိုင်ငံ ခိုးဝင်ပါက ကြီးလေးသည့် ပြစ်ဒဏ်ပေးသွားမည်ဟုလည်းဖော်ပြထားသည်။
“ အိမ်ပြန်သယ်ပြီး ထားရင်လည်း အဆင်မပြေဘူး။ နောက် ခြောက်သွားရင်လည်း ဘာမှ လုပ်လို့ မရတော့ဘူး။ ဒါကြောင့် လွှင့်ပစ်လိုက်တာ ရွှေလီမြစ်ထဲကို ” ဟု စိုင်းစိုင်း ကဆိုသည်။ ထိုသို့ပြောင်းများ သွန်ချနေရခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ မှ နည်းလမ်းရှာပေးရန် လိုအပ်နေကြောင်း၊ လက်ရှိ ပြဿနာသည် ပြည်တွင်း ကုန်ချောထုတ်လုပ်မှု မရှိခြင်းကြောင့် ယခုကဲ့သို့ အခက်အခဲများရင်ဆိုင်နေရကြောင်းလည်း နမ့်ခမ်းဒေသခံ စိုင်းထွန်းလှိုင်း ကပြောသည်။“သက်ဆိုင်ရာက နည်းလမ်းရှာနေ ကြတယ်လို့ပြောပေမယ့် ပြောင်းတွေက အထားမှ မခံတော့ ရွှေလီမြစ်ထဲပဲ သွန်လိုက်ရတာပေါ့”ဟု စိုင်းထွန်းလှိုင်း က ဆို သည်။ လက်ရှိ မူဆယ်-နမ့်ခမ်း ခြံစိုက်တောင်သူများ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေကြပြီး၊ အကြွေးများဖြင့် သောက ရောက်နေကြ ကြောင်း သိရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/16421
၈။ ကယားပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ရှိ ဌာနဆိုင်ရာအချို့တွင် အရာရှိဦးရေထက် ယာဉ်အစီးရေများနေသည့်အပြင် အသုံးပြုခြင်း မရှိဘဲ ထိန်းသိမ်းစရိတ်များ၊ အလေးထားစစ်ဆေးပေးရန် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ပြည်သူ့ငွေစာရင်း ကော်မတီပြောကြား
ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရှိ ဌာနဆိုင်ရာအချို့တွင် အရာရှိဦးရေထက် ယာဉ်အစီးရေများနေသည့်အပြင် အသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း စရိတ်များတင်နေရာ အလေးထားစစ်ဆေးပေးရန် ကယားပြည်နယ် ပြည်သူ့ငွေစာရင်း စောင့်ကြည့်ကော်မတီ က ပြောကြားသည်။
ဒုတိယအကြိမ် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေးကို မေ ၇ ရက်တွင် စတင်ကျင်းပရာ မော်တော်ယာဉ် ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ဖွဲ့စည်းထားသော ယာဉ်နှင့် စက်ပစ္စည်းများ ပြင်ဆင် ကြီးကြပ်မှု ကော်မတီမှ အသုံးစာရိတ်များ ခွင့်ပြုပေးပြီးနောက် ထုတ်ယူသုံးစွဲသည့် ဌာနများမှ မော်တော်ယာဉ်များကို မြေပြင် တွင် အမှန်တကယ် ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်းရှိ/ မရှိ၊ မောင်းနှင်နိုင်ခြင်း ရှိ/ မရှိ အလေးထားစစ်ဆေးပေးရန်နှင့် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ ငွေ လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှု လျော့နည်းစေရန် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြရန် တိုက်တွန်းကြောင်း ပြည်သူ့ငွေစာရင်း စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရေး အစီရင်ခံစာအား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးနော်အီမှ လွှတ်တော်တွင်တက်ရောက်ဖတ်ကြားရာ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒေသတွင်းရှိ ဌာနစုစုပေါင်းအရေအတွက်မှာ ၈၆ ခုဖြစ်ပြီး ဒေသဘတ်ဂျက်ဌာန အဖွဲ့အစည်း ၂၄ ဖွဲ့အတွင်းမှ အစိုးရအဖွဲ့၊ မီးသတ်ဦးစီး ဌာန၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ မြို့ပြနှင့် အိမ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊ ကျေးလက်လမ်းဦးစီးဌာနနှင့် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များတွင် အသုံးစာရိတ်များ နေကြောင်း ကော်မတီထံမှသိရသည်။ ရငွေအပိုင်းတွင်လည်း ငွေလုံးငွေရင်းရ ငွေနှင့်အခွန်ရငွေများ ကောက်ခံရရှိမှုမှာ လွန်စွာ နည်းပါးသည့်အပြင် လျာထားချက်မှာလည်း အမှန်စာရင်းများထက် လျော့နည်းလျက်ရှိသည်ကို စိစစ်သုံးသပ်တွေ့ရှိရကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် အခွန်များကောက်ခံနေသော ဌာနများ၏ အခွန်လျာထားချက်မှာ လွန်စွာလျော့နည်းလျက်ရှိပြီး စာရင်းစစ်ချုပ် အစီရင်ခံစာပါ အမှန်ရငွေနှင့် အဆမတန်ကွာခြားနေသည်မှာ ဖယ်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အောင်မြင်စွာ တည်ဆောက်ရာ တွင် အဓိကအချက်ဖြစ်သည်ကို သတိချပ်သင့်ကြောင်း ဦးနော်အီက လွှတ်တော်သို့ တင်ပြခဲ့သည်။
ထို့ပြင် လျာထားဘတ်ဂျက်များတွင် စီမံခန့်ခွဲမှု အသုံးစရိတ် များပြားနေခြင်းနှင့် ရုံးဝန်ထမ်းအိမ်ရာ တည်ဆောက်ရေးများသာ များပြားနေခြင်းကိုလျော့ချပြီး ပြည်သူလူထုကို တိုက်ရိုက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမည့် အသုံးစရိတ်များအား လျာထားရန်၊ အရာရှိများ အတွက် ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ်များ ထုတ်ယူရာတွင် ဌာနတစ်ခုနှင့်တစ်ခု မတူညီဘဲ ကွဲပြားမှုဖြစ်နေသည်ကို အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန် အကြံပြုတင်ပြထားကြောင်းလည်း သိရသည်။ https://news-eleven.com/article/172555
ရခိုင်ပြည်နယ် မင်းပြားမြို့နယ်က မင်းရွာ၊ ထောင့်ချေ၊ မြစ်နား စတဲ့ကျေးရွာတွေမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၅ ရက်ညနေ ပိုင်းကနေစလို့ တပ်မတော်စစ်ကြောင်းတွေက ရွာထဲမှာနေရာယူပြီး တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာတွေဆီကို လက်နက်ကြီး လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ လှမ်း ပစ်တာကြောင့် ကျေးရွာသုံးရွာက လူပေါင်း ၄၀ဝ၀ ကျော်ခန့်ဟာ နီးစပ်ရာကျေးရွာတွေ နဲ့ မင်းပြားမြိုကပေါ်ကို အသီးသီးထွက် ပြေးနေကြရတယ်လို့ ဒေသခံကျေးရွာသားတွေက RFA ကိုပြောပါတယ်။ တပ်မတော်စစ်ကြောင်းဟာ မင်းရွာအလယ်မှာရှိတဲ့ စာသင်ကျောင်းဝင်းထဲမှာ အမြောက်နှစ်လုံးတည်ပြီး ဒီနေ့ မနက်ပိုင်းအချိန်အထိ တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာတွေဆီကို လှမ်းပစ်နေ တယ်လို့ လုံခြုံရေးအရ အမည်မဖော်လိုတဲ့ ရွာသားတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
မေလ ၅ ရက်နေ့က အဲဒီတပ်မတော်စစ်ကြောင်းက ကျေးရွာသားတချို့ကိုခေါ်ပြီး လက်ရှိမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေ တွေကို သင်ခန်းစာယူပြီး အေအေကို ထောက်ခံအားပေးတာတွေ မလုပ်ဖို့နဲ့ မဆက်စပ်ကြဖို့ တပ်မတော်စစ်ကြောင်းအရာရှိက သတိပေးပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီလိုပြောဆိုပြီးနောက် အဲဒီစစ်ကြောင်းက ကျေးရွာတွေထဲက မူလွန်ကျောင်း၊ အထက် တန်းကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ နေအိမ်တွေမှာ စခန်းချနေထိုင်ပြီး ရွာထဲကနေပြီး လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ လှမ်းပစ်နေတာလို့လည်း အမည်မဖော်လိုတဲ့ အဲဒီရွာသားကပြောပါတယ်။ မင်းရွာ၊ ထောင့်ချေ၊ မြစ်နား ကျေးရွာသုံးရွာဟာ ရွာ ချင်းဆက်နေတဲ့ရွာတွေဖြစ်ပြီး အိမ်ခြေ တစ်ထောင်ကျော် ရှိပါတယ်။ တပ်မတော်စစ်ကြောင်းဟာ အဲဒီရွာသုံးရွာစလုံးထဲမှာ နေရာယူထားတာလို့ဆိုပါတယ်။ အခုလက်ရှိမှာ သက်ကြီးရွယ်အိုအချို့သာရွာထဲမှာ အစောင့်အဖြစ်ကျန်ရစ်ခဲ့ကြပြီး ကျန်တဲ့လူ အားလုံးက တပ်မတော်စစ်ကြောင်း ရောက်လာတဲ့နေ့ကပင် ထွက်ပြေးသွားကြပြီလို့ နောက်ထပ် လုံခြုံရေးအရအမည်မဖော် လို တဲ့ ကျေးရွာသားတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
အခုလိုရပ်ထဲရွာထဲနဲ့ စာသင်ကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေထဲမှာ စခန်းချတာတွေကို တားမြစ်ပေးဖို့ အကြီး အကဲတွေကို တောင်းဆိုလိုကြောင်းလည်း ကျေးရွာသားတွေက RFA ကိုပြောပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူ အများစုဟာ တိုက်ပွဲတွေထက် တပ်မတော်စစ်ကြောင်းကို ကြောက်ပြီးတော့ ထွက်ပြေးကြတာလို့ ဒုက္ခသည်အရေး အကူအညီ တွေပေးနေတဲ့ မင်းပြားဒေသခံ ကိုအမ်းသားကြီး ကပြောပါတယ်။
ရွာထဲမှာနေပြီး တပ်စွဲမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်အန္တရာယ်များသလဲဆိုတာ အားလုံးသိကြတဲ့အတွက် တပ်စွဲတယ်ဆိုတာ မဖြစ် နိုင်ကြောင်း၊ တူးထားတဲ့ ကတုတ်ကျင်းတွေဟာလည်း ရွာတွေကို အမီပြုပြီး စစ်ဆင်ရေးလုပ်နေတာ AA ပဲဖြစ်တဲ့အတွက် AA ဘက်က တူးထားသာတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းလည်း ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြောပါတယ်။ ဒီလိုပြောကြားချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ AA ဘက်က တုံ့ပြန်ချက်ကိုရရှိဖို့ RFA က ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/400-minbya-villagers-flee-05072020083556.html
ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာဖို့ပျက်ကွက်တာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကို ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ အမည်ပျက် စာရင်းမှာ ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့က ထည့်သွင်းဖို့ ရှိနေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အပါအဝင် နိုင်ငံ ၂၂ နိုင်ငံကို ငွေကြေး ခဝါချမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အနီးကပ် စောင့်ကြည့်ရမယ့် နိုင်ငံစာရင်းမှာ ထည့်သွင်းထားမယ့် ဥရောပကော်မရှင်ရဲ့ ကြေညာချက်ကို ကြာသပတေးနေ့မှာ ထုတ်ပြန်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အတူ အာရှက ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ မွန်ဂိုးလီးယားနိုင်ငံ တွေ လည်း အမည်ပျက်စာရင်းထဲ ထည့်သွင်းခံရမှာဖြစ်ပြီး စာရင်းထဲထည့်သွင်းခံရမယ့် နိုင်ငံသစ်တွေထဲ ပနားမား၊ ဘဟားမားစ်နဲ့ မောရစ်သျှနိုင်ငံတွေ ပါဝင်တယ်လို့ ကြေညာချက်မူကြမ်း ကို ရရှိခဲ့တဲ့ ရိုက်တာ သတင်းဌာနက ပြောပါတယ်။
ဒီ စာရင်းထဲပါတဲ့ နိုင်ငံတွေဟာ ဥရောပ သမဂ္ဂအဖွဲ့ရဲ့ ငွေရေးကြေးရေးစနစ်ကို အန္တရာယ်ပြု ခြိမ်းခြောက်နေတယ်လို့လည်း ကြေညာချက် မူကြမ်းမှာ ပါရှိပါတယ်။ EU ရဲ့ ဥပဒေအရ ဘဏ်တွေနဲ့ တစ်ခြားဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ဖောက်သည် ကုမ္ပဏီတွေကို အဲဒီ စာရင်းပါ နိုင်ငံတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ သေသေချာချာ အနီးကပ် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နာမည်ပျက် စာရင်းပါ နိုင်ငံတွေထဲက စီးပွားရေး ကုမ္ပဏီတွေလည်း ဥရောပ သမဂ္ဂက ပေးအပ်မယ့် ရန်ပုံငွေ ထောက်ပံ့ကြေး အသစ်တွေကို ရယူနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
EU က မကြာခင် ထုတ်ပြန်ဖို့ ရေးဆွဲထားတဲ့ ကြေညာချက် မူကြမ်းဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ငွေကြေး ခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးမှာ စံနှုန်းတွေ သက်မှတ်တဲ့ပါရီမြို့အခြေစိုက် FATF – FINANCIAL ACTIONS TASK FORCE က အရင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာရင်းနဲ့ သိပ်ကွာခြားမှု မရှိပါဘူး။ ဥရောပကော်မရှင်က ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် စာရင်းထဲပါဝင်တဲ့အာရှ ၂ နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ လာအိုနဲ့ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ တွေကို ဒီနှစ် နာမည်ပျက် စာရင်းထဲကနေ ပယ်ဖျက်ထားတယ်လို့လည်း ရိုက်တာသတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ https://bu rmese.voanews.com/a/myanmar-money-laundering-european-union-/5407402.html
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ နယ်မြေအတွင်း COVID-19 လူနာတွေ့ရှိပါက အစိုးရလက်အောက်ရှိ ဆေးရုံများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင် ရွက်သွားရန် စီစဉ်ထားကြောင်း မွန်ပြည်သစ်ပါတီက ပြောသည်။ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ နယ်မြေတွင် ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး
ဗဟို အဆင့်၊ ခရိုင် အဆင့်၊ မြို့နယ် အဆင့် ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းထားပြီး ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကို အရှိန်မြှင့် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်းလည်း မွန်ပြည်သစ်ပါတီက ပြောသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင် သံသယလူနာများရှိလာပါက ရောဂါ စမ်းသပ်နိုင်ရန်နှင့် ကုသရန်အတွက် မွန်ပြည်သစ်ပါတီတွင် လုံလောက်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့် လူနာကို ကုသမှုပေးနိုင်ရန် အစိုးရ လက်အောက်ရှိ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်စီစဉ်ထားသည်ဟု မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ပြည်တွင်းရေးရာ တာဝန်ခံ နိုင်ဗညားလယ် က ပြောသည်။
လက်ရှိအချိန်ထိ မွန်ပြည်သစ်ပါတီထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း၌ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် သံသယ လူနာမရှိသေးဘူးဟု မွန်ပြည်သစ် ပါတီ တာဝန်ရှိသူက ပြောသည်။ မွန်အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီတို့ကလည်း မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းရှိ ပြည်သူများကို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါဆိုင်ရာ အသိပညာပေးမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့်အပြင် ရောဂါကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးနေသည်ဟု မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (၂) နိုင်စံတင် က ပြောသည်။
မွန်ပြည်နယ်ပါတီအနေနှင့် ၎င်းတို့ထိန်းချုပ်နယ်မြေများတွင်သာမက မွန်ပြည်သစ်ပါတီနှင့်ထိစပ်နေသည့် နယ်မြေများနှင့် မွန်ပြည်သူလူထုများ တည်ရှိရာနေရာဒေသသို့တွင်လည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာ အသိပညာပေးမှုများ၊ ရောဂါ ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ၊ အစားအသောက်များ ကူညီထောက်ပံ့ပေးလျက် ရှိသည်ဟု သိရသည်။ https://www.bnionline. net/mm/news-72614
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ရေဖြူမြို့နယ်အတွင်းရှိ အလယ်စခန်းကျေးရွာအနီး ဒေသခံတစ်ဦး မြေမြှုပ်မိုင်းနင်းမိပြီး ခြေထောက် တစ်ဖက် ပြတ်သွားသည်ဟု ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပြောသည်။ မေလ ၄ ရက်နေ့ မွန်းလွှဲ ၁ နာရီ အချိန်ခန့်တွင် အလယ် စခန်းကျေးရွာနှင့် ၃ မိုင်ခန့်ဝေးသည့် ဒေသအခေါ် ကြောင်လျှာကွင်းဆိုသည့် ခြံမှ ပြန်လာသည့် ဟံဂံကျေးရွာမှ နိုင်ထွန်း သည် လမ်းပေါ်တွင် မြေမြှုပ်မိုင်း နင်းမိပြီး ဘယ်ဘက်ခြေထောက် ပြတ်သွားသည်ဟု သိရသည်။ အလယ်စခန်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးမှူး နိုင်တင်စန်း က “မိုင်းနင်းမိတဲ့လူက ဟံဂံက ဒီမှာ(အလယ်စခန်း) ခြံလာလုပ်နေကြတယ်၊ ခြံကနေအပြန် လူသွား လမ်းပေါ်မှာပဲ နင်းမိတယ်။ အဲ့နေရာတဝှိုက်မှာပဲ ၂၀၁၉ တုန်း ကလည်း တစ်ကြိမ် နင်းမိဖူးတယ်” ဟု ပြောသည်။
ယခုနှစ် ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း၌လည်း အလယ်စခန်းနှင့် အနည်းငယ်ဝေးသည့် မျောက်ချောကျေးရွာနှင့် ကလယ် ကျေးရွာ ဘက်တွင် မြေမြှုပ်မိုင်းနင်းမိမှု ၃ ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဒေသခံနှစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကာ ခြေထောက် တစ်ဖက်စီ ဖြတ်ပစ်ခဲ့ရ သည်။ ရေဖြူမြို့နယ်အတွင်း မကြာခဏဖြစ်ပွားနေသည့် မြေမြှုပ်မိုင်းနင်းမိမှုများသည် အများဖြင့် ဒေသခံပြည်သူများ လုပ်ကိုင် စားသောက်နေကြသည့် ဥယျာဉ်ခြံများ၊ ပြည်သူများအသုံးပြုနေကြသည့် လမ်းများပေါ်တွင်ဖြစ်ပွားနေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဒေသခံ များက ပြောသည်။
မြေမြှုပ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားနေသည့်ဒေသသည် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP) နှင့် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) တပ်ဖွဲ့ တို့ လှုပ်ရှားသွားလာနေသည့် ဒေသဖြစ်ပြီး နှစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့အကြား နယ်မြေ အငြင်းပွားမှုများ ဖြစ်ပွားနေသည့် နေရာဒေသ လည်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း မြေမြှုပ်မိုင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ နှစ်ဖက်တပ်များဖြစ်ကြသည့် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး နှင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီတို့သည် ၎င်းတို့ ထောင်ထားခြင်းမဟုတ်ကြောင်း ငြင်းဆိုထားသည်။ ရေဖြူမြို့နယ်အတွင်း မကြာခဏ ဖြစ်ပွားနေသည့် မြေမြှုပ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှု ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းနိုင်ရေး မွန်ပြည်သစ်ပါတီဘက်က အစိုးရ တပ်မတော်နှင့်ရော၊ KNU နှင့်ပါ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေသော်လည်း ယနေ့အချိန်ထိ တစ်စုံတစ်ရာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခြင်း မရှိသေးဘူးဟု NMSP က ပြောသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-72615
ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမှ ခွဲထွက်သွားသည့် KNU/KNLA -PC ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ် ကြီး စောဌေးမောင် အသက်(၉၃)နှစ်၏ ဈာပန အခမ်းအနားကို ကော့ကရိတ်ခရိုင်၊ နော်တယာမြို့ ထို့ကော် ကိုးဌာနချုပ်ရှိ ကရင့်အမျိုးသားခေါင်းဆောင် စောဘဦးကြီး၏ ဂူဗိမ္မာန်တည်ရှိရာ ထို့ကော်ကိုးဌာနချုပ် ကရင့်အာ ဇာနည်ဗိမ္မာန်၌ မေ ၅ ရက် နေ့၊ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ကျင်းပပြီးစီးသွားပြီးဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောဌေးမောင်၏ ရုပ်ကလာပ်ကို ထို့ကော်ကိုးဒေသရှိ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း၌ ဝတ်ပြုဆုတောင်းပြီးနောက် စစ်ရေးအခမ်းအနားဖြင့် ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အခမ်းအနားတွင် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှပေးပို့လာသော သဝဏ်လွှာ၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးက ပေးပို့ သောသဝဏ်လွှာများ ဖတ်ကြားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်၊ ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် နန်းခင်ထွေးမြင့် တို့မှ ပေးပို့ လာသော သဝဏ်လွှာအပါအဝင် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတို့မှပေးပို့ လာသော သဝဏ်လွှာ စုစုပေါင်း ၂၀ ခန့် အား တွဲဘက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး စောကျော်ညွန့်က ဖတ်ကြားခဲ့သည်။ ဈာပန အခမ်းအနားသို့ တိုင်းရင်း သား လက်နက်ကိုင် ခေါင်းဆောင်များ၊ စစ်ဘက် အရပ်ဘက် တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ချို့မှ ခေါင်းဆောင်များ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် KNU/ KNLA -PC မှ အရာရှိများနှင့်စစ်သည်များ လိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောဌေးမောင်သည် ၁၉၄၇ ခုနှစ် ကိုလိုနီခေတ်အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်၌ ကရင့်လက်နက်ကိုင် လူငယ် တပ်ဖွဲ့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ဘူးသူဖြစ်ပြီး လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ကရင့်အမျိုးသားတော်လှန်ရေး စတင်သည့် ၁၉၄၉ ခုနှစ် ကတည်း က ကရင့်အမျိုးသားခေါင်းဆောင် စောဘဦးကြီးနှင့်အတူ တော်လှန်ရေး တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူ ကွယ်လွန်သွားသည့်အတွက် KNU/KNLA -PC ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ နေရာမှာ လစ်လပ်လျက်ရှိပြီး အစားထိုး ဆောင် ရွက်နိုင်ရန်အတွက် Proto-call အရ လက်ရှိဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောထော့လေး အား လျာထားကြောင်း နှင့် မကြာမီ ရက်ပိုင်းအတွင်း တပ်ဖွဲ့အလုပ်အမှုဆောင်အစည်းအဝေးတစ်ရပ် ကျင်းပကာ ပြန်လည်ရွေးချယ် အတည်ပြုသွားမည်ဟု KNU/KNLA -PC တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး စောကျော်ညွန့်က ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။ http://kicnews.org/20 20/05/knu-knla-pc-%e1%80%a5%e1%80%80%e1 %81%a0%e1%82%92%e1%80%
ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မြို့က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်တွေရဲ့ နေအိမ်တွေကို ညဘက်မှာ ရဲ အယောင် ဆောင်ထားပြီး ဖမ်းဆီးဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး အသက်အန္တရာယ်လည်း ခြိမ်းခြောက်တာ ခံနေရတဲ့အတွက် ဒီလို NLD ပါတီ ဝင်တချို့ ထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ တောင်ကုတ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၂ ကိုယ်စားလှယ် ဦးမင်းအောင်က ပြောပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ ၉ ရက်နေ့ကလည်း မြောက်ပိုင်းရခိုင်လေသံနဲ့ တယောက်က သတ်ဖြတ်မယ်ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက် ဖုန်းဆက်ခဲ့ သလို ဧပြီ ၁၄ ရက်နေ့ညမှာလဲ လူတစုက နေအိမ်ခြံတခါးကို လာဖွင့်ခဲ့ကြောင်း၊ ဆွေမျိုးတွေ နဲ့ ရွာခံတွေရောက်လာတော့မှ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြတယ်လို့ လက်ရှိမှာ တိမ်းရှောင်နေရဆဲဖြစ်တဲ့ ဘူးရွှေမော်ရွာသား NLD ပါတီရဲ့မြို့နယ်အလုပ်အမှုဆောင် ဦးသန်းဌေးက ပြောပါတယ်။ ဦးသန်းဌေးက သူ့ကိုခြိမ်းခြောက်သူတွေဟာ AA အဖွဲ့ကလို့ ပြောပါတယ်။
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးကကလည်း ရခိုင်ပြည်နယ်၊ တောင်ကုတ်မြို့နယ်၊ ဘူးရွှေမော်ကျေးရွာက ရွာသား ဦးသန်းရွှေ ကို မေလ ၅ ရက်နေ့ မနက်အစောပိုင်းမှာ AA ကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ NLD ပါတီရဲ့ တောင်ကုတ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) ကိုယ်စားလှယ် ဦးမင်းအောင်ကတော့ လာရောက်ဖမ်းသူတွေဟာ သူတို့ ပါတီဝင် ဦးသန်းဌေးကိုဖမ်းဖို့လာတာဖြစ်ပြီး ဦးသန်းဌေးကိုမရလို့ သူနဲ့အရင်းနှီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ဦးသန်းရွှေကို ဖမ်းသွားတာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ နေအိမ်တွေကိုလာ ရောက်ဝိုင်းတဲ့သူတွေဟာ ဘယ်သူဘယ်ဝါတွေဖြစ်တယ်ဆို တာတော့ သေချာမသိဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
“ခုလို တောင်ကုတ်မြို့က NLD ပါတီဝင်တွေကို ခြိမ်းခြောက်သူတွေဟာ AA အဖွဲ့က ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး AA အဖွဲ့ ပြောခွင့်ရသူ ခိုင်သုခ က NLD ပါတီဝင်တွေနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ ကိစ္စသာဖြစ်ပြီး AA နဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့ RFA ကို ဖြေကြားပါတယ်။ AA အဖွဲ့က လူတွေက ရဲဝတ်နဲ့ ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ ဒါဟာ သက် သက်အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ စွပ်စွဲချက်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီကိစ္စနဲ့ AA အဖွဲ့နဲ့ ပတ်သက်မှုမရှိကြောင်း၊ ဒါဟာ AA အဖွဲ့အပေါ် အထင် အမြင်လွဲမှားလာအောင် လုပ်ကြံဖန်တီးချက်သာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်း ခိုင်သုခက ပြောကြားပါတယ်။ တောင်ကုတ်က NLD ပါတီဝင်တွေရဲ့ အဆိုအရ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာလည်း အကောင့်အတုတွေနဲ့ သူတို့အပေါ် အသက်အန္တရာယ် ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ ရှိနေတယ်လို့လည်း RFA ကို ပြောကြားပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/rakhine-aa-nld-05062020131215.html
ဟားခါးတက္ကသိုလ်တွင် ထားရှိသည့် Facility Quarantine လုပ်သူများဝင်ရောက်ပုံမှာ မမှန်ကန်ဟုချင်းဝေါလ်မီဒီယာက စုံစမ်း သိရှိရပါသည်။
“၂၉ ရက်နေ့က ဟားခါးတက္ကသိုလ် ထဲ စဝင်လာတဲ့သူက သူ့ဟာသူ ဆိုင်ကယ်စီးပြီးလာတယ် Positive လူနာနဲ့ ချောင်း အတူသွားခဲ့လို့ Quarantine ဝင်ဖို့လာတယ်လို့ ပြောတယ်။ ရွာထဲကို PPE ဝတ်စုံနဲ့ ပိုးသတ်ထားတဲ့ ကားနဲ့ ခေါ်တာ မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ ၊ သူတို့ဟာသူတို့ ပိုးရှိလူနာနှင့် ဆက်စပ်သူ အားလုံးသွားပါ ဆိုတော့ လာခဲ့တာပါတဲ့။ ဒုတိယ တစ်ဖွဲ့ ကြတော့ ဆိုင်ကယ် ၂ စီး နဲ့လာတယ် ၊ Quarantine ဝင်ဖို့ ၂ ယောက်ကို ဆိုင်ကယ်နဲ့လာပို့တာ သူတို့ ၂ ယောက်ကို ချ ထားပြီးတော့ ဆိုင်ကယ်မောင်းတဲ့ ၂ ယောက်က ပြန်သွားတယ် ဘာထူးမှာလဲ၊ ပြီးတော့ တစ်ယောက်က ရဲ နဲ့ ဆိုင်ကယ် တစ်စီးစီ နဲ့ ၂ ယောက်လာတယ်၊ သားဖွား ဆရာမ တစ်ယောက်ကလည်း positve လူနာကို ဘယ်မှ မသွားဖို့ သွားပြောဖူး တယ်ဆိုပြီး သူ့ကိုသူ သံသယရှိလို့ ဆိုင်ကယ်နဲ့ သူ့ဟာသူလာတယ်၊ ၃ဝ ရက်နေ့ ညနေပိုင်း ၄ ခွဲလောက်မှာ နည်းနည်း အသက်ကြီးတဲ့ အသက် ၅၀ ဝန်ကျင် မိန်းမ ၂ ယောက် Quarantine ဝင်ဖို့ ဆိုပြီးတော့ သူတို့ ၂ ယောက် ထီးလေး အတူ ဆောင်းပြီးတော့ ကိုယ့်အထုတ်ကို ကိုယ်တိုင်ထမ်းပြီးတော့ လာကြတယ်၊” ဟု အမည်မဖော်လိုသူ တစ်ဦးမှ Chin World media သို့ ပြောသည်။ ဟားခါးတက္ကသိုလ်တွင် Quarantine လာပို့သူများမှာ ပြန်သွားပြီ ဖြစ်ပြီး စောင့်ကြည့်လူနာမှ Positive ဖြစ်လျှင် တစ်မြို့လုံး ကူးစက်သွားမည်ကို စိုးရိမ်နေကြောင်းလည်း ဟားခါးတက္ကသိုလ် ဆရာမ တစ်ဦးမှ လည်းပြောသည်။
“ကျွန်မတို့ ရွာကနေ ခြေကျင်နဲ့ ဟားခါးထိလာတာပါ၊ သူတို့ရွာကို ကားနဲ့ လာခေါ်တုန်းက ကျွန်မတို့ တောင်ယာမှာအိပ်တော့ ရွာပြန်ရောက်မှ လူနာနဲ့ လက်နှုတ်ဆက်ခဲ့တယ် ဆိုတော့ ရွာသားတွေကလည်းဝင်ဖို့ တိုက်တွန်းကြတော့ ဟားခါး လာခါနီးမှာ လည်း ရွာက ဥက္ကဌကိုလည်း အကြောင်းကြားတယ် သူက ဟားခါးသစ်က Gate ကို ပြောပေးမယ် ပြောလို့ထွက်လာတယ်။ Quarantine လုပ်တဲ့ နေရာကို ညနေ ၅ နာရီလောက်မှာ ရောက်ဖြစ်တယ်” ဟု ရွာမှ ခြေကျင်ဖြင့် လာသူမှ ပြောသည်။ ဟားခါး တက္ကသိုလ်တွင် Positvie လူနာနှင့် ထိတွေ့ခဲ့သူ ၅၁ ဦးကို ဟားခါးတက္ကသိုလ်ထားရှိပြီး နိုင်ငံခြားပြန်များကို န.တ.လ ကျောင်းသို့ Quarantine လုပ်လျက်ရှိသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-72625
NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များနှင့် အစိုးရ၏ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသ ရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းရေးကော်မတီ ပထမဆုံးအကြိမ် အလွတ် သဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ဆွေးနွေးပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဗဟိုဌာန NRPC တွင် မေလ ၅ ရက်နေ့ တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမျိုးဝင်း က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြသည့် အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ယခုကဲ့သို့ပြောသည်။“အဓိကကတော့ COVID- 19 ဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးပိုင်းရယ်၊ ကုသရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေပေါ့ အဲဒီကိစ္စတွေကိုလည်း ဆောင်ရွက်ကြမယ်။ ပြီးရင် လည်းပဲ နယ်စပ်တစ်ကြော အသီးသီးက ပြန်လာကြမယ့် ဒီရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ အဲဒီကိစ္စဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကို ပြင်ဆင်တာပဲ။ အခုကတော့ အသေးစိတ်ဆွေးနွေးပွဲ မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။”ဟု ပြောသည်။ ယခုပြုလုပ်သည့် ဆွေးနွေးပွဲသည် အလွတ်သဘော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုသာဖြစ်ပြီး တရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် ပြင်ဆင်သည့် ဆွေးနွေးပွဲ ဟု ပြောသည်။
တရားဝင်အစည်းအဝေးတွင် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး KNU နှင့် ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS/SSA တို့၏ COVID- 19 ရောဂါ ကာကွယ်တားဆီးရေးလုပ်ငန်းတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် တပ်မတော်၏ ဟန့်တား ပိတ်ပင်မှုများကို လည်း ထည့်သွင်းဆွေးနွေးသွားမည်ဟု NCA-EAOs အဖွဲ့များက ပြောသည်။ ယနေ့ပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေးသို့ အစိုးရဖက်မှ ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းရေးကော်မတီ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ဇော်ဦး(ငြိမ်း)နှင့်အတူ ကော်မတီဝင်များ၊ ဖိတ်ကြားထားသူများနှင့် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် အဖွဲ့မှ ဦးမျိုးဝင်းနှင့်အတူ အခြားသော တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်ခဲ့ကြ သည်ဟု သိရသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-72632
၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ သဘောထားတစ်ခုတည်းနဲ့ မဆုံး ဖြတ်ဘဲ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အဖွဲ့တွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးမှ ဆုံးဖြတ်သင့်တယ်လို့ ပါတီခေါင်း ဆောင်တွေ၊ လေ့လာသူတွေက တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
တစ်နိုင်ငံလုံး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အန္တရာယ်ကို ရင်ဆိုင်နေရချိန်ဖြစ်တာကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပသင့်၊ မကျင်းပသင့်ကို ဆွေး နွေးညှိနှိုင်းသင့်တယ်လို့ ၈၈ ကျောင်းသားအများစု ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ပြည်သူ့ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးရဲနိုင်အောင်က ပြောပါတယ်။ ၂၀၁၀ နဲ့ ၂၀၁၅ အထွေအထွေရွေးကောက်ပွဲတွေကို နိုဝင်ဘာလမှာပဲ ကျင်းပခဲ့တာကြောင့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်း နိုဝင်ဘာလကုန်မှာ ကျင်းပဖို့လျာထားကြောင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် တာဝန် ရှိသူတွေက နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကတဆင့် ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပြောထားပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို တကယ်ထိန်းချုပ်နိုင်မှသာ ရွေးကောက်ပွဲကို စဉ်းစားသင့်တယ်လို့ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးသိန်းထွန်းဦးက ပြောပါ တယ်။
ဒီအခြေအနေတွေကြားထဲမှာ ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပမယ်ဆိုရင် မညီမျှမှုတွေရှိနိုင်ပြီး ကော်မရှင်အပေါ်မှာ မေးခွန်းထုတ် စရာ တွေ ဖြစ်လာမယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ PACE ရဲ့ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ ဦးစိုင်းရဲကျော်စွာမြင့်က ပြောပါတယ်။ ဒီကပ်ရောဂါအန္တရာယ် ကြုံတွေ့နေရချိန်မှာ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုရင် လူစုလူဝေးနဲ့ မဲဆွယ်ဟောပြောရ မယ့် နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့်အခြေအနေ၊ မဲဆန္ဒရှင်တွေ မဲစာရင်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးခွင့် အပါအဝင် အခက်အခဲ တွေ အတော်များများ ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့ ထောက်ပြကြပါတယ်။
စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာဆိုရင် မဲဆန္ဒနယ်တိုင်းကို သွားရောက်ခွင့်၊ ပြည်သူတိုင်းကို မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့် ရနိုင်ပါ့မလားဆိုတဲ့ စိန်ခေါ်မှုလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဒီအခြေအနေမှာ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပ နိုင်ဖို့ ဆိုတာ မလွယ်ဘူးလို့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးစိုင်းလိတ်က ပြောပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ လာမယ့် ၂၁ ရက်နေ့မှာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့ ကြေညာထားပါတယ်။ လက်ရှိ နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ရာနီးပါးရှိပြီး အားလုံးနီးပါး ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်နိုင် ခြေ ရှိပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/2020-election-05052020050408.html
၁၈။ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် COVID-19 ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးခြင်းတွင် မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်က သထုံဆေးရုံ နှင့် ရေးမြို့ နယ်ဆေးရုံတို့၌ အသက်ရှူစက်နှစ်ခုစီရှိဟု ပြောကြားခဲ့သော်လည်း မြေပြင်အခြေအနေ နှင့် ကွဲလွဲနေဟု လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် များ ပြောကြား May 5, 2020
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် COVID- 19 ဆိုင်ရာ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခြင်း အစီအစဉ်တွင် မွန်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် က သထုံခရိုင် ပြည်သူ့ဆေးရုံနှင့် ရေးမြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံတို့၌ အသက်ရှူစက် နှစ်ခုစီရှိဟု ပြောကြားခဲ့သော်လည်း တကယ့် မြေပြင်အခြေအနေနှင့် ကွဲလွဲမှုရှိနေကြောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ပြောကြားသည်။ မေ ၅ ရက်က ပြုလုပ်သည့် နိုင်ငံ တော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်များ COVID- 19 ဆိုင်ရာ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်း အစီးအစဉ်တွင် မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအေးဇံက သထုံခရိုင် ပြည်သူ့ဆေးရုံနှင့် ရေးမြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံတို့၌ အသက်ရှူစက်နှစ်ခုစီရှိဟု ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်ဆေးရုံကြီးမှာ Ventilator လေးခုရှိပါတယ်။ သထုံမှာ Ventilator နှစ်ခုရှိပါတယ်။ ရေးမြို့နယ်မှ Ventilator နှစ်ခုရှိပါတယ်” ဟု မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအေးဇံက ပြောကြားသည်။ အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မွန်ပြည်နယ် ရေးမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် အသက်ရှူစက် (Ventilator) မရှိသည့်အပြင် သထုံခရိုင် ပြည်သူ့ ဆေးရုံတွင် လည်း Portable Ventilator စက်တစ်လုံးသာရှိဟု နယ်မြေခံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။
“ကျွန်တော်တို့ အရင်ကထင်ထားတာက ကျောက်ကပ်ဆေးတဲ့စက်မှာ အသက်ရှူစက်သုံးရတယ်လို့ သိထားတယ်။ အဲဒါနဲ့ သထုံခရိုင်ဆေးရုံမှာ အဲဒီစက်တစ်လုံးရှိတယ်။ နောက် Portable Ventilator တစ်လုံးရှိတယ် ထင်နေတာ။ ညနေကဘဲ သထုံ ခရိုင်ဆေးရုံအုပ်ကြီးကို လှမ်းပြီးအတည်ပြုတော့ ကျောက်ကပ်ဆေးတဲ့စက်မှာ အသက်ရှူစက်မရှိဘူး။ Portable Ventilator စက်တစ်လုံးတည်းရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ICU Ward တွေမှာသုံးတဲ့ Ventilator စက်တော့ မရှိဘူးလို့သိရတယ်” ဟု ဦးအောင်ကျော်သူက ဆိုသည်။ https://news-eleven.com/article/172288
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရသေ့တောင်မြို့နယ် အမျက်တောင်ကျေးရွာ မူလတန်းလွန်ကျောင်းက ဆရာမ ဒေါ်ချိုဇင်အောင် မေလ ၃ ရက် နေ့ မနက်ပိုင်းက မိုင်းထိသွားတဲ့အတွက် စစ်တွေမြို့က အမှတ် ၁၇ ကုတင် ၁၀ဝ စစ်ဆေးရုံမှာ ပို့ဆောင်ကုသနေရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆရာမဟာ ရသေ့တောင်မြိုကနယ်က ခမရ ၅၃၆ တပ်ထဲမှာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီး မော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ အတွက် နွားနို့ထွက်ဝယ်စဉ်မှာ အခုလိုဖြစ်တာလို့သိရပါတယ်။ ဖြစ်စဉ်မှန်ကန်ကြောင်းနဲ့ ခြေထောက်တစ်ဖက်ထိခိုက်သွားလို့ ရန်ကုန်မင်္ဂလာဒုံစစ်ဆေးရုံကိုကိုပို့ဆောင် ကုသမယ်လို့ သတင်းကြားတယ်လို့ ရသေ့တောင်မြို့နယ် ပညာရေးလုပ်သားသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် ကိုစိုးလင်းဦး က RFA ကိုပြောပါတယ်။
ANP ပါတီရဲ့ ရသေ့တောင်မြို့နယ် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စောဝေကတော့ ဒီဖြစ်စဉ်ကိုမသိရသေးကြောင်း ပြောပါတယ်။ ရသေ့တောင်ကို ညနေမှ ခရီးကပြန်ရောက်မှာဖြစ်လို့ ဖြစ်စဉ်ကို စုံစမ်းမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ တချိန်ထဲမှာလည်း တပ်မတော်နဲ့ AA အကြား စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေရှိနေတဲ့ ရသေ့တောင်မြို့နယ်ထဲက ငတောက်တူချေ ရွာဟောင်းနဲ့ ရွာသစ် နှစ်ရွာလုံး မီးလောင်နေပြီး တစုံတယောက်က ရှို့တဲ့ မီးတွေလို့ ဒေသခံတွေက ပြောကြပါတယ်။ အဲဒီရွာနှစ်ရွာဟာ ရသေ့တောင်မြို့နယ်ရဲ့ မြောက်ဘက် တစ်မိုင်လောက်အကွာ အစိုးရတပ်မတော် ခမရ ၅၃၈ ရဲ့ ချောင်းတစ်ဖက်မှာရှိတာဖြစ်ပြီး နှစ်ရွာပေါင်း အိမ်ခြေ ၁၀ဝ ကျော်နဲ့ လူဦးရေ ၇၀ဝ ကျော်ရှိတယ်လို့သိရ ပါတယ်။
ရက္ခိုင့်တပ်တော် AA ပြောခွင့်ရသူ ခိုင်သုခကို RFA က ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာတော့ ရသေ့တောင်ဘက်မှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား တာမရှိကြောင်း၊ ရွာနှစ်ရွာ မီးရှို့ခံရတယ်ဆိုတာ ဟုတ်မှန်ပြီး တပ်မတော်ဘက်က တပ်နဲ့နီးလို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ တမင်ရွာတွေ ကို မီးရှို့တာဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီစွပ်စွဲချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး RFA က သီးခြား အတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့ မရှိပါဘူး။ ရခိုင် လူမျိုးတွေနဲ့ ကျေးရွာသားတွေအပေါ်မှာ တပ်မတော်က တမင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ရာဇဝတ်မှုတွေ ကျူးလွန်နေတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲ ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ တပ်မတော်အနေနဲ့ အရပ်သားပြည်သူတွေအပေါ် တမင်သက်သက် တိုက်ခိုက်တာမျိုးမရှိ ကြောင်း၊ ကျေးရွာတွေကို အခြေပြုပြီး တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တာ ရှောင်ရှားဖို့နဲ့ အရပ်သားတွေကိုအကာကွယ်ယူ တိုက်ခိုက်တာ မျိုး AA အနေနဲ့ ရှောင်ရှားဖို့လိုကြောင်း ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက အရင်က RFA ကို မကြာခဏ ဖြေကြားထားပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/yathaetaung-mine-one-teacher-wound-0505202008 1003.html
ပြည်ထောင်စုဘတ်ဂျက်ပါ ဌာန ၆၀ ကျော်ရဲ့ စုစုပေါင်းအသုံးစရိတ်ဟာ ဒေသဆိုင်ရာဌာန ၂၄ ခုရဲ့ စုစုပေါင်းအသုံးစရိတ် ထက် ဘတ်ဂျက်အရ နည်းနေတယ်လို့ ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် ပြည်သူ့ငွေစာရင်း ‌စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီက ပြောပါတယ်။ မေလ ၇ ရက်က ကျင်းပတဲ့ ဒုတိယအကြိမ် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာ ပြည်နယ် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးမော်မော်ရဲ့ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် ကယားပြည်နယ်ရဲ့ ဘဏ္ဍာငွေ အရသုံးစာရင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူ့ငွေစာရင်းစောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဝင် ဖရူဆိုမြို့နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်ထွန်း (ခ)နော်အီးက ပြောပါတယ်။
“ပြည်ထောင်စုမှ လိုငွေထောက်ပံ့ကြေး ၇၉ ဒသမ ၉ ဘီလီယံကျော်နှင့် ဒေသတွင်း အမှန်တကယ်ရငွေ ၉ ဘီလီယံပေါင်း ၈၈ ဒသမ ၉၃ ဘီလီယံကို ဒေသဘတ်ဂျက်ဌာန ၂၄ ဖွဲ့ကသာ သုံစွဲနေတာဖြစ်လို့ ဘတ်ဂျက်အရ အလွန်များပြားနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုဘတ်ဂျက်ပါ ဌာန ၆၀ ကျော် စုစုပေါင်းအသုံးစရိတ်မှာ ဒေသဘတ်ဂျတ်ပါ ဌာန ၂၄ ခုရဲ့ စုစုပေါင်း အသုံးစရိတ်နဲ့ သိပ်မကွာတာကြောင့် ပြည်ထောင်စု ဘတ်ဂျက်ပါ ဌာနများမှာ ဘတ်ဂျက် အရနည်းလျက်ရှိပြီး ဒေသဘတ် ဂျက် ဌာနတွေက အရများနေတာကို သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါတယ်။
၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု လျာထားချက်မှ ခန့်မှန်းငွေစာရင်းမှာ ရငွေ ၈၈ ဒသမ ၉၃ ဘီလီယံဖြစ်ပြီး သုံးငွေ စုစုပေါင်းမှာလည်း ၈၈ ဒသမ ၉၃ ဘီလီယံ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်ရငွေမှာ ၈ ဘီလီယံကျော်သာရှိပြီး ပြည်ထောင်စုကနေ ထောက်ပံ့ငွေ ၇၉ ဒသမ ၉ ဘီလီယံကျော် ထောက်ပံ့ပေးထားတာတွေ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီနောက် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းစောင့်ကြည့် စစ်ဆေး ရေးကော်မတီရဲ့ စိစစ်ချက်အစီရင်ခံစာကို တင်ပြခဲ့ပြီး ဒီအပေါ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက အကြံပြုဆွေးနွေး နိုင်ဖို့ အမည်စာရင်းတင်သွင်းနိုင်ကြောင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ မနက်ဖြန်မှာတော့ ဘတ်ဂျက် ငွေစာရင်းလျာထားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အတည်ပြုမပြု ဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/arch ives/386602
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မင်းပြားမြို့နယ် ရာမောင်တံတားအောက်မှာ ဈေးဆိုင်ရောင်းချနေတဲ့ အမျိုးသမီးတဦး ဧပြီ ၇ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ဝန်းကျင်လောက်က လက်နက်ငယ်ကျည်ထိမှန် ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။ ရာမောင်တံတားနားက အမ်းသားကျေးရွာက ဈေးရောင်းသူ ဒေါ်အေးချမ်းခိုင် အသက် ၃၆ နှစ်ဟာ လက်နက်ငယ်ကျည်ထိမှန်ခဲ့တာကြောင့် ဘယ်ဘက်ခြေသလုံးမှာ ကျည် ဖောက်ဝင်သွားလို့ မင်းပြားပြည်သူ့ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့ ကာယကံရှင် ဒေါ်အေးချမ်းခိုင်က ဒီဗွီဘီကို ပြော ပါတယ်။
“နေ့လယ် ၂ နာရီလောက်ကဖြစ်မယ် ကျမက ရာမောင်တံတားအောက်ဈေးဆိုင်ဖွင့်ပြီး ဆိုင်ရောင်းနေတာ။ ကလေးနဲ့အတူ ထိုင်နေတာ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကျည်က ကျမဆီကိုလာထိတယ်။ ခြေသလုံးကို ဖောက်ဝင်သွားတယ်။ သားကတော့ဘာမှ မဖြစ် ဘူး။ ရာမောင်တံတားအနားမှာ တပ်မတော်က တပ်စွဲထားတာရှိတယ်။ ဘယ်ကပစ်လိုက်မှန်းတော့ကျမ မသိဘူး။ လက်ရှိမှာ တော့ ခြေသလုံးမှာ ကျည်ဝင်သွားတာကြောင့် မင်းပြားဆေးရုံကို ရောက်ရှိနေပြီး ဓာတ်မှန်ရိုက်ကူးထားတာ အဖြေသိရဖို့စောင့် ဆိုင်းနေတယ်”ဒဏ်ရာက အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်စရာမရှိပေမယ့် လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးလို့လည်း ဒေါ်အေးချမ်းခိုင်က ပြောပါတယ်။
အဆိုပါပစ်ခတ်မှုဟာ ဘယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့ လက်ချက်လည်းဆိုတာကိုတော့ မသိရသေးသလို ဘယ်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ အစည်းကမှလည်း သူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ ထုတ်ဖော်ဝန်ခံလေ့မရှိပါဘူး။ သင်္ဂဟကမ်းလက်လက်ရက္ခိတအဖွဲ့အသင်းဥက္ကဋ္ဌ ကိုအမ်းသားကြီးက “ ဒီနေ့ကတော့ တိုက်ပွဲဖြစ်တာတော့ မကြားမိဘူး။ လေယာဉ်နဲ့လာပစ်နေတာတွေရှိတယ်။ လက်နက်ကြီး တွေနဲ့ ပစ်ခတ်နေတာတွေရှိတယ်။ နောက်ပြီး ရာမောင်နားက ရေတပ် ကလည်း ပစ်ခတ်နေတာတွေရှိတယ်။ တောင်ကုန်းတွေ ကို လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ ပစ်နေတာတွေရှိနေတယ်။ ဖုံသာချောင်းဘက် တောင်တန်းတွေကို တလျှောက်ပစ်နေတာတွေရှိနေ တယ်။ တိုက်ပွဲနဲ့ မသက်ဆိုင်ပဲ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အရပ်သားတွေ သေဆုံးတာ၊ ဖမ်းဆီးခံနေရတာ၊ ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်ခံရပြီး သေဆုံးတာတွေများပြားလာနေပါတယ်။” လို့ ပြောပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/386621
တရုတ်နယ်စပ် ကန်ပိုင်တီနယ်စပ်တွင်ထားရှိသော Quarantine များကို မြစ်ကြီးနားသို့ ရွှေ့ပြောင်းရန် ပြည်နယ်အစိုးရက စီစဉ် နေကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိ Quarantine များကို ထားရှိသောနေတွင် မိုးရာသီဝင်လျှင် မလုံခြုံတော့သဖြင့် မြစ်ကြီးနားနှင့် ဝိုင်းမော်မြို့သို့ ရွှေ့ပြောင်းထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ကချင်ပြည်နယ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားရင်းမြစ်ဝန်ကြီးက ပြောသည်။ “Quarantine တွေကို ထားဖို့ ပြညန်နယ်အစိုးရက လုပ်ပေးနိုင်တာက အဆောက်အဦးဘဲ လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ အဆောက်အဦး ဆိုပေမယ့်လည်း မိုးကာနဲ့ဘဲ အဖြစ်သဘော ဆောက်ထားပေးတယ်။ နောက် ပြည်တော်ပြန်အလုပ်သမားတွေအတွက် ကျန်းမာရေးဆိုလည်း စိတ်ပူရတယ်။ ကန်ပိုက်တီဆိုရင်လည်း ကချင်ပြည်နယ်မှာ အခြားဒေသတွေနဲ့မတူဘဲ အလွန်အေးတဲ့ ဒေသဖြစ်တယ်။ အခုဆို မိုးရာသီချိန်ရောက်လာပြီ။ အကယ်ှုများ မထင်မှတ်ဘဲ လေမုန်တိုင်းတွေ လာမယ်ဆိုရင် စိုးရိမ်စရာရှိ ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သင့်နေတယ်”ဟု သူကပြောသည်။
လက်ရှိ ကန်ပိုက်တီတွင် ၂၁ ရက် Quarantine ခံယူနေသည့် ပြည်တော်ပြန်အလုပ်သမား ၄၀၀ ကျော်ရှိနေပြီး ထိုသူများကို မြစ်ကြီးနား သတ်မှတ်နေရာများသို့ ရွှေ့ပြောင်းရန်ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ပြည်တောင်ပြန် Quarantine ဝင်နေသူများကို ပြည်နယ်အစိုးရ ဘတ်ဂျက်ဖြင့် ကူညီထောက်ပံ့ရန် အစီစဉ်မရှိသေးသဖြင့် အလှူရှင်များဖြင့်သာ ဆက်လက်ရပ်တည်သွားရ မည်ဟု သိရသည်။ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း Quarantine စင်တာ ၂၆၀ ခန့်ရှိပြီး တရုတ်ပြည် လွယ်ဂျယ်ဂိတ်နှင့် ကန်ပိုက်တီ ဘက်မှ ပြန်လာသည့် ကချင်ပြည်နယ် ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပ စုစုပေါင်း ၅၃၄၆ ဦး ရှိနေပြီဟု ပြည်နယ်အစိုးရထံမှ သိရသည်။https://burmese.kachinnews.com/20 20/05/05/%e1%80%80%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%95%e1
ရခိုင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၄) မှ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ကျော်သည် ဦးနှောက်အမြှေးပါးရောင် ရောဂါဖြင့် မေ ၆ ရက် နံနက်က စစ်တွေမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းနှင့် နီးစပ်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အချို့ ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
ဦးကျော်ကျော်သည် ၂၀၁၀ နှင့် ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ နှစ်ကြိမ်ဆက် အနိုင်ရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည်။ ဦးကျော်ကျော်သည် ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီမှ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကာ အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ပါတီမှ နုတ်ထွက်ကာ ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီသို့ ဝင်ရောက်ကာ ပါတီ၏ ဗဟိုအကြံပေးကောင်စီဝင်အဖြစ် ဆောင် ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဦးကျော်ကျော်သည် မြောက်ဦးမြို့ တောင်ရပ် (ဘီအိုစီရပ်ကွက်) ဇာတိဖြစ်ပြီး ဥပဒေဘွဲ့ရတစ်ဦးဖြစ်ကာ အငြိမ်းစား အထက် တန်းပြ ကျောင်းဆရာတစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည့်အပြင် ၎င်းကွယ်လွန်မှုအပေါ် ရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီက ဝမ်းနည်းကြောင်း သဝဏ် လွှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ https://news-eleven.com/article/172573
ဟားခါးတက္ကသိုလ်တွင် Facility Quarantine ထားရှိသူများသည် အပြင်မှ အဖွဲ့အစည်းများ ကူညီမှုကြောင့်သာ အဆင်ပြေနေ ပြီး အစိုးရဘက်မှ ကူညီမှုတစ်ခုမှမရှိဟု စောင့်ကြည့် လူနာ တချို့ထံမှသိရသည်။ “ကျွန်တော်တို့က အဆင်ပြေတယ်။ အပြင်က အဖွဲ့စည်းလေးတွေ ကူညီပေးလို့ပေါ့နော် ဒါပေမယ့်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာ အစိုးရကူညီတာ တစ်ခုမှမရှိဘူး ၊ အပြင်က အဖွဲ့ စည်းတွေ ဘာသာရေးတွေ ဒါတွေကြောင့် အဆင်ပြေတာပါ” ဟု Facility Quarantine ဝင် Pu Cia That က ပြောသည်။
အိမ်သာ၊သန့်ရှင်းရေးတွင်လည်း အတွင်းကျကျ လုပ်ဆောင်မှုမရှိပဲ အပြင်မှသာ စောင့်ရှောက်မှု များလုပ်နေခြင်းကြောင့် အခက်ခဲများရှိနေပြီး ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ အနေဖြင့်လည်း အတွင်းကျကျ စောင်ရွက်မှု့မရှိဟုလည်း သိရသည်။ အိမ်သာကို စောင့်ကြည့်လူနာများမှ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ပြင်ဆင်မှုများလုပ်ခဲ့ပြီး ယခုမှသာ အနည်းနှင့်အများ အသုံးပြုနိုင်သည်ဟုသိရသည်။ “ကျွန်တော်တို့ ဝင်လာကတည်းက သူတို့ လုံးဝမစီစဉ်ခဲ့တာက ရေနဲ့ အိမ်သာဖြစ်တယ်၊ ရေကအခုထိလည်း ပုံမှန်လာတာမရှိပြီး ကျွန်တော်တို့ ပြောမှ ဖွင့်ပေးတယ်၊ အိမ်သာက သူတို့လည်း အထဲဝင်ပြီးလုပ်ဖို့ အဆင်မပြေတော့ ကိုယ့်ဟာကိုပဲလုပ်နေတယ်၊ အိမ်သာပိုက်တွေထဲ မှာလည်း ရွံ့တွေပဲ ပြည့်နေတယ် ၊မနေ့က နည်းနည်း ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြင်လိုက်တော့ အခု နည်းနည်း သုံးလို့ ရတဲ့ဟာတွေတော့ ရှိလာပါပြီ၊”ဟု Facility Quarantine ဝင်သူ တစ်ဦးက ပြောသည်။ လက်ရှိဟားခါးတက္ကသိုလ်တွင် Facility Quarantine ထားရှိသူ ၅၁ ဦးရှိပြီး ၄၈ ဦး မှာ Negative ဖြစ်ပြီး ကျန်သုံးဦးမှာ စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-72662
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က ဦးဆောင်ပြီး Mask ကမ်ပိန်းပြုလုပ်မှု လူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်ခဲ့သဖြင့် ဝေဖန်မှုများရှိခဲ့သည်။ တောင်ကြီးမြို့တွင် ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဆောင်၍ ပြုလုပ်ပြီး ရှမ်းတောင် မြို့နယ်ပေါင်း ၂၁ မြို့နယ်တွင် တပြိုင်နက်ထဲ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တောင်ကြီမြို့ မီးပုံးပျံကွင်းအပေါက်ဝ တွင် မေ ၇ ရက် နံနက် ၇ နာရီတွင် စတင်၍ ကမ်ပိန်းပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပရဟိတလူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့များ စသဖြင့် အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံတို့ ပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့ သည် အဝေရာကုန်းသာယာကွင်းဘေးရှိ လမ်းမပေါ်တွင် ရောင်းချနေသော ယာယီပျံကျ ဈေးသည်များနှင့် ဈေးဝယ်သူများ အား Mask ပေးဝေခြင်း၊ လက်ဆေးရည်၊ အသိပညာပေး လက်ကမ်းစာစောင်များကို ပေးဝေခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အလားတူ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှိ တောင်ကြီး၊ ညောင်ရွှေ၊ ရွှေညောင်၊ ဟိုပုံး၊ ဆီဆိုင်၊ ပင်လောင်း၊ လွိုင်လင်၊ ပင်လုံ၊ ဟဲဟိုး၊ အောင်ပန်း၊ ကလော၊ ပင်ဖြစ်၊ အင်တော၊ ရပ်စောက်၊ နမ့်စန်၊ ဖယ်ခုံ၊ မိုးဗြဲ၊ ရွာငံ၊ ပင်းတယ၊ အေးသာယာ၊ လင်းခေး၊ မောက်မယ်၊ မိုးနဲ၊ မိုင်းပန် စသည့်မြို့များတွင်လည်း Mask ကမ်ပိန်းများ တစ်ပြိုင်နက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ရှမ်းအရှေ့နှင့် ရှမ်းမြောက်တို့တွင်လည်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ ကမ်ပိန်းပြုလုပ်ရာတွင်လည်း Social Distancing ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးကြရန်၊ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ခြောက်ပေခွာပြီး လူစုလူဝေး မဖြစ်ပေါ်စေရေးကို အထူးသတိထား ဆောင်ရွက်ပေးကြပါရန် သတိပေး နှိုးဆော်ထားပြီး၊ ပရဟိတ အသင်းအဖွဲ့များ၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ ဌာနဆိုင်ရာများအားလုံးပူးပေါင်း ပါဝင် ပေးကြရန် တိုက်တွန်းထားကြောင်း စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးညွန့်လွင်က ပြောကြားသည်။ ယင်းသို့ ပြောကြားမှုများ ရှိခဲ့သော်လည်း လူစုလူဝေးများဖြစ်ပေါ်ခဲ့သဖြင့် တောင်ကြီးမြို့ခံအချို့က လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများတွင်ဝေဖန်မှုများ ထွက် ပေါ်လာခဲ့ပြီးနောက် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးညွန့်လွင်က လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာတွင် ပြန်လည် တောင်းပန်ခဲ့ရ သည်။ အဆိုပါ Mask ကမ်ပိန်းကို တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ်ခန့် တစ်လကြာ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးစိုးညွန့်လွင်က ပြော ကြားသည်။ https://news-eleven.com/article/172567
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ တောင်ကုတ်မြို့နယ်၊ ဆားပြင်ကျေးရွာမှ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေဖြင့် ဖမ်းဆီးခံထားရသော ဒေသခံ ၅ ဦးကို ယနေ့ မေလ ၇ ရက်နေ့က အထောက်အထား မခိုင်လုံ၍ မြို့နယ်တရားရုံးက ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သော်လည်း ထပ်မံ ပြန် အဖမ်းခံလိုက်ရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ အဆိုပါ တောင်ကုတ်မြို့နယ်၊ ဆားပြင်ကျေးရွာမှ ဒေသခံ ၅ ဦးကို ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့ က တပ်မတော်သားများ အပါအဝင် ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက စစ်ဆေးစရာရှိသည်ဟုဆိုကာ ခေါ်ယူခဲ့ပြီးနောက် ရက္ခိုင်စစ်တပ် (AA) နှင့်ပတ်သက် ဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟုဆိုကာ အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေဖြင့် ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုသို့ အကြမ်းဖက် ဥပဒေဖြင့် အမှုဖွင့်ကာ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့ပြီး ယနေ့တွင် ချုပ်ရမန် သက်တမ်းစေ့သည့်အတွက် တောင်ကုတ် မြို့နယ် တရားရုံသို့ တရားစွဲတင်ရာတွင် အထောက်အထား ခိုင်လုံမှုမရှိသဖြင့် တရားရုံးမှ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သော်လည်း နောက် ထပ် ဗုံးဖောက်ခွဲမှုတခုဖြင့် ထပ်မံဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခဲ့ရလိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း မိသားစုဝင်များက ပြောသည်။ ယင်းဖမ်းဆီးခံ ထားရသူ ဆားပြင်ကျေးရွာသား ၅ ဦးမှာ ဦးပြုံးချို၊ ဦးသန်းနိုင်၊ ဦးလှဖြူ၊ ဦးအောင်ထူး၊ ဦးအောင်မြင့်တို့ ဖြစ်ပြီး ၎င်းထဲမှ ဦးပြုံးချို မှာ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP) ဝင် တဦးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တောင်ကုတ်မြို့နယ် ANP ပါတီမှ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖေကြွယ် က “ပထမ ဖမ်းတုန်းတော့ သူတို့ကို စည်းရုံး ဟောပြောတယ်။ ငွေကြေး ကောက်ခံတယ်။ ရိက္ခာပို့တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ဖမ်းတာ။ ဒီနေ့ သက်သေအထောက်အထား မခိုင်လုံလို့ တရားရုံးက လွတ်ပေး လိုက်ပြီး နာရီဝက်လောက်အကြာမှာ နောက်ထပ် ဗုံးဖောက်ခွဲမှုနဲ့ ထပ်ဖွင့်ပြီးတော့ ချုပ်ရမန် ယူသွားတယ်”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ ဗုံးခွဲမှုဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ချုပ်ရမန်တောင်းခဲ့ရာတွင် တောင်ကုတ်မြို့နယ် တရားရုံးမှ မေလ ၁၁ ရက်နေ့အထိ ချုပ်ရမန် ၄ ရက်သာ ပေးလိုက်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
တောင်ကုတ်မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးသန်းနိုင်ကတော့ ၎င်းဆားပြင်ကျေး ရွာသား ၅ ဦး၏ အမှုကို တပ်မတော်က တရားလို လုပ် တိုင်တန်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး တောင်းကုတ်မြို့နယ်အတွင်း ဗုံးဖောက်ခွဲသည့် ဖြစ်စဉ်များရှိသည့်အတွက် ဆက်စပ်မှု ရှိမရှိ ဆို သည်ကို စစ်ဆေးရန် ထပ်မံအမှုဖွင့် စစ်ဆေးနေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် တောင်ကုတ်မြို့နယ် အတွင်း နိုင်ငံရေးပါတီများအကြားတွင် ရှုပ်ထွေးမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အတွက် မြို့လုံခြုံရေးကို တင်းကြပ်ထား ကြောင်းလည်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/05/07/222151.html
မြဝတီမြို့တွင် အရေးပေါ်ကာလ ညမထွက်ရအမိန့် ထုတ်ပြန်ထားသော်လည်း လိုက်နာမှုမရှိဘဲ ငါးဂိမ်းလောင်း ကစားရုံ ဖွင့်လှစ်ထားသူနှင့် လာရောက်ကစားသူများကို မေ ၆ ရက်၊ နံနက် ၂ နာရီခန့်တွင် ဖမ်းဆီးလိုက်သည် ဟု မြဝတီမြို့မရဲစခန်း တာဝန်ရှိများက ပြောသည်။
ကိုဗစ် ကာလ ညမထွက်ရ အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားစဉ် အဖွဲ့စုံပါသည့် လှည့်ကင်းအဖွဲ့က မြဝတီမြို့နယ်အတွင်း ကင်းလှည့် ဆောင်ရွက်နေစဉ် မြဝတီမြို့၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂)ချစ်ကြည်ရေးလမ်း၊ ခြံကွက်တစ်ခု အတွင်း ငါးဂိမ်းလောင်းကစား ရုံသည် ပိတ်ထားခြင်းမရှိဘဲ လောင်းကစား ပြုလုပ်နေသည့်အတွက် ဝင်ရောက် ရှာဖွေဖမ်းဆီးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဝင်ရောက်ရှာဖွေစဉ် အစဉ်အလာအတိုင်း ငါးဂိမ်းလောင်းကစားရုံ မန်နေဂျာ၊ ကိုစိုင်း ဆိုသူသည် ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင် သွားပြီး လောင်းကစားပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည့် ငါးမန်းလောင်းကစား ဂိမ်းစက် ၆ လုံး နှင့်အတူ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ လောင်းကစားပြုလုပ်ကြသူ ၁၁ ဦး ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖမ်းမိ ဖြစ်စဉ်အပေါ် လောင်းကစားရုံ မန်နေဂျာ ကိုစိုင်းဆိုသူကို (ပ)၃၇၁/၂၀၂၀ လောင်းကစား ဥပဒေ၊ ပုဒ်မ- ၁၆(က)/ ၁၇(က) တို့ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူထားကြောင်း မြဝတီမြို့မရဲစခန်းက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။ မြဝတီမြို့တွင် ကိုဗစ် အရေးပေါ်ကာလ ည ၁၀ နာရီမှ မနက် ၄ နာရီထိ ညမထွက်ရ အမိန့်ကို ဧပြီ ၁၈ရက်က ထုတ်ပြန်ထားပြီးနောက် ပြည်သူများ လိုက်နာမှုရှိမရှိ သိရှိနိုင်ရန် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပူးပေါင်းအဖွဲ့က ညစဉ် လှည့်ကင်းများဖြင့် စောင့်ကြည့် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာမှု မရှိသူများကို ဧပြီ ၂၀ ရက်နေ့ ညပိုင်းမှစ၍ ဖမ်းဆီးအရေးယူမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မေ ၅ ရက်နေ့ထိ အမိန့်မလိုက်နာသူ လူ ၃၀၀ ဦးကျော် ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ http://kicnews.org/202 0/05/%e1%80%8a%e1%80%99%e1%80%91%e1%80%bc%e1%80%80%e1%80
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားအတွင်း ပြည်တော်ပြန်များကို Quarantine ထားရှိနေရာများတွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် လုပ်အားပေးရန် လူအင်အား လိုအပ်နေသည်ဟု Kachin State Covid-19 Prevention Network မှ သိရသည်။
“ကျွန်မတို့က မြို့တွင်းမှာရှိတဲ့ Quarantine စင်တာနဲ့ ရပ်ကွက်တွေမှာ ဆေးဖျန်းတာလုပ်တယ်။ အခုနောက်ပိုင်းက လူအင် အားပိုလိုအပ်လာတာပေါ့။ Quarantine စင်တာက ၄ ခုရှိတယ်။ တစ်နေရာမှာက ၂ ယောက်စီထားပေးတယ်။ ဆေးဖျန်းတဲ့ အပိုင်းဆိုရင်လည်း တစ်ဖွဲ့မှာ ၄ ယောက်လောက်လိုတယ်။ အဲ့ဒီလူတွေဘဲ နေ့တိုင်းလုပ်လို့မရဘူး။ ညဆိုရင်လည်း တအား နက်တဲ့အထိ လုပ်ရတဲ့အတွက် အိပ်ရေးပျက်တာတွေဖြစ်တာပေါ့။ ပြီးရင်အခုဆို Volunteer လုပ်တဲ့ ကာလဆို တစ်လ လောက်ရှိသွားပြီ။ အဲ့တော့ ဆေးဖျန်းတဲ့ ပထမ အသုတ်ကို ပြန်နားခိုင်းရတယ်။ အဲ့တော့ လူအင်အားနည်းသွားတာပေါ့။ လူအင်အားက ၃၀ လောက်ဘဲရှိတယ်။ အခုဆို ၁၀ ယောက်ဘဲ ကျန်တော့တယ်”ဟု Kachin State Covid-19 prevention Network မှ မဆိုင်းနူးပန် ပြောသည်။ အစိုးရသတ်မှတ်ထားသည့် ပြည်တော်ပြန် Quarantine စင်တာများအပြင် ရပ်ကွက် အတွင်း ရောဂါကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၆၀ ကျော် လိုအပ်နေသည်ဟု ထပ်မံပြော ဆိုသည်။
ထို့ကြောင့် Volunteer အဖြစ်ပါဝင်လိုသူများကို လူမှုကွန်ယက်မှတဆင့် ခေါ်ယူသွားမည်ဟုသိရသည်။ ပြည်နယ်အတွင်း ပြည်တော်ပြန်များနှင့် Quarantene ဝင်နေသူများကို အစိုးရမဟုတ်သော အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အင်အားဖြင့် ရောဂါကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်နေကြသည်။ https://burmese.kachinnews.com/202 0/05/06/covid19%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%
ကိုဗစ် -၁၉ စတင်ဖြစ်ပွားရာ တရုတ်ပြည် ဝူဟန်မြို့တွင် အကျဉ်းကျသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ၂၆၀ ကျော် ယနေ့ မနက်ပိုင်းက သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်မြို့သို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာကြောင်း သိရသည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ၂၆၀ ကျော်အား မေလ ရ ရက် ယနေ့မနက်ပိုင်း က တရုတ်အာဏာပိုင်များက မြန်မာအာဏာပိုင်များထံ လွှဲအပ်ပေးရာ ထိုအထဲတွင် ကိုဗစ် စတင်ဖြစ်ပွါးရာ ဝူဟန်မြို့၌ အကျဉ်းကျသူ ၁၄၁ ဦး ပါဝင်ကြောင်း မူဆယ်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသူရိန် ကသျှမ်းသံတော်ဆင့် သို့ ပြောသည်။
ထိုသူများကို ယနေ့ မနက်ပိုင်း တရုတ်အာဏာပိုင်များက သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်မြို့နယ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။“ ဒီနေ့ တရုတ်ပြည် ဝူဟန်မြို့က ၁၄၁ ဦး၊ တခြားပြည်နယ်နဲ့ဆိုရင်တော့ ၂၆၀ ကျော်ရှိတယ်။ မနေ့က လည်း တရုတ်ဘက်က ၅၈ ဦး လွှဲပြောင်းပေးတယ်”ဟု မူဆယ်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသူရိန် က သျှမ်းသံတော်ဆင့် သို့ ပြောသည်။ တရုတ်ပြည် ထောင်အသီးသီးမှလွှဲပြောင်းလာခဲ့သူများအားလုံးကို လက်ရှိမှာ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးနေကြောင်း၊ ကျန်းမာရေးအတွက် ဖျားနာမှုရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးသည့်အပြင် ကျန်းမာရေး ဌာန မှ ညွှန်ကြားထားသည့် တဲ့ HIV/ AIDS ကိုလည်း ထည့်သွင်းစစ်ဆေးပေးကြောင်း သိရသည်။
ဝူဟန်မြို့အကျဉ်းထောင်မှ အကျဉ်းသားများပါလာသည့်အတွက် စိုးရိမ်မှုများစွာရှိကြောင်း၊ ထိုသူများကို ကျန်းမာရေး စစ်ဆေး မှု သေချာစွာ ပြုလုပ်ပေးသင့်ကြောင်း၊ ကိုဗစ် -၁၉ ရှိ၊မရှိ လည်း ဓာတ်ခွဲခန်း နမူနာ ပေးပို့ကာ စစ်ဆေးသင့်ကြောင်း မူဆယ် ဒေသခံများက ပြောသည်။ ထိုသူများအတွက် နေရေးထိုင်ရေးကို မူဆယ်မြို့ သက်ဆိုင်ရာ ဌာန၊ မူဆယ်ဒေသခံများ နှင် ပရဟိတ အဖွဲ့တို့က ပူးပေါင်းကာဆောင်ရွက်ကြကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ် မူဆယ်မြို့ရှိ နယ်စပ်ဂိတ်များကို တရုတ်နိုင်ငံမှ ဧပြီ ၁ ရက် မှစတင်ကာ ဝင်၊ထွက်ခွင့် ရက်အကန့် အသက်မရှိ ပိတ်လိုက်သည်။ https://burmese.sha nnews.org/archives/16453
မှတ်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာ သတင်းမီဒီယာအသီးသီးမှ ကောက်နုတ်ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
*** ပြီး ***
၁။ KNU ၏ COVID-19 ကာကှယျရေး ဂိတျကို တပျမတျောမှ မီးရှို့ဖကျြဆီး၍ ပဈခတျမှုဖွဈပှားခဲ့
၂။ ကယားပွညျနယျ အစိုးရ၏ ဒသေန်တရအမိနျ့ လူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျဟု ဝဖေနျခံရ
၃။ စဈဘေးရှောငျမြားအတှကျ ထောကျပံ့သညျ့ စားနပျရိက်ခာတခြို့ AA ထံ ရောကျနေ
၄။ စဈဘေးရှောငျမြားအတှကျ အကူအညီမြား သယျဆောငျပေးနသေညျ့ ယာဉျမြားကို ပဈခတျတားဆီးခွငျး၊ ခွိမျးခွောကျ ခွငျး နှငျ့ ရိက်ခာပစ်စညျးမြားအား လုယကျဖကျြဆီးခွငျးမြား မပွုလုပျရနျ ခငျြးလူငယျမြားကှနျရကျ တောငျးဆို
၅။ ကခငျြပွညျနယျလှတျတျောအစညျးအဝေးအတှကျ ကိုယျစားလှယျမြား Quarantine ဝငျရမညျ
၆။ မွနျမာစဈတပျနဲ့ AA တို့ အပဈရပျကွဖို့ ခငျြးလူငယျအဖှဲ့တောငျးဆို
၇။ နမျ့ခမျး တောငျသူမြား ရှလေီမွဈထဲသို့ ပွောငျးမြား သှနျပဈနရေ
၈။ ကယားပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့ရှိ ဌာနဆိုငျရာအခြို့တှငျ အရာရှိဦးရထေကျ ယာဉျအစီးရမြေားနေ အသုံးပွုခွငျးမရှိဘဲ ထိနျးသိမျးစရိတျမြား၊ အလေးထားစဈဆေးပေးရနျ ပွညျနယျလှတျတျော ပွညျသူ့ငှစောရငျး ကျောမတီပွောကွား
၉။ တပျမတျောစဈကွောငျး ဝငျရောကျနရောယူတဲ့အတှကျ မငျးပွားရှာသား ၄၀ဝဝ ကြျောထှကျပွေးနေ
၁၀။ မွနျမာကို ငှကွေေးခဝါခမြှု အမညျပကျြစာရငျးထဲ ထညျ့သှငျးဖို့ အီးယူ ပွငျဆငျ
၁၁။ COVID-19 ကာကှယျထိနျးခြုပျရေး မှနျပွညျသဈပါတီက အစိုးရကနျြးမာရေးဌာနမြားနှငျ့ ပူးပေါငျးမညျ
၁၂။ ရဖွေူမွို့နယျတှငျ ရှာသားတဈဦး မွမွှေုပျမိုငျးကွောငျ့ ခွတေဈဖကျပွတျ
၁၃။ KNU/KNLA-PC ဥက်ကဋ်ဌ ဗိုလျခြုပျကွီး စောဌေးမောငျ ဈာပန ကငျြးပပွီးစီး
၁၄။ ရဲအယောငျဆောငျဖမျးဆီးဖို့ ကွိုးစားသူတှကွေောငျ့ တောငျကုတျ NLD အဖှဲ့ဝငျတှေ တိမျးရှောငျနရေ
၁၅။ ဟားခါးတက်ကသိုလျတှငျ ထားရှိသညျ့ Facility Quarantine လုပျသူမြား ဝငျရောကျပုံမှာ မမှနျကနျဟုဆို
၁၆။ NCA ထိုးအဖှဲ့မြားနှငျ့ သမ်မတ ဖှဲ့စညျးသညျ့ COVID-19 ပူးပေါငျးသညျ့ ကျောမတီတို့ အလှတျတှဆေုံ့
၁၇။ ရှေးကောကျပှဲအစီအစဉျအတှကျ ညှိနှိုငျးဖို့ ပါတီတခြို့ လိုလား
၁၈။ မှနျပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျက သထုံဆေးရုံ နှငျ့ ရေးမွို့နယျဆေးရုံတို့၌ အသကျရှူစကျနှဈခုစီရှိဟု ပွောကွားခဲ့သျော လညျး မွပွေငျအခွအေနေ နှငျ့ ကှဲလှဲနဟေု လှတျတျောကိုယျစားလှယျမြား ပွောကွား
၁၉။ ရသတေ့ောငျမှာ ကြောငျးဆရာမတဈဦး မိုငျးထိလို့ ဒဏျရာရ
၂၀။ ကယားပွညျနယျလှတျတျော အရေးပျေါအစညျးအဝေးတှငျ ဘတျဂကျြကိစ်စဆှေးနှေး
၂၁။ ရာမောငျတံတားအနီး ဈေးသညျအမြိုးသမီး ၁ ဦး လကျနကျကညျြထိမှနျ ဒဏျရာရ
၂၂။ ကနျပိုငျတီ Quarantine မြားကို မွဈကွီးနားသို့ ပွောငျးရှရေ့နျစီစဉျနေ
၂၃။ ရခိုငျပွညျနယျ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ (၄) အမြိုးသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးကြျောကြျော ကှယျလှနျ
၂၄။ ဟားခါးမွို့ Facility Quarantine ထားရှိမှုတှငျ အဆငျပွနေသေျောလညျး အစိုးရ ကူညီမှုကွောငျ့မဟုတျဟုဆို
၂၅။ ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့က ဦးဆောငျပွီး Mask ကမျပိနျးပွုလုပျမှု လူစုလူဝေး ဖွဈပျေါခဲ့သဖွငျ့ ဝဖေနျခံရ
၂၆။ တရားရုံးက လှတျပေးသညျ့ တောငျကုတျ ဒသေခံ ၅ ဦး ဗုံးခှဲမှုဖွငျ့ ပွနျအဖမျးခံရ
၂၇။ ညမထှကျရအမိနျ့ ထုတျထားခြိနျ မွဝတီတှငျ ငါးဂိမျးလောငျးကစားရုံ ဖမျးမိ
၂၈။ COVID-19 ရောဂါကာကှယျရေး စတေနာ့ဝနျထမျးမြား ထပျမံ လိုအပျ
၂၉။ ကိုဗဈမှေးရပျ ဝူဟနျတှငျအကဉျြးကသြူ မွနျမာနိုငျငံသားမြား မူဆယျနယျစပျဂိတျသို့ ပွနျရောကျ
ဖာပှနျ-ကမမောငျး ကွားတှငျရှိသော KNU -ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး မူတွျော(ဖာပှနျ) (တပျမဟာ-၅) ခရိုငျ ၏ COVID-19 ရောဂါကာကှယျတားဆီးရေး ဂိတျ(၂)ခုကို မွနျမာ့တပျမတျောက ယမနျနေ့ (မလေ ၆ ရကျ)တှငျ ဝငျရောကျ မီးရှို့ဖကျြဆီးခဲ့ခွငျး ကွောငျ့ နှဈဖကျအကွား တငျးမာမှုဖွဈပှားခဲ့ကွောငျး ကအေဲနျယူ တပျမဟာ(၅) ဘကျက ပွောသညျ။
မူတွျော(ဖာပှနျ)ခရိုငျ၊ ဒှယျလိုးမွို့နယျ၊ လေးဖိုထ ကြေးရှာအုပျစု၊ ဝါသိုးခိုကြေးရှာနှငျ့ ကတိုငျတိ ကြေးရှာအုပျစု၊ ဖားလို့ လမျးခှ တို့တှငျ ကအေဲနျယူ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးမြားနှငျ့ ကရငျအမြိုးသားရဲတပျဖှဲ့(KNPF)တို့မှ ၎င်းငျးတို့ ထိနျးခြုပျ နယျမွမြေားအတှငျး ကိုဗဈရောဂါ ကူးစကျပွနျ့ပှားမှုမရှိစရေနျ လိုအပျသညျ့ ကနျြးမာရေး စဈဆေးမှုမြား လုပျဆောငျနစေဉျ တပျမတျော အမှတျ(၈) စဈကှပျကဲရေးဌာနခြုပျ(စကခ)လကျအောကျခံ ခွမွေနျတပျရငျး (ခမရ-၄၀၅)နှငျ့ (ခမရ-၄၁၀) မှ ဝငျရောကျတားမွဈပွီး ဂိတျ စခနျးမြားကို မီးရှို့ခဲ့ကွောငျး မူတွျောခရိုငျ၏ ကနျြးမာရေးမှူး စောညှနျ့ဝငျးက ယခုလိုပွောသညျ။ “မနကေ့ စဈတပျက လာပွီး တော့ ကနြျောတို့ခထြားတဲ့ဝါသိုးခိုက ကနျြးမာရေးဂိတျတဲကိုလာဖကျြပဈလိုကျတယျ။ နောကျပွီး ဖားလို့လမျးခှမှာရှိတဲ့ ကနြျော တို့ ဂိတျမှာ တာဝနျရှိတဲ့သူတှကေို မောငျးထုတျပွီး ဂိတျတဲ တှကေို မီးရှို့လိုကျတယျ။ ဒါက သူတို့(စဈတပျ) နယျမွတေဲ့ မငျးတို့ လာပွီးရှိနစေရာမလိုဘူးဆိုပွီး သူတို့က ကနြျောတို့ကို ပွောပွီးမောငျးထုတျလိုကျတာပဲ”ဟု ၎င်းငျးက ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။
ထိုသို့ တပျမတျောဘကျက လာရောကျတားမွဈမောငျးထုတျမှုမြား ပွုခွငျးကွောငျ့ ယမနျနေ့ နလေ့ညျ ၁၂ နာရီ ၁၂ မိနဈနှငျ့ ၂ နာရီကြျောတှငျ ဝါသိုးခိုကြေးရှာ၌ ပဈခတျမှုနှဈကွိမျဖွဈပှားခဲ့ပွီး ညနေ ၃ နာရီ ၄၁ မိနဈခနျ့တှငျ ကတိုငျတိ ကြေးရှာအုပျစု ဖားလို့လမျးခှရှိ မီးရှို့ခံခဲ့ရသညျ့ဂိတျတဲနားတှငျ ပဈခတျမှုတဈကွိမျ စုစုပေါငျး ပဈခတျမှုသုံးကွိမျဖွဈပှားခဲ့ကွောငျး စောညှနျ့ဝငျး က ဆကျပွောသညျ။ ထို့အပွငျ ယနေ့ မလေ ၇ ရကျနအေ့ခြိနျထိ နှဈဖကျကွား ပဈခတျမှု အနညျးငယျရှိသေးပွီး ၎င်းငျး ပဈခတျမှု မြားကွောငျ့ တပျမတျောဘကျတှငျ ထိခိုကျကဆြုံးမှု ရှိ၊ မရှိ မသိရသေးဘဲ ကအေဲနျယူဘကျတှငျ ထိခိုကျမှုမရှိကွောငျး ၎င်းငျး ပဈခတျမှုမြားကွောငျ့ ဝါသိုးခိုဒသေခံအခြို့မှာ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျနကွေရကွောငျး ကအေဲနျယူက ဆိုသညျ။ အဆိုပါ ကိစ်စရပျ နှငျ့ ပတျသကျပွီး အရှတေ့ောငျတိုငျး စဈဌာနခြုပျ(ရတခ) ပွောခှငျ့ရ ဗိုလျမှူးကွီး မောငျမောငျလတျက “ ကနြျောတို့ ဆီတော့ တငျပွထားတာမရှိသေးဘူး။ ကနြျော မသိသေးလို့လေ။ ကနြျော အခုလိုကျ မေးလိုကျပါအုံးမယျ” ဟု ယနေ့ နလေ့ညျတှငျ ကအေိုငျစီသို့ပွောသညျ။
ကအေဲနျယူ အနဖွေငျ့ ၎င်းငျးတို့ ထိနျးခြုပျနယျမွမြေားအတှငျး COVID-19 ကပျရောဂါ ကူးစကျပွနျ့ပှား မှုမရှိစရေေး အတှကျ မတျလ ၂၈ ရကျနကေ့ ကအေဲနျယူ(ဗဟို)မှ ကိုဗဈကပျရောဂါ အရေးပျေါ တုနျ့ပွနျဆောငျရှကျရေးအဖှဲ့ (Covid Pandemic Emergency Respond Team)ကို ဖှဲ့စညျးပွီး ၎င်းငျးတို့ နယျမွအေသီးသီးတှငျ ကနျြးမာရေး အသိပညာပေးမှုမြား၊ ရောဂါ ကာကှယျတားဆီးရေး လုပျငနျးစဉျမြား၊ ဒသေတှငျး စညျးမဉျြးစညျး ကမျးမြားကို ထုတျပွနျပွီး ၎င်းငျးတို့ တပျမဟာ၊ ခရိုငျ၊ တပျရငျး၊ တပျစိပျအသီးသီးကို ညှနျကွားခကျြပေး ပို့လုပျဆောငျခဲ့သညျ။ http://kicnews.org/2020/05/knu%e1%81%8f-covid-19-%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%80%e1%80
ကယားပွညျနယျအတှငျး မလေ ၃ ရကျနေ့ ရကျစှဲပါ ဒသေန်တရအမိနျ့သညျ လူ့အခှငျ့အရေးနှငျ့ ဒီမိုကရစေီ စံခြိနျစံနှုနျးမြားကို ခြိုးဖောကျနသေညျဟုဆိုကာ ကယားပွညျနယျ ဒသေခံမြားက ကနျ့ကှကျလကျြရှိသညျ။ ကယားပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့ရုံး၏ တရားဝငျ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာ၌ မလေ ၃ ရကျနေ့ ည ၁၀ နာရီ ၁၂ မိနဈ အခြိနျတှငျ ကယားပွညျနယျအတှငျးရှိ အမြား ပွညျသူမြား သိရှိလိုကျနာ ဆောငျရှကျရနျ မွို့နယျ ၇ မွို့နယျ (လှိုငျကျော၊ ဘော လခဲ၊ ဒီးမော့ဆို၊ဖရူဆို၊ ရှားတော၊ဖားဆောငျး၊ မယျစဲ့) မှ ဒသေန်တရ အမိနျ့ထုတျပွနျခွငျးဟူ၍ ဖျောပွခဲ့သညျ။
သကျဆိုငျရာ မွို့နယျအသီးသီးမှ အုပျခြုပျရေးမှူးမြား လကျမှတျရေးထိုးထားသညျ့ အဆိုပါ ဒသေန်တရအမိနျ့တှငျ အမြား ပွညျသူ အကြိုးငှာ ရညျရှယျ၍ ပွညျသူမြားအနဖွေငျ့ စညျးကမျးခကျြ ၁၀ ခကျြကို တိကစြှာ လိုကျနာဆောငျရှကျရနျနှငျ့ ပကျြကှကျပါက တညျဆဲဥပဒမြေားနှငျ့အညီ အရေးယူခွငျး ခံရမညျဖွဈကွောငျးလညျး သတိပေးထားသညျ။ ကရငျနီပွညျလူငယျမြားသမဂ်ဂ (UKSY) တှဲဖကျအတှငျးရေးမှူး (၂) ခှနျးသောမတျက “လှတျလှတျလပျလပျ ကိုယျ့ဆန်ဒကို ထုတျဖျောလို့မရအောငျ အမိနျ့ အာဏာနဲ့ အသုံးခပြွီး ထုတျပွနျလိုကျတယျလို့မွငျတယျ။ ဒီဟာကို ကနျ့ကှကျသလို သကျဆိုငျရာအစိုးရက လူ့အခှငျ့အရေးနဲ့ မညီတဲ့ ဒီမိုကရစေီစံနှုနျး ခြိုးဖောကျထားတဲ့ ဒီဒသေန်တရအမိနျ့ကို ရုပျသိမျးပေးဖို့ ပွောခငျြတယျ” ဟု ဧရာဝတီကို ပွောသညျ။
အဆိုပါ ဒသေန်တရအမိနျ့ပါ စညျးကမျးခကျြ ၁၀ ခကျြအနကျ နိုငျငံတျောနှငျ့နိုငျငံတျောအစိုးရ အဖှဲ့အစညျးမြားအားအကွညျအညို ပကျြစမေညျ့ အပွောအဆို၊ အရေးအသား၊ ရုပျပုံကားခပျြ၊ ပိုစတာ၊ ဗီနိုငျး၊ လကျကမျး စာစောငျမြား စသညျတို့ကို နညျးလမျး အမြိုးမြိုးဖွငျ့ မညျသညျ့နရောတှငျမြှ မပွုလုပျရဟူ၍ ပါရှိသညျ။ ထို့ပွငျ ပွညျသူလူထုအား ထငျယောငျထငျမှားဖွဈစမေညျ့ စကားလုံးအသုံးအနှုနျးဖွငျ့ လှုံ့ဆျော၊ စညျးရုံးခွငျး၊ ထုတျဖျော ပွောဆိုခွငျးမြား မပွုလုပျရ၊ ဥပဒနှေငျ့ မညီညှတျသော မဟုတျ မမှနျသညျ့ အခကျြအလကျမြား ပါဝငျသော သဘောထားမြား ထုတျပွနျ၊ ဖျောပွဆောငျရှကျခွငျးတို့ မပွုလုပျဟူ၍လညျး ဖျောပွ ထားသညျ။
လှိုငျကျောအခွစေိုကျ Lain နညျးပညာ အထောကျအကူပွု အဖှဲ့ဝငျဖွဈသလို ပွညျနယျအရေး စောငျ့ကွညျ့လလေ့ာ နသေူ လညျး ဖွဈသညျ့ ကိုကြျောထငျအောငျက အဆိုပါ ဒသေန်တရအမိနျ့သညျ ဒီမိုကရစေီစံနှုနျးနှငျ့ မညီသကဲ့သို့ ၂၀ဝ၈ ဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံဥပဒပေါ နိုငျငံသားမြား၏ မူလအခှငျ့အရေးကို ကြျောလှနျနသေညျ့ ထုတျပွနျခကျြဟု သုံးသပျသညျ။“ကပျရောဂါနဲ့ လညျး ဘာမှမသကျဆိုငျတဲ့ ထုတျပွနျခကျြဖွဈလို့ ဒါသညျ လုံးဝ မလိုအပျဘူး။ ထုတျလညျး မထုတျပွနျ သငျ့ဘူး” ဟု ၎င်းငျးက ပွောသညျ။ ကနြျော တို့အခှငျ့အရေးကို အဲဒီလိုပဲ လုပျလို့ရတဲ့ အာဏာကို အသုံးခပြွီး ထုတျပွနျနအေုံးမယျဆိုရငျ ကနြျောတို့ ဖျောဆောငျခငျြတဲ့ လမျးကွောငျးတှေ၊ စုပေါငျးလုပျဆောငျခငျြတဲ့ လမျးကွောငျးတှေ ရောကျမှာ မဟုတျဘူး” ဟုလညျး ခှနျးသော မတျက ထောကျပွသညျ။ ဖရူဆိုမွို့နယျ ပွညျသူ့လှတျတျော ကိုယျစားလှယျ ဦးပဲ့ဒူက ပွညျနယျအစိုးရအနဖွေငျ့ လုပျစရာရှိသညျကို လုပျနသေလို ဝဖေနျသူမြားအနဖွေငျ့လညျး လှတျလပျစှာ သဘောထားကှဲလှဲခှငျ့ ရှိသညျ့အတိုငျး ၎င်းငျးတို့၏ ဆန်ဒကို ဖျောထုတျနခွေငျး ဟုသာ မွငျမိကွောငျး မှတျခကျြပွုသညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/05/05/ 222033.html
ရခိုငျပွညျနယျ မွောကျပိုငျးတှငျ စဈဘေးရှောငျ ဒုက်ခသညျမြားအတှကျ နိုငျငံတကာမှ ထောကျပံ့သညျ့ စားနပျရိက်ခာတခြို့မှာ ရက်ခိုငျစဈတပျ (AA) လကျထဲသို့ နညျးလမျးမြိုးစုံဖွငျ့ ရောကျရှိနသေညျဟု တပျမတျောနှငျ့ အစိုးရတာဝနျရှိသူမြားကပွောသညျ။ စဈဘေးရှောငျမြားအတှကျ လူသားခငျြး စာနာထောကျထားမှု အကူအညီမြားရရှိရနျ ဝေးလံပွီး သှားလာရခကျခဲသော နရော မြား၌ အပွညျပွညျဆိုငျရာ ကွကျခွနေီအဖှဲ့ (ICRC) ကို သှားလာ ဝငျထှကျခှငျ့ပွုထားပွီး ၎င်းငျးတို့ထောကျပံ့သော ရိက်ခာအခြို့မှာ ရပျ/ကြေး အုပျခြုပျရေးမှူးမြားမှ တဆငျ့ AA ထံလှဲပွောငျးပေးခဲ့သညျ့ ဖွဈစဉျမြား ရှိနသေညျဟု သမ်မတရုံး ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဦးဇျောဌေးက ပွောသညျ။
AA ၏ တပျစခနျးမြားကို သိမျးဆညျးရာတှငျ နိုငျငံတကာ အထောကျအပံ့ ပစ်စညျးမြားကိုပါ တှရှေိ့သိမျးဆညျးရသညျ့ ဖွဈစဉျ မြားလညျး ရှိသလို ဖမျးဆီးရမိသူမြားကို စဈဆေး ပျေါပေါကျခကျြမြား အရလညျး AA သညျ အထောကျပံ့ရိက်ခာမြား ရရှိခွငျးကို အတညျပွုနိုငျကွောငျး တပျမတျော ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဗိုလျမှူးခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးက ဆိုသညျ။ AA နှငျ့ ဆကျသှယျပွီး ထိုကဲ့သို့ လုပျဆောငျသူမြားအား ဥပဒနှေငျ့အညီ အရေးယူခွငျးမြားကို လုပျဆောငျရမညျဖွဈပွီး စဈဘေးရှောငျ ဒုက်ခသညျမြား လကျဝယျ စားနပျရိက်ခား ရောကျရှိရနျမညျသညျ့နညျးလမျးကို အသုံးပွု၍ လုပျဆောငျရမညျကို အဖွရှောသငျ့ကွောငျး ရခိုငျပွညျနယျ မွပေုံ မွို့နယျ ပွညျသူ့လှတျတျော ကိုယျစားလှယျ ဦးဖသေနျးက ပွောသညျ။
နိုငျငံတကာ အထောကျအပံ့ ရိက်ခာမြား AA ထံ ရောကျရှိနသေညျ ဆိုသညျ့ အကွောငျးအရာမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ AA က တစုံ တရာ ထုတျပွနျ ဖွရှေငျးထားသညျကို မတှရေ့သေးသျောလညျး WFP ယာဉျတနျး တိုကျခိုကျမှု အပါအဝငျ WHO၊ ICRC အဖှဲ့ နှငျ့ အရပျသား ယာဉျမြားကို ပဈခတျတိုကျခိုကျသညျမှာ AA လကျခကျြ မဟုတျကွောငျး တပျမတျော၏ တဖကျသတျ စှပျစှဲ ခကျြမြားသာ ဖွဈကွောငျး သတငျးထုတျပွနျထားသညျ။ ရခိုငျပွညျနယျတှငျ တပျမတျောနှငျ့ AA တို့ ဖွဈပှားသညျ့ တိုကျပှဲမြား ကာလအတှငျး အမြိုးသမီးနှငျ့ ကလေးငယျမြား အပါအဝငျ အရပျသား ထိခိုကျသဆေုံးမှုမြားရှိနပွေီး တိုကျပှဲမြားကွောငျ့ နရေပျ စှနျ့စှာ တိမျးရှောငျ ထှကျပွေးနရေသညျ့ စဈဘေးရှောငျ ပွညျသူ ၁ သိနျးကြျော ရှိပွီ ဖွဈသညျ။ https://burma.irrawaddy .com/news/2020/05/05/222044.html
၄။ စဈဘေးရှောငျမြားအတှကျ အကူအညီမြား သယျဆောငျပေးနသေညျ့ ယာဉျမြားကို ပဈခတျတားဆီးခွငျး၊ ခွိမျးခွောကျ ခွငျးနှငျ့ ရိက်ခာပစ်စညျးမြားအား လုယကျဖကျြဆီးခွငျးမြား မပွုလုပျရနျ ခငျြးလူငယျမြားကှနျရကျ တောငျးဆို
စဈဘေးရှောငျမြားအတှကျ လူသားခငျြး စာနာထောကျထားသညျ့ အကူအညီမြား၊ သယျဆောငျပေးနသေညျ့ ကူညီရေးယာဉျ မြားအား ပဈခတျတားဆီးခွငျး၊ ခွိမျးခွောကျခွငျးနှငျ့ စဈဘေးရှောငျမြား၏ ရိက်ခာပစ်စညျးမြားအား လုယကျဖကျြဆီးခွငျးမြား၊ ဒသေခံ ခငျြး လူထုထံမှ ငှကွေေးကောကျခံခွငျးနှငျ့ ကွကျ၊ ဝကျ၊ ဆနျ စသော စားနပျရိက်ခာမြားအား အတငျးအဓမ်မ ယူဆောငျ ခွငျးမြား မပွုလုပျရနျ ခငျြးလူငယျမြားကှနျရကျက မေ ၃ ရကျ ရကျစှဲဖွငျ့ ကွညောခကျြထုတျပွနျတောငျးဆိုသညျ။
၂၀၁၅ ခုနှဈမှ လကျရှိအခြိနျအထိ ခငျြးပွညျနယျအတှငျး ဖွဈပှားနသေော တပျမတျောနှငျ့ AA တို့၏ တိုကျပှဲမြားကွောငျ့ ခငျြး လူမြိုးအရပျသား သဆေုံးသူ ၃၃ ဦး၊ ဒဏျရာရရှိသူ ၄၀ ကြျော၊ မတရားဖမျးဆီးခံ ရသူ ၂၀ ကြျော၊ စာသငျကြောငျးပေါငျး ၁၀၈ ကြောငျးကြျော ပိတျထားရပွီး ရှာပေါငျး ၂၁ ရှာကြျော ဖကျြဆီးခံရကာ လူဦးရတေဈသိနျးကြျောမှာ တိုကျပှဲမြားကွောငျ့ ဒုက်ခ ရောကျနကွေောငျး ခငျြးလူငယျကှနျရကျ၏ ထုတျပွနျခကျြတှငျ ပါဝငျသညျ။
ခငျြးပွညျနယျနှငျ့ ရခိုငျပွညျနယျရှိ ကြေးရှာမြားတှငျ လကျနကျကွီးမြားဖွငျ့ ပဈခတျခွငျး၊ အရပျသားမြားအား လူသားဒိုငျးအဖွဈ အသုံးခခြွငျး၊ အရပျသားမြားအပျေါ စဈရာဇဝတျမှုမြား ကြူးလှနျခွငျးနှငျ့ အရပျသားမြား နထေိုငျရာ မွို့ရှာမြားတှငျ စဈရေး လှုပျရှားမှုမြားနှငျ့ ပတျသကျသညျ့ မညျသညျ့လှုပျရှားမှုမြိုးမြှ မလုပျဆောငျရနျလညျး ခငျြးလူငယျကှနျရကျက တောငျးဆိုခဲ့သညျ။ ထို့ပွငျ ပွညျထောငျစုအစိုးရနှငျ့ ပွညျနယျအစိုးရက စဈဘေးရှောငျမြား နထေိုငျရာ စခနျးမြားကို တရားဝငျ အသိအမှတျပေးရနျ နှငျ့ လိုအပျသညျ့ လူမှုစီးပှားဆိုငျရာ အစီအမံမြား၊ မူဝါဒမြားကို အမွနျဆုံးခမြှတျ အကောငျအထညျဖျော ဆောငျရှကျပေးပွီး ခငျြးပွညျနယျနှငျ့ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး ပိတျထားသညျ့ အငျတာနကျလိုငျးမြားအား အမွနျဆုံး ပွနျလညျဖှငျ့လှဈပေးရနျလညျး ခငျြး လူငယျကှနျရကျက တောငျးဆိုခဲ့သညျ။ https://news-eleven.com/article/172298
ကခငျြပွညျနယျလှတျတျော ဒုတိယအကွိမျ ကခငျြပွညျနယျလှတျတျော (၁၉) ကွိမျမွောကျပုံမှနျအစညျးဝေးတကျရောကျမညျ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျမြား မလေ ၁၀ရကျမှ ၁၇ ရကျထိ Quarantine ဝငျရမညျဖွဈကွောငျး ကခငျြပွညျနယျ လှတျတျော ဥက်ကဌ ဦးထှနျးတငျထံမှ သိရသညျ။
“၁၈ မွို့နယျကလာကွတဲ့ကိုယျစားလှယျတှဖွေဈတဲ့တှကျ အဝေးကလာကွတဲ့သူတှမေို့ သူတို့မှာရောဂါအခွနေေ ဘယျလိုရှိ လဲဆိုတာ ကနြျောတို့ဘာမှမသိပါဘူး။ အဲကွောငျ့ ကနြျောတို့အနနေဲ့အားလုံးတှကျ အကာကှယျဖွဈမယျလို့ ယူဆတဲ့ အတှကျ လုပျပေးတာဖွဈပါတယျ။ အဆိုပါ (၁၉) ကွိမျမွောကျလှတျတျောအစညျးဝေးတှငျ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ အတှကျ ဘတျဂတျြ အတညျပွု ဆှေးနှေးမညျဖွဈပွီး ယခငျပုံမှနျအစညျးဝေးကဲ့သို့ သကျဆိုငျရာလှတျတျောကိုယျစားလှယျမြားကို မေးခှနျးမေးမွနျးခွငျး ခှငျ့ပွု မညျ မဟုတျကွောငျး လှတျတျောဥက်ကဋ်ဌ ကဆကျပွောသညျ။
နယျမှရောကျရှိလာမညျ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျမြားတှကျ Q ကာလတှငျး အစားအသောကျမြားအား လှတျတျောရုံးမှ စီစဉျ ပေးမညျဖွဈပွီး Q နရောသညျ လှတျတျောရိပျသာတှငျ ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ “အနျတီတို့ နယျဝေးကလူတှဆေို ၉ ရကျနေ့ အရောကျလာရမယျလို့ သိရပါတယျ။ ခုလတျတလောအခွနေမှောတော့ Covid-19 ဖွဈနပေမေယျ့လညျး ဘတျဂတျြကိစ်စ က အရေးကွီးတာဖွဈတဲ့တှကျ လှတျတျောကနေ ဘတျဂတျြအတညျမပွုပေးဘူးဆိုရငျ ကခငျြပွညျနယျရဲ့ လညျပတျနတေဲ့ အုပျခြုပျမှု ယန်တရားက ရပျဆိုငျးသှားမယျ။”ဟု ကခငျြပွညျနယျလှတျတျော ပွညျသူ့ငှစောရငျးစဈကျောမတီဝငျ ဆော့လျော မွိ့နယျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဒျေါချေါမာဝူက ပွောသညျ။ လှတျတျောကို အမြားဆုံး ၃ ရကျသာ ကငျြးပမညျဟု သိရသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/05/05/%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%8a%e1%80%ba%e1%
မွနျမာစဈတပျနဲ့ ရခိုငျလကျနကျကိုငျAAအဖှဲ့တို့ စဈရေးတငျးမာနဆေဲ ခငျြးပွညျနယျ၊ ပလကျဝမွို့နယျဘကျမှာ တိုကျပှဲ အကွားပဈခတျမှုကွောငျ့ ခငျြးလူမြိုးတှေ အရပျသားတှေ ထိခိုကျသဆေုံးမှု တိုးလာနပေါတယျ။ နှဈဖကျတိုကျပှဲအတှငျး အရပျ သား သဆေုံးဒဏျရာရတဲ့ လုပျဆောငျခကျြ အပျေါရှုံ့ခပြွီးတှဆေုံ့ဆှေးနှေးအဖွရှောကွဖို့ ခငျြးလူငယျကှနျရကျ ပွောခှငျ့ရ ဆလိုငျးမာနျဟုနျက VOA ကို ပွောပါတယျ။
စဈလယောဉျနဲ့ပဈခတျမှုကွောငျ့ ခငျြးလူမြိုး ၂၉ ဦးသဆေုံးခဲ့ပွီး၊တိုကျပှဲအတှငျး လူသားဒိုငျး အသုံးပွုမှုတှကေို နှဈဘကျ တပျဖှဲ့တှေ မလုပျဆောငျဖို့နဲ့ AA နှငျ့တပျမတျော ငွိမျးခမျြးရေး ဆှေးနှေးဖို့ ခငျြးလူငယျကှနျရကျ အဖှဲ့ကနေ ကွညောခကျြ ထုတျပွနျ တောငျးဆိုခဲ့တာပါ။ ပလကျဝမွို့နယျအတှငျး ထိခိုကျမှုရှိနတောဟာ AA အဖှဲ့ကနေ နှောကျယှကျ ပဈခတျမှုကွောငျ့ လို့ တပျမတျောပွောခှငျ့ရ ဗိုလျမှူးခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးကပွောပါတယျ။ ခငျြးပွညျနယျ ပလကျဝမွို့နယျဘကျမှာ တိုကျပှဲဖွဈစဉျ တှမှော လကျနကျကညျြထိမှနျမှုကွောငျ့ အရပျသားတှေ သဆေုံးမှု ဒဏျရာရမှု နအေိမျမီလောငျမှုတှရှေိခဲ့ပမေဲ့ မွနျမာစဈတပျ ဘကျကရော AAဖကျကပါ သူတို့အဖှဲ့လကျခကျြမဟုတျ ကွောငျးငွငျးဆိုနကွေပါတယျ။
ခငျြးပွညျနယျ၊ ပလကျဝမွို့နယျဖကျမှာ တိုကျပှဲဖွဈစဉျအတှငျး ထောငျနဲ့ခြီတဲ့အရပျသားတှလေဲ ပလကျဝမွို့အတှငျးနဲ့ ဆမီးမွို့ နယျ ခှဲမှာ စဈဘေးတိမျးရှောငျနရေပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ စဈရှောငျစခနျးတှမှော COVID-19 ရောဂါကာကှယျတားဆီးရေး ကို စနဈ တကြ လုပျဆောငျပေးဖို့ အရပျသား သဆေုံးမှုကိစ်စတှကေို သခြောစှာ စုံစမျးပေးဖို့ကို ခငျြးလူငယျကှနျရကျအဖှဲ့ကနေ ထုတျပွနျတောငျးဆိုထားပါတယျ။ လကျရှိပလကျဝမွို့နယျဘကျမှာ ဒီမလေဆနျးကစပွီး ဒီကနအေ့ထိ နှဈဘကျတိုကျပှဲပွငျး ထနျနဆေဲရှိပါတယျ။ https://burmese.voanews.com/a/myanmar-army-and-aa-fighting-chin-youth-urge-for-ceas efire-/5406625.html
မွနျမာ-တရုတျနယျစပျ ဒသေဖွဈသညျ့ နမျ့ခမျးမွို့နယျတှငျ ခွံထှကျ ပွောငျးမြား တရုတျပွညျသို့ ရောငျးခှငျ့မရသဖွငျ့ ရှလေီ မွဈထဲသို့ သှနျပဈလိုကျရကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။ မလေ ၅ ရကျ ယနတှေ့ငျလညျး နမျ့ခမျးမွို့နယျအတှငျးရှိ ခွံထှကျ ပွောငျး မြား တရုတျပွညျသို့ တငျပို့ရနျခကျခဲသဖွငျ့ ရှလေီမွဈထဲသို့ ထျောလဂြီ အစီးရေ (၂၀)ခနျ့ သှနျပဈလိုကျရကွောငျး နမျ့ခမျး တောငျသူ စိုငျးသနျးမွငျ့ က သြှမျးသံတျောဆငျ့ သို့ ပွောသညျ။ “ အဲ့ထျောလဂြီတှေ တရုတျပွညျကို သှားရောငျးဖို့ စောငျ့နေ တာ ၅ ည လောကျရှိပွီ။ အခုပွောငျးတှေ ပုတျကုနျ ခွောကျကုနျပွီဆိုတော့ ရှလေီမွဈထဲသှနျ လိုကျတာရှိတယျ။ နောကျ လမျး တှပေျေါ သှနျခြ လိုကျရတာတှရှေိတယျ” ဟု စိုငျးသနျးမွငျ့ က ဆိုသညျ။
မွနျမာ – တရုတျနယျစပျ မူဆယျမွို့တှငျ ဧပွီ ၂၄ ရကျက အသကျ ၈၇ နှဈအရှယျ အမြိုးသမီး တဦး COVID-19 လူနာ အဖွဈ ကနျြးမာရေးဌာနကကွငွောပွီးနောကျပိုငျး တရုတျဘကျမှ အာဏာပိုငျမြားက တငျးကပျြစဈဆေးကာ နမျ့ခမျးမွို့နယျ နယျစပျနေ ၁၉ ရှာမှ ဒသေခံမြားတပိုငျတနိုငျ စိုကျပြိုးမှုမှရသညျ့ ခွံထှကျသီးနှံမြားပငျ တငျပို့ရောငျးခခြှငျ့မရသညျအထိ နယျစပျဂိတျမြား ပိတျရနျအမိနျ့ ထုတျထားလိုကျသညျ။ နယျစပျဂိတျမြားကို ရကျပေါငျး ၆၀ အကွာ ပိတျထားမညျဖွဈပွီး ဥပဒကြေူးလှနျကာ တနိုငျငံနှငျ့ တနိုငျငံ ခိုးဝငျပါက ကွီးလေးသညျ့ ပွဈဒဏျပေးသှားမညျဟုလညျးဖျောပွထားသညျ။
“ အိမျပွနျသယျပွီး ထားရငျလညျး အဆငျမပွဘေူး။ နောကျ ခွောကျသှားရငျလညျး ဘာမှ လုပျလို့ မရတော့ဘူး။ ဒါကွောငျ့ လှငျ့ပဈလိုကျတာ ရှလေီမွဈထဲကို ” ဟု စိုငျးစိုငျး ကဆိုသညျ။ ထိုသို့ပွောငျးမြား သှနျခနြရေခွငျးနှငျ့ ပတျသကျပွီး သကျဆိုငျရာ မှ နညျးလမျးရှာပေးရနျ လိုအပျနကွေောငျး၊ လကျရှိ ပွဿနာသညျ ပွညျတှငျး ကုနျခြောထုတျလုပျမှု မရှိခွငျးကွောငျ့ ယခုကဲ့သို့ အခကျအခဲမြားရငျဆိုငျနရေကွောငျးလညျး နမျ့ခမျးဒသေခံ စိုငျးထှနျးလှိုငျး ကပွောသညျ။“သကျဆိုငျရာက နညျးလမျးရှာနေ ကွတယျလို့ပွောပမေယျ့ ပွောငျးတှကေ အထားမှ မခံတော့ ရှလေီမွဈထဲပဲ သှနျလိုကျရတာပေါ့”ဟု စိုငျးထှနျးလှိုငျး က ဆို သညျ။ လကျရှိ မူဆယျ-နမျ့ခမျး ခွံစိုကျတောငျသူမြား စားဝတျနရေေးခကျခဲနကွေပွီး၊ အကွှေးမြားဖွငျ့ သောက ရောကျနကွေ ကွောငျး သိရသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/16421
၈။ ကယားပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့ရှိ ဌာနဆိုငျရာအခြို့တှငျ အရာရှိဦးရထေကျ ယာဉျအစီးရမြေားနသေညျ့အပွငျ အသုံးပွုခွငျး မ ရှိဘဲထိနျးသိမျးစရိတျမြား၊ အလေးထားစဈဆေးပေးရနျ ပွညျနယျလှတျတျော ပွညျသူ့ငှစောရငျး ကျောမတီပွောကွား
ကယားပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ရှိ ဌာနဆိုငျရာအခြို့တှငျ အရာရှိဦးရထေကျ ယာဉျအစီးရမြေားနသေညျ့အပွငျ အသုံးပွုခွငျးမရှိဘဲ ပွုပွငျထိနျးသိမျး စရိတျမြားတငျနရော အလေးထားစဈဆေးပေးရနျ ကယားပွညျနယျ ပွညျသူ့ငှစောရငျး စောငျ့ကွညျ့ကျောမတီ က ပွောကွားသညျ။
ဒုတိယအကွိမျ ကယားပွညျနယျလှတျတျော အရေးပျေါအစညျးအဝေးကို မေ ၇ ရကျတှငျ စတငျကငျြးပရာ မျောတျောယာဉျ ပွငျဆငျထိနျးသိမျးစရိတျမြားနှငျ့ စပျလဉျြး၍ ကယားပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့မှ ဖှဲ့စညျးထားသော ယာဉျနှငျ့ စကျပစ်စညျးမြား ပွငျဆငျ ကွီးကွပျမှု ကျောမတီမှ အသုံးစာရိတျမြား ခှငျ့ပွုပေးပွီးနောကျ ထုတျယူသုံးစှဲသညျ့ ဌာနမြားမှ မျောတျောယာဉျမြားကို မွပွေငျ တှငျ အမှနျတကယျ ပွငျဆငျထိနျးသိမျးခွငျးရှိ/ မရှိ၊ မောငျးနှငျနိုငျခွငျး ရှိ/ မရှိ အလေးထားစဈဆေးပေးရနျနှငျ့ ပွညျသူ့ဘဏ်ဍာ ငှေ လလှေငျ့ဆုံးရှုံးမှု လြော့နညျးစရေနျ ကူညီဆောငျရှကျပေးကွရနျ တိုကျတှနျးကွောငျး ပွညျသူ့ငှစောရငျး စောငျ့ကွညျ့ စဈဆေးရေး အစီရငျခံစာအား ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးနျောအီမှ လှတျတျောတှငျတကျရောကျဖတျကွားရာ ထညျ့သှငျးပွောကွားခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
ဒသေတှငျးရှိ ဌာနစုစုပေါငျးအရအေတှကျမှာ ၈၆ ခုဖွဈပွီး ဒသေဘတျဂကျြဌာန အဖှဲ့အစညျး ၂၄ ဖှဲ့အတှငျးမှ အစိုးရအဖှဲ့၊ မီးသတျဦးစီးဌာန၊ အထှထှေအေုပျခြုပျရေးဦးစီးဌာန၊ စိုကျပြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ အားကစားနှငျ့ ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ မွို့ပွနှငျ့ အိမျယာဖှံ့ဖွိုးရေးဦးစီးဌာန၊ လမျးဦးစီးဌာန၊ ကြေးလကျလမျးဦးစီးဌာနနှငျ့ စညျပငျသာယာရေးအဖှဲ့မြားတှငျ အသုံးစာရိတျမြား နကွေောငျး ကျောမတီထံမှသိရသညျ။ ရငှအေပိုငျးတှငျလညျး ငှလေုံးငှရေငျးရ ငှနှေငျ့အခှနျရငှမြေား ကောကျခံရရှိမှုမှာ လှနျစှာ နညျးပါးသညျ့အပွငျ လြာထားခကျြမှာလညျး အမှနျစာရငျးမြားထကျ လြော့နညျးလကျြရှိသညျကို စိစဈသုံးသပျတှရှေိ့ရကွောငျး၊ အထူးသဖွငျ့ အခှနျမြားကောကျခံနသေော ဌာနမြား၏ အခှနျလြာထားခကျြမှာ လှနျစှာလြော့နညျးလကျြရှိပွီး စာရငျးစဈခြုပျ အစီရငျခံစာပါ အမှနျရငှနှေငျ့ အဆမတနျကှာခွားနသေညျမှာ ဖယျဒရယျဒီမိုကရစေီစနဈကို အောငျမွငျစှာ တညျဆောကျရာ တှငျ အဓိကအခကျြဖွဈသညျကို သတိခပျြသငျ့ကွောငျး ဦးနျောအီက လှတျတျောသို့ တငျပွခဲ့သညျ။
ထို့ပွငျ လြာထားဘတျဂကျြမြားတှငျ စီမံခနျ့ခှဲမှု အသုံးစရိတျ မြားပွားနခွေငျးနှငျ့ ရုံးဝနျထမျးအိမျရာ တညျဆောကျရေးမြားသာ မြားပွားနခွေငျးကိုလြော့ခပြွီး ပွညျသူလူထုကို တိုကျရိုကျအကြိုးဖွဈထှနျးမညျ့ အသုံးစရိတျမြားအား လြာထားရနျ၊ အရာရှိမြား အတှကျ ဖုနျးငှဖွေညျ့ကတျမြား ထုတျယူရာတှငျ ဌာနတဈခုနှငျ့တဈခု မတူညီဘဲ ကှဲပွားမှုဖွဈနသေညျကို အစိုးရအဖှဲ့အနဖွေငျ့ ဖွရှေငျးဆောငျရှကျရနျ အကွံပွုတငျပွထားကွောငျးလညျး သိရသညျ။ https://news-eleven.com/article/172555
ရခိုငျပွညျနယျ မငျးပွားမွို့နယျက မငျးရှာ၊ ထောငျ့ခြေ၊ မွဈနား စတဲ့ကြေးရှာတှမှော ပွီးခဲ့တဲ့ မလေ ၅ ရကျညနေ ပိုငျးကနစေလို့ တပျမတျောစဈကွောငျးတှကေ ရှာထဲမှာနရောယူပွီး တိုကျပှဲဖွဈတဲ့နရောတှဆေီကို လကျနကျကွီး လကျနကျငယျတှနေဲ့ လှမျး ပဈတာကွောငျ့ ကြေးရှာသုံးရှာက လူပေါငျး ၄၀ဝဝ ကြျောခနျ့ဟာ နီးစပျရာကြေးရှာတှေ နဲ့ မငျးပွားမွိုကပျေါကို အသီးသီးထှကျ ပွေးနကွေရတယျလို့ ဒသေခံကြေးရှာသားတှကေ RFA ကိုပွောပါတယျ။ တပျမတျောစဈကွောငျးဟာ မငျးရှာအလယျမှာရှိတဲ့ စာသငျကြောငျးဝငျးထဲမှာ အမွောကျနှဈလုံးတညျပွီး ဒီနေ့ မနကျပိုငျးအခြိနျအထိ တိုကျပှဲဖွဈတဲ့နရောတှဆေီကို လှမျးပဈနေ တယျလို့ လုံခွုံရေးအရ အမညျမဖျောလိုတဲ့ ရှာသားတဈဦးက ပွောပါတယျ။
မလေ ၅ ရကျနကေ့ အဲဒီတပျမတျောစဈကွောငျးက ကြေးရှာသားတခြို့ကိုချေါပွီး လကျရှိမတညျမငွိမျဖွဈနတေဲ့ အခွအေနေ တှကေို သငျခနျးစာယူပွီး အအေကေို ထောကျခံအားပေးတာတှေ မလုပျဖို့နဲ့ မဆကျစပျကွဖို့ တပျမတျောစဈကွောငျးအရာရှိက သတိပေးပွောဆိုခဲ့တယျလို့ဆိုပါတယျ။ ဒီလိုပွောဆိုပွီးနောကျ အဲဒီစဈကွောငျးက ကြေးရှာတှထေဲက မူလှနျကြောငျး၊ အထကျ တနျးကြောငျး၊ ဘုနျးကွီးကြောငျးနဲ့ နအေိမျတှမှော စခနျးခနြထေိုငျပွီး ရှာထဲကနပွေီး လကျနကျကွီးလကျနကျငယျတှနေဲ့ လှမျးပဈနတောလို့လညျး အမညျမဖျောလိုတဲ့ အဲဒီရှာသားကပွောပါတယျ။ မငျးရှာ၊ ထောငျ့ခြေ၊ မွဈနား ကြေးရှာသုံးရှာဟာ ရှာ ခငျြးဆကျနတေဲ့ရှာတှဖွေဈပွီး အိမျခွေ တဈထောငျကြျော ရှိပါတယျ။ တပျမတျောစဈကွောငျးဟာ အဲဒီရှာသုံးရှာစလုံးထဲမှာ နရောယူထားတာလို့ဆိုပါတယျ။ အခုလကျရှိမှာ သကျကွီးရှယျအိုအခြို့သာရှာထဲမှာ အစောငျ့အဖွဈကနျြရဈခဲ့ကွပွီး ကနျြတဲ့လူ အားလုံးက တပျမတျောစဈကွောငျး ရောကျလာတဲ့နကေ့ပငျ ထှကျပွေးသှားကွပွီလို့ နောကျထပျ လုံခွုံရေးအရအမညျမဖျော လို တဲ့ ကြေးရှာသားတဈဦးက ပွောပါတယျ။
အခုလိုရပျထဲရှာထဲနဲ့ စာသငျကြောငျး၊ ဘုနျးကွီးကြောငျးတှထေဲမှာ စခနျးခတြာတှကေို တားမွဈပေးဖို့ အကွီး အကဲတှကေို တောငျးဆိုလိုကွောငျးလညျး ကြေးရှာသားတှကေ RFA ကိုပွောပါတယျ။ ရခိုငျပွညျနယျမှာ အိုးအိမျစှနျ့ခှာထှကျပွေးနရေသူ အမြားစုဟာ တိုကျပှဲတှထေကျ တပျမတျောစဈကွောငျးကို ကွောကျပွီးတော့ ထှကျပွေးကွတာလို့ ဒုက်ခသညျအရေး အကူအညီ တှပေေးနတေဲ့ မငျးပွားဒသေခံ ကိုအမျးသားကွီး ကပွောပါတယျ။
ရှာထဲမှာနပွေီး တပျစှဲမယျဆိုရငျ ဘယျလောကျအန်တရာယျမြားသလဲဆိုတာ အားလုံးသိကွတဲ့အတှကျ တပျစှဲတယျဆိုတာ မဖွဈ နိုငျကွောငျး၊ တူးထားတဲ့ ကတုတျကငျြးတှဟောလညျး ရှာတှကေို အမီပွုပွီး စဈဆငျရေးလုပျနတော AA ပဲဖွဈတဲ့အတှကျ AA ဘကျက တူးထားသာတာဖွဈနိုငျကွောငျးလညျး ဗိုလျမှူးခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးက ပွောပါတယျ။ ဒီလိုပွောကွားခကျြနဲ့ ပတျသကျလို့ AA ဘကျက တုံ့ပွနျခကျြကိုရရှိဖို့ RFA က ကွိုးစားနဆေဲဖွဈပါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/news/400-minbya-villagers-flee-05072020083556.html
ငှကွေေးခဝါခမြှုဆိုငျရာ စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှကေို လိုကျနာဖို့ပကျြကှကျတာကွောငျ့ မွနျမာနိုငျငံကို ငှကွေေးခဝါခမြှုဆိုငျရာ အမညျပကျြ စာရငျးမှာ ဥရောပသမဂ်ဂအဖှဲ့က ထညျ့သှငျးဖို့ ရှိနပေါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံ အပါအဝငျ နိုငျငံ ၂၂ နိုငျငံကို ငှကွေေး ခဝါခမြှုနဲ့ ပတျသကျပွီး အနီးကပျ စောငျ့ကွညျ့ရမယျ့ နိုငျငံစာရငျးမှာ ထညျ့သှငျးထားမယျ့ ဥရောပကျောမရှငျရဲ့ ကွညောခကျြကို ကွာသပတေးနမှေ့ာ ထုတျပွနျမယျလို့ ယူဆရပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံနဲ့အတူ အာရှက ကမ်ဘောဒီးယားနဲ့ မှနျဂိုးလီးယားနိုငျငံ တှေ လညျး အမညျပကျြစာရငျးထဲ ထညျ့သှငျးခံရမှာဖွဈပွီး စာရငျးထဲထညျ့သှငျးခံရမယျ့ နိုငျငံသဈတှထေဲ ပနားမား၊ ဘဟားမားဈနဲ့ မောရဈသြှနိုငျငံတှေ ပါဝငျတယျလို့ ကွညောခကျြမူကွမျး ကို ရရှိခဲ့တဲ့ ရိုကျတာ သတငျးဌာနက ပွောပါတယျ။
ဒီ စာရငျးထဲပါတဲ့ နိုငျငံတှဟော ဥရောပ သမဂ်ဂအဖှဲ့ရဲ့ ငှရေေးကွေးရေးစနဈကို အန်တရာယျပွု ခွိမျးခွောကျနတေယျလို့လညျး ကွညော ခကျြ မူကွမျးမှာ ပါရှိပါတယျ။ EU ရဲ့ ဥပဒအေရ ဘဏျတှနေဲ့ တဈခွားဘဏ်ဍာရေး အဖှဲ့အစညျးတှဟော သူတို့ရဲ့ ဖောကျ သညျ ကုမ်ပဏီတှကေို အဲဒီ စာရငျးပါ နိုငျငံတှနေဲ့ အလုပျလုပျတဲ့အခါ သသေခြောခြာ အနီးကပျ စောငျ့ကွညျ့စဈဆေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ နာမညျပကျြ စာရငျးပါ နိုငျငံတှထေဲက စီးပှားရေး ကုမ်ပဏီတှလေညျး ဥရောပ သမဂ်ဂက ပေးအပျမယျ့ ရနျပုံငှေ ထောကျ ပံ့ကွေး အသဈတှကေို ရယူနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။
EU က မကွာခငျ ထုတျပွနျဖို့ ရေးဆှဲထားတဲ့ ကွညောခကျြ မူကွမျးဟာ ကမ်ဘာတဈဝှမျး ငှကွေေး ခဝါခမြှု တိုကျဖကျြရေးမှာ စံနှုနျးတှေ သကျမှတျတဲ့ပါရီမွို့အခွစေိုကျ FATF – FINANCIAL ACTIONS TASK FORCE က အရငျထုတျပွနျထားတဲ့စာရငျးနဲ့ သိပျကှာခွားမှု မရှိပါဘူး။ ဥရောပကျောမရှငျက ပွီးခဲ့တဲ့နှဈ စာရငျးထဲပါဝငျတဲ့အာရှ ၂ နိုငျငံဖွဈတဲ့ လာအိုနဲ့ သီရိလင်ျကာနိုငျငံ တှကေို ဒီနှဈ နာမညျပကျြ စာရငျးထဲကနေ ပယျဖကျြထားတယျလို့လညျး ရိုကျတာသတငျးမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။ https://bu rmese.voanews.com/a/myanmar-money-laundering-european-union-/5407402.html
မှနျပွညျသဈပါတီ နယျမွအေတှငျး COVID-19 လူနာတှရှေိ့ပါက အစိုးရလကျအောကျရှိ ဆေးရုံမြားနှငျ့ ခြိတျဆကျ ဆောငျ ရှကျသှားရနျ စီစဉျထားကွောငျး မှနျပွညျသဈပါတီက ပွောသညျ။ မှနျပွညျသဈပါတီ နယျမွတှေငျ ရောဂါ ကာကှယျထိနျးခြုပျရေး ဗဟို အဆငျ့၊ ခရိုငျ အဆငျ့၊ မွို့နယျ အဆငျ့ ကျောမတီမြား ဖှဲ့စညျးထားပွီး ရောဂါကာကှယျထိနျးခြုပျရေးကို အရှိနျမွှငျ့ လုပျဆောငျလကျြရှိကွောငျးလညျး မှနျပွညျသဈပါတီက ပွောသညျ။ ထိုသို့လုပျဆောငျရာတှငျ သံသယလူနာမြားရှိလာပါက ရောဂါ စမျးသပျနိုငျရနျနှငျ့ ကုသရနျအတှကျ မှနျပွညျသဈပါတီတှငျ လုံလောကျသညျ့ပစ်စညျးကိရိယာမရှိသညျ့အတှကျကွောငျ့ လူနာကို ကုသမှုပေးနိုငျရနျ အစိုးရ လကျအောကျရှိ ပွညျသူ့ကနျြးမာရေးဌာနနှငျ့ ခြိတျဆကျစီစဉျထားသညျဟု မှနျပွညျသဈပါတီ ပွညျတှငျးရေးရာ တာဝနျခံ နိုငျဗညားလယျ က ပွောသညျ။
လကျရှိအခြိနျထိ မှနျပွညျသဈပါတီထိနျးခြုပျနယျမွအေတှငျး၌ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ သံသယ လူနာမရှိသေးဘူးဟု မှနျပွညျသဈ ပါတီ တာဝနျရှိသူက ပွောသညျ။ မှနျအရပျဖကျလူမှုအဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ မှနျညီညှတျရေးပါတီတို့ကလညျး မှနျပွညျသဈပါတီ ထိနျးခြုပျနယျမွအေတှငျးရှိ ပွညျသူမြားကို ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈရောဂါဆိုငျရာ အသိပညာပေးမှုမြား ဆောငျရှကျပေးနသေညျ့အပွငျ ရောဂါကာကှယျရေးပစ်စညျးမြားကိုလညျး ထောကျပံ့ပေးနသေညျဟု မှနျညီညှတျရေးပါတီ တှဲဖကျအတှငျးရေးမှူး (၂) နိုငျစံတငျ က ပွောသညျ။
မှနျပွညျနယျပါတီအနနှေငျ့ ၎င်းငျးတို့ထိနျးခြုပျနယျမွမြေားတှငျသာမက မှနျပွညျသဈပါတီနှငျ့ထိစပျနသေညျ့ နယျမွမြေားနှငျ့ မှနျပွညျသူလူထုမြား တညျရှိရာနရောဒသေသို့တှငျလညျး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကူးစကျရောဂါဆိုငျရာ အသိပညာပေးမှုမြား၊ ရောဂါ ကာကှယျရေးပစ်စညျးမြား၊ အစားအသောကျမြား ကူညီထောကျပံ့ပေးလကျြ ရှိသညျဟု သိရသညျ။ https://www.bnionline. net/mm/news-72614
တနင်ျသာရီတိုငျးဒသေကွီး ရဖွေူမွို့နယျအတှငျးရှိ အလယျစခနျးကြေးရှာအနီး ဒသေခံတဈဦး မွမွှေုပျမိုငျးနငျးမိပွီး ခွထေောကျ တဈ ဖကျ ပွတျသှားသညျဟု ကြေးရှာအုပျခြုပျရေးမှူးက ပွောသညျ။ မလေ ၄ ရကျနေ့ မှနျးလှဲ ၁ နာရီ အခြိနျခနျ့တှငျ အလယျ စခနျးကြေးရှာနှငျ့ ၃ မိုငျခနျ့ဝေးသညျ့ ဒသေအချေါ ကွောငျလြှာကှငျးဆိုသညျ့ ခွံမှ ပွနျလာသညျ့ ဟံဂံကြေးရှာမှ နိုငျထှနျး သညျ လမျးပျေါတှငျ မွမွှေုပျမိုငျး နငျးမိပွီး ဘယျဘကျခွထေောကျ ပွတျသှားသညျဟု သိရသညျ။ အလယျစခနျး ကြေးရှာအုပျခြုပျ ရေးမှူး နိုငျတငျစနျး က “မိုငျးနငျးမိတဲ့လူက ဟံဂံက ဒီမှာ(အလယျစခနျး) ခွံလာလုပျနကွေတယျ၊ ခွံကနအေပွနျ လူသှား လမျးပျေါမှာပဲ နငျးမိတယျ။ အဲ့နရောတဝှိုကျမှာပဲ ၂၀၁၉ တုနျး ကလညျး တဈကွိမျ နငျးမိဖူးတယျ” ဟု ပွောသညျ။
ယခုနှဈ ၂၀၂၀ ခုနှဈအတှငျး၌လညျး အလယျစခနျးနှငျ့ အနညျးငယျဝေးသညျ့ မြောကျခြောကြေးရှာနှငျ့ ကလယျ ကြေးရှာ ဘကျတှငျ မွမွှေုပျမိုငျးနငျးမိမှု ၃ ကွိမျဖွဈပှားခဲ့ပွီး ဒသေခံနှဈဦး ထိခိုကျဒဏျရာရရှိကာ ခွထေောကျ တဈဖကျစီ ဖွတျပဈခဲ့ရ သညျ။ ရဖွေူမွို့နယျအတှငျး မကွာခဏဖွဈပှားနသေညျ့ မွမွှေုပျမိုငျးနငျးမိမှုမြားသညျ အမြားဖွငျ့ ဒသေခံပွညျသူမြား လုပျကိုငျ စားသောကျနကွေသညျ့ ဥယြာဉျခွံမြား၊ ပွညျသူမြားအသုံးပွုနကွေသညျ့ လမျးမြားပျေါတှငျဖွဈပှားနခွေငျး ဖွဈသညျဟု ဒသေခံ မြားက ပွောသညျ။
မွမွှေုပျမိုငျးပေါကျကှဲမှုဖွဈပှားနသေညျ့ဒသေသညျ မှနျပွညျသဈပါတီ (NMSP) နှငျ့ ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး (KNU) တပျဖှဲ့ တို့ လှုပျရှားသှားလာနသေညျ့ ဒသေဖွဈပွီး နှဈဘကျတပျဖှဲ့အကွား နယျမွေ အငွငျးပှားမှုမြား ဖွဈပှားနသေညျ့ နရောဒသေ လညျးဖွဈသညျ။ သို့သျောလညျး မွမွှေုပျမိုငျးကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ၍ နှဈဖကျတပျမြားဖွဈကွသညျ့ ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး နှငျ့ မှနျပွညျသဈပါတီတို့သညျ ၎င်းငျးတို့ ထောငျထားခွငျးမဟုတျကွောငျး ငွငျးဆိုထားသညျ။ ရဖွေူမွို့နယျအတှငျး မကွာခဏ ဖွဈပှားနသေညျ့ မွမွှေုပျမိုငျးပေါကျကှဲမှု ကိစ်စရပျမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ ညှိနှိုငျးဖွရှေငျးနိုငျရေး မှနျပွညျသဈပါတီဘကျက အစိုးရ တပျမတျောနှငျ့ရော၊ KNU နှငျ့ပါ ညှိနှိုငျးဆှေးနှေးနသေျောလညျး ယနအေ့ခြိနျထိ တဈစုံတဈရာ အကောငျအထညျဖျောနိုငျခွငျး မရှိသေးဘူးဟု NMSP က ပွောသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-72615
ကအေဲနျယူ-ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံးမှ ခှဲထှကျသှားသညျ့ KNU/KNLA -PC ကရငျငွိမျးခမျြးရေးကောငျစီ ဥက်ကဋ်ဌ ဗိုလျခြုပျ ကွီး စောဌေးမောငျ အသကျ(၉၃)နှဈ၏ ဈာပန အခမျးအနားကို ကော့ကရိတျခရိုငျ၊ နျောတယာမွို့ ထို့ကျော ကိုးဌာနခြုပျရှိ ကရငျ့အမြိုးသားခေါငျးဆောငျ စောဘဦးကွီး၏ ဂူဗိမ်မာနျတညျရှိရာ ထို့ကျောကိုးဌာနခြုပျ ကရငျ့အာ ဇာနညျဗိမ်မာနျ၌ မေ ၅ ရကျ နေ့၊ မှနျးလှဲ ၂ နာရီတှငျ ကငျြးပပွီးစီးသှားပွီးဖွဈသညျ။ ဗိုလျခြုပျကွီးစောဌေးမောငျ၏ ရုပျကလာပျကို ထို့ကျောကိုးဒသေရှိ ခရဈယာနျဘုရားကြောငျး၌ ဝတျပွုဆုတောငျးပွီးနောကျ စဈရေးအခမျးအနားဖွငျ့ ကငျြးပခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ အခမျးအနားတှငျ နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျမှပေးပို့လာသော သဝဏျလှာ၊ တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျ အဖှဲ့အစညျး အသီးသီးက ပေးပို့ သောသဝဏျလှာမြား ဖတျကွားခဲ့သညျ။
ထို့အပွငျ တပျမတျောကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျ၊ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျ၊ ကရငျပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျ နနျးခငျထှေးမွငျ့ တို့မှ ပေးပို့လာသော သဝဏျလှာအပါအဝငျ အရပျဘကျအဖှဲ့အစညျးအသီးသီးတို့မှပေးပို့ လာသော သဝဏျလှာ စုစုပေါငျး ၂၀ ခနျ့ အား တှဲဘကျအထှထှေအေတှငျးရေးမှူး ဗိုလျမှူးကွီး စောကြျောညှနျ့က ဖတျကွားခဲ့သညျ။ ဈာပန အခမျးအနားသို့ တိုငျးရငျး သား လကျနကျကိုငျ ခေါငျးဆောငျမြား၊ စဈဘကျ အရပျဘကျ တာဝနျရှိ ပုဂ်ဂိုလျမြား၊ နိုငျငံရေးပါတီတဈခြို့မှ ခေါငျးဆောငျမြား၊ အရပျဖကျအဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ KNU/ KNLA -PC မှ အရာရှိမြားနှငျ့စဈသညျမြား လိုကျပါပို့ဆောငျခဲ့သညျ။
ဗိုလျခြုပျကွီး စောဌေးမောငျသညျ ၁၉၄၇ ခုနှဈ ကိုလိုနီခတျေအင်ျဂလိပျစဈတပျ၌ ကရငျ့လကျနကျကိုငျ လူငယျ တပျဖှဲ့တှငျ တာဝနျထမျးဆောငျဘူးသူဖွဈပွီး လှတျလပျရေးရပွီးနောကျ ကရငျ့အမြိုးသားတျောလှနျရေး စတငျသညျ့ ၁၉၄၉ ခုနှဈ ကတညျး က ကရငျ့အမြိုးသားခေါငျးဆောငျ စောဘဦးကွီးနှငျ့အတူ တျောလှနျရေး တာဝနျမြားကို ထမျးဆောငျခဲ့သူ တဈဦးဖွဈသညျ။ သူ ကှယျလှနျသှားသညျ့အတှကျ KNU/KNLA -PC ငွိမျးခမျြးရေးကောငျစီ ဥက်ကဋ်ဌ နရောမှာ လဈလပျလကျြရှိပွီး အစားထိုး ဆောငျ ရှကျနိုငျရနျအတှကျ Proto-call အရ လကျရှိဒုတိယဥက်ကဋ်ဌ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး စောထော့လေး အား လြာထားကွောငျး နှငျ့ မကွာမီ ရကျပိုငျးအတှငျး တပျဖှဲ့အလုပျအမှုဆောငျအစညျးအဝေးတဈရပျ ကငျြးပကာ ပွနျလညျရှေးခယျြ အတညျပွုသှားမညျဟု KNU/KNLA -PC တှဲဘကျအတှငျးရေးမှူး ဗိုလျမှူးကွီး စောကြျောညှနျ့က ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။ http://kicnews.org/20 20/05/knu-knla-pc-%e1%80%a5%e1%80%80%e1%81%a0%e1%82%92%e1%80%
ရခိုငျပွညျနယျ တောငျကုတျမွို့က အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ NLD ပါတီဝငျတှရေဲ့ နအေိမျတှကေို ညဘကျမှာ ရဲ အယောငျ ဆောငျထားပွီး ဖမျးဆီးဖို့ ကွိုးစားခဲ့ကွတာဖွဈပွီး အသကျအန်တရာယျလညျး ခွိမျးခွောကျတာ ခံနရေတဲ့အတှကျ ဒီလို NLD ပါတီ ဝငျတခြို့ ထှကျပွေးနကွေရတယျလို့ တောငျကုတျမွို့နယျ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ ၂ ကိုယျစားလှယျ ဦးမငျးအောငျက ပွောပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ဧပွီလ ၉ ရကျနကေ့လညျး မွောကျပိုငျးရခိုငျလသေံနဲ့ တယောကျက သတျဖွတျမယျဆိုပွီး ခွိမျးခွောကျ ဖုနျးဆကျခဲ့ သလို ဧပွီ ၁၄ ရကျနညေ့မှာလဲ လူတစုက နအေိမျခွံတခါးကို လာဖှငျ့ခဲ့ကွောငျး၊ ဆှမြေိုးတှေ နဲ့ ရှာခံတှရေောကျလာတော့မှ ထှကျပွေးသှားခဲ့ကွတယျလို့ လကျရှိမှာ တိမျးရှောငျနရေဆဲဖွဈတဲ့ ဘူးရှမေျောရှာသား NLD ပါတီရဲ့မွို့နယျအလုပျအမှုဆောငျ ဦးသနျးဌေးက ပွောပါတယျ။ ဦးသနျးဌေးက သူ့ကိုခွိမျးခွောကျသူတှဟော AA အဖှဲ့ကလို့ ပွောပါတယျ။
တပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံးကကလညျး ရခိုငျပွညျနယျ၊ တောငျကုတျမွို့နယျ၊ ဘူးရှမေျောကြေးရှာက ရှာသား ဦးသနျးရှေ ကို မလေ ၅ ရကျနေ့ မနကျအစောပိုငျးမှာ AA ကလာရောကျဖမျးဆီးသှားတယျလို့ သတငျးထုတျပွနျထားပါတယျ။ NLD ပါတီရဲ့ တောငျကုတျမွို့နယျ မဲဆန်ဒနယျ အမှတျ(၂) ကိုယျစားလှယျ ဦးမငျးအောငျကတော့ လာရောကျဖမျးသူတှဟော သူတို့ ပါတီဝငျ ဦးသနျးဌေးကိုဖမျးဖို့လာတာဖွဈပွီး ဦးသနျးဌေးကိုမရလို့ သူနဲ့အရငျးနှီးဆုံးဖွဈတဲ့ ဦးသနျးရှကေို ဖမျးသှားတာ ဖွဈနိုငျတယျလို့ ပွောပါတယျ။ နအေိမျတှကေိုလာ ရောကျဝိုငျးတဲ့သူတှဟော ဘယျသူဘယျဝါတှဖွေဈတယျဆို တာတော့ သခြောမသိဘူးလို့ ပွောပါတယျ။
“ခုလို တောငျကုတျမွို့က NLD ပါတီဝငျတှကေို ခွိမျးခွောကျသူတှဟော AA အဖှဲ့က ဖွဈတယျဆိုတဲ့ ပွောဆိုခကျြနဲ့ပတျသကျပွီး AA အဖှဲ့ ပွောခှငျ့ရသူ ခိုငျသုခ က NLD ပါတီဝငျတှနေဲ့ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျတှရေဲ့ ကိစ်စသာဖွဈပွီး AA နဲ့သကျဆိုငျမှုမရှိဘူးလို့ RFA ကို ဖွကွေားပါတယျ။ AA အဖှဲ့က လူတှကေ ရဲဝတျနဲ့ ဖမျးဆီးဖို့ကွိုးစားတာဖွဈတယျဆိုတဲ့ ပွောဆိုခကျြနဲ့ပတျသကျလို့ ဒါဟာ သကျ သကျအခွအေမွဈမရှိတဲ့ စှပျစှဲခကျြဖွဈကွောငျး၊ ဒီကိစ်စနဲ့ AA အဖှဲ့နဲ့ ပတျသကျမှုမရှိကွောငျး၊ ဒါဟာ AA အဖှဲ့အပျေါ အထငျ အမွငျလှဲမှားလာအောငျ လုပျကွံဖနျတီးခကျြသာဖွဈလိမျ့မယျလို့လညျး ခိုငျသုခက ပွောကွားပါတယျ။ တောငျကုတျက NLD ပါတီဝငျတှရေဲ့ အဆိုအရ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာတှပေျေါမှာလညျး အကောငျ့အတုတှနေဲ့ သူတို့အပျေါ အသကျအန်တရာယျ ခွိမျးခွောကျမှုတှေ ရှိနတေယျလို့လညျး RFA ကို ပွောကွားပါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/news/rakhine-aa-nld-05062020131215.html
ဟားခါးတက်ကသိုလျတှငျ ထားရှိသညျ့ Facility Quarantine လုပျသူမြားဝငျရောကျပုံမှာ မမှနျကနျဟုခငျြးဝေါလျမီဒီယာက စုံစမျး သိရှိရပါသညျ။
“၂၉ ရကျနကေ့ ဟားခါးတက်ကသိုလျ ထဲ စဝငျလာတဲ့သူက သူ့ဟာသူ ဆိုငျကယျစီးပွီးလာတယျ Positive လူနာနဲ့ ခြောငျး အတူသှားခဲ့လို့ Quarantine ဝငျဖို့လာတယျလို့ ပွောတယျ။ ရှာထဲကို PPE ဝတျစုံနဲ့ ပိုးသတျထားတဲ့ ကားနဲ့ ချေါတာ မဟုတျဘူးလားဆိုတော့ ၊ သူတို့ဟာသူတို့ ပိုးရှိလူနာနှငျ့ ဆကျစပျသူ အားလုံးသှားပါ ဆိုတော့ လာခဲ့တာပါတဲ့။ ဒုတိယ တဈဖှဲ့ ကွတော့ ဆိုငျကယျ ၂ စီး နဲ့လာတယျ ၊ Quarantine ဝငျဖို့ ၂ ယောကျကို ဆိုငျကယျနဲ့လာပို့တာ သူတို့ ၂ ယောကျကို ခြ ထားပွီးတော့ ဆိုငျကယျမောငျးတဲ့ ၂ ယောကျက ပွနျသှားတယျ ဘာထူးမှာလဲ၊ ပွီးတော့ တဈယောကျက ရဲ နဲ့ ဆိုငျကယျ တဈစီးစီ နဲ့ ၂ ယောကျလာတယျ၊ သားဖှား ဆရာမ တဈယောကျကလညျး positve လူနာကို ဘယျမှ မသှားဖို့ သှားပွောဖူး တယျဆိုပွီး သူ့ကိုသူ သံသယရှိလို့ ဆိုငျကယျနဲ့ သူ့ဟာသူလာတယျ၊ ၃ဝ ရကျနေ့ ညနပေိုငျး ၄ ခှဲလောကျမှာ နညျးနညျး အသကျကွီးတဲ့ အသကျ ၅၀ ဝနျကငျြ မိနျးမ ၂ ယောကျ Quarantine ဝငျဖို့ ဆိုပွီးတော့ သူတို့ ၂ ယောကျ ထီးလေး အတူ ဆောငျးပွီးတော့ ကိုယျ့အထုတျကို ကိုယျတိုငျထမျးပွီးတော့ လာကွတယျ၊” ဟု အမညျမဖျောလိုသူ တဈဦးမှ Chin World media သို့ ပွောသညျ။ ဟားခါးတက်ကသိုလျတှငျ Quarantine လာပို့သူမြားမှာ ပွနျသှားပွီ ဖွဈပွီး စောငျ့ကွညျ့လူနာမှ Positive ဖွဈလြှငျ တဈမွို့လုံး ကူးစကျသှားမညျကို စိုးရိမျနကွေောငျးလညျး ဟားခါးတက်ကသိုလျ ဆရာမ တဈဦးမှ လညျးပွောသညျ။
“ကြှနျမတို့ ရှာကနေ ခွကေငျြနဲ့ ဟားခါးထိလာတာပါ၊ သူတို့ရှာကို ကားနဲ့ လာချေါတုနျးက ကြှနျမတို့ တောငျယာမှာအိပျတော့ ရှာပွနျရောကျမှ လူနာနဲ့ လကျနှုတျဆကျခဲ့တယျ ဆိုတော့ ရှာသားတှကေလညျးဝငျဖို့ တိုကျတှနျးကွတော့ ဟားခါး လာခါနီးမှာ လညျး ရှာက ဥက်ကဌကိုလညျး အကွောငျးကွားတယျ သူက ဟားခါးသဈက Gate ကို ပွောပေးမယျ ပွောလို့ထှကျလာတယျ။ Quarantine လုပျတဲ့ နရောကို ညနေ ၅ နာရီလောကျမှာ ရောကျဖွဈတယျ” ဟု ရှာမှ ခွကေငျြဖွငျ့ လာသူမှ ပွောသညျ။ ဟားခါး တက်ကသိုလျတှငျ Positvie လူနာနှငျ့ ထိတှခေဲ့သူ ၅၁ ဦးကို ဟားခါးတက်ကသိုလျထားရှိပွီး နိုငျငံခွားပွနျမြားကို န.တ.လ ကြောငျးသို့ Quarantine လုပျလကျြရှိသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-72625
NCA လကျမှတျရေးထိုးထားသညျ့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျ အဖှဲ့မြားနှငျ့ အစိုးရ၏ COVID-19 ကာကှယျထိနျးခြုပျကုသ ရေးနှငျ့စပျလဉျြးသညျ့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ ညှိနှိုငျးပူးပေါငျးရေးကျောမတီ ပထမဆုံးအကွိမျ အလှတျ သဘောတှဆေုံ့ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။ ဆှေးနှေးပှဲကို ရနျကုနျမွို့ရှိ အမြိုးသား ပွနျလညျသငျ့မွတျရေးနှငျ့ ငွိမျးခမျြးရေး ဗဟိုဌာန NRPC တှငျ မလေ ၅ ရကျနေ့ တှငျ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးခဲ့ကွခွငျးဖွဈသညျ။
ဆှေးနှေးပှဲကို တကျရောကျခဲ့သညျ့ မွနျမာနိုငျငံလုံးဆိုငျရာ ကြောငျးသားမြား ဒီမိုကရကျတဈတပျဦး ABSDF ဒု-ဥက်ကဋ်ဌ ဦးမြိုးဝငျး က တှဆေုံ့ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ့ အကွောငျးအရာမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ ယခုကဲ့သို့ပွောသညျ။“အဓိကကတော့ COVID- 19 ဆိုငျရာ ထိနျးခြုပျကာကှယျရေးပိုငျးရယျ၊ ကုသရေးပိုငျးဆိုငျရာတှပေေါ့ အဲဒီကိစ်စတှကေိုလညျး ဆောငျရှကျကွမယျ။ ပွီးရငျ လညျးပဲ နယျစပျတဈကွော အသီးသီးက ပွနျလာကွမယျ့ ဒီရှပွေ့ောငျး အလုပျသမား ကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး ဘယျလိုပူးပေါငျး ဆောငျရှကျနိုငျမလဲ အဲဒီကိစ်စဆှေးနှေးဖို့အတှကျကို ပွငျဆငျတာပဲ။ အခုကတော့ အသေးစိတျဆှေးနှေးပှဲ မဟုတျဘူးပေါ့နျော။”ဟု ပွောသညျ။ ယခုပွုလုပျသညျ့ ဆှေးနှေးပှဲသညျ အလှတျသဘော တှဆေုံ့ဆှေးနှေးမှုသာဖွဈပွီး တရားဝငျဆှေးနှေးပှဲမြား ပွုလုပျနိုငျရနျ ပွငျဆငျသညျ့ ဆှေးနှေးပှဲ ဟု ပွောသညျ။
တရားဝငျအစညျးအဝေးတှငျ ကရငျအမြိုးသား အစညျးအရုံး KNU နှငျ့ ရှမျးပွညျပွနျလညျထူထောငျရေးကောငျစီ RCSS/SSA တို့၏ COVID- 19 ရောဂါ ကာကှယျတားဆီးရေးလုပျငနျးတှငျ ကွုံတှနေ့ရေသညျ့ တပျမတျော၏ ဟနျ့တား ပိတျပငျမှုမြားကို လညျး ထညျ့သှငျးဆှေးနှေးသှားမညျဟု NCA-EAOs အဖှဲ့မြားက ပွောသညျ။ ယနပွေု့လုပျသညျ့ အစညျးအဝေးသို့ အစိုးရဖကျမှ ညှိ နှို ငျးပူးပေါငျးရေးကျောမတီ ဒု-ဥက်ကဋ်ဌ ဒု-ဗိုလျခြုပျကွီး ခငျဇျောဦး(ငွိမျး)နှငျ့အတူ ကျောမတီဝငျမြား၊ ဖိတျကွားထားသူမြားနှငျ့ NCA လကျမှတျရေးထိုးထားသညျ့ အဖှဲ့မှ ဦးမြိုးဝငျးနှငျ့အတူ အခွားသော တိုငျးရငျးသား ကိုယျစားလှယျမြားတကျရောကျခဲ့ကွ သညျဟု သိရသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-72632
၂၀၂၀ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲနဲ့ ပတျသကျလို့ ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျရဲ့ သဘောထားတဈခုတညျးနဲ့ မဆုံး ဖွတျဘဲ နိုငျငံရေးပါတီတှေ၊ စောငျ့ကွညျ့လလေ့ာရေး အဖှဲ့တှနေဲ့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးပွီးမှ ဆုံးဖွတျသငျ့တယျလို့ ပါတီခေါငျး ဆောငျတှေ၊ လလေ့ာသူတှကေ တိုကျတှနျးလိုကျပါတယျ။
တဈနိုငျငံလုံး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈအန်တရာယျကို ရငျဆိုငျနရေခြိနျဖွဈတာကွောငျ့ ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပသငျ့၊ မကငျြးပသငျ့ကို ဆှေး နှေးညှိနှိုငျးသငျ့တယျလို့ ၈၈ ကြောငျးသားအမြားစု ဦးဆောငျဖှဲ့စညျးထားတဲ့ ပွညျသူ့ပါတီ အထှထှေအေတှငျးရေးမှူး ဦးရဲနိုငျအောငျက ပွောပါတယျ။ ၂၀၁၀ နဲ့ ၂၀၁၅ အထှအေထှရှေေးကောကျပှဲတှကေို နိုဝငျဘာလမှာပဲ ကငျြးပခဲ့တာကွောငျ့ ၂၀၂၀ ရှေး ကောကျပှဲကိုလညျး နိုဝငျဘာလကုနျမှာ ကငျြးပဖို့လြာထားကွောငျး ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ တာဝနျ ရှိသူတှကေ နိုငျငံပိုငျမီဒီယာတှကေတဆငျ့ ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးကပွောထားပါတယျ။ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကို တကယျထိနျးခြုပျနိုငျမှသာ ရှေးကောကျပှဲကို စဉျးစားသငျ့တယျလို့ ပွညျထောငျစုကွံ့ခိုငျရေးနဲ့ ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဦးသိနျးထှနျးဦးက ပွောပါ တယျ။
ဒီအခွအေနတှေကွေားထဲမှာ ရှေးကောကျပှဲကို ကငျြးပမယျဆိုရငျ မညီမြှမှုတှရှေိနိုငျပွီး ကျောမရှငျအပျေါမှာ မေးခှနျးထုတျ စရာ တှေ ဖွဈလာမယျလို့ ရှေးကောကျပှဲဆိုငျရာ ပွညျသူ့လှုပျရှားမှုအဖှဲ့ PACE ရဲ့ အမှုဆောငျ ဒါရိုကျတာ ဦးစိုငျးရဲကြျောစှာမွငျ့က ပွောပါတယျ။ ဒီကပျရောဂါအန်တရာယျ ကွုံတှနေ့ရေခြိနျမှာ ရှေးကောကျပှဲကငျြးပမယျဆိုရငျ လူစုလူဝေးနဲ့ မဲဆှယျဟောပွောရ မယျ့ နိုငျငံရေးပါတီတှရေဲ့ မဲဆှယျစညျးရုံးခှငျ့အခွအေနေ၊ မဲဆန်ဒရှငျတှေ မဲစာရငျးကွညျ့ရှုစဈဆေးခှငျ့ အပါအဝငျ အခကျအခဲ တှေ အတျောမြားမြား ကွုံတှရေ့နိုငျတယျလို့ ထောကျပွကွပါတယျ။
စဈပှဲတှဖွေဈနတေဲ့ တိုငျးရငျးသား ဒသေတှမှောဆိုရငျ မဲဆန်ဒနယျတိုငျးကို သှားရောကျခှငျ့၊ ပွညျသူတိုငျးကို မဲဆှယျစညျးရုံးခှငျ့ ရနိုငျပါ့မလားဆိုတဲ့ စိနျချေါမှုလညျး ရှိနပေါတယျ။ ဒီအခွအေနမှော တဈနိုငျငံလုံးအတိုငျးအတာနဲ့ ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပ နိုငျဖို့ ဆိုတာ မလှယျဘူးလို့ ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြား ဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ SNLD ပါတီ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဦးစိုငျးလိတျက ပွောပါတယျ။ ရှေးကောကျပှဲနဲ့ ပတျသကျလို့ လာမယျ့ ၂၁ ရကျနမှေ့ာ ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျက ထုတျပွနျပေးမယျလို့ ကွညောထားပါတယျ။ လကျရှိ နိုငျငံရေးပါတီ တဈရာနီးပါးရှိပွီး အားလုံးနီးပါး ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲမှာ ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျနိုငျ ခွေ ရှိပါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/news/2020-election-05052020050408.html
၁၈။ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျနှငျ့ COVID-19 ဆိုငျရာ ဆှေးနှေးခွငျးတှငျ မှနျပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျက သထုံဆေးရုံ နှငျ့ ရေးမွို့ နယျဆေးရုံတို့၌ အသကျရှူစကျနှဈခုစီရှိဟု ပွောကွားခဲ့သျောလညျး မွပွေငျအခွအေနေ နှငျ့ ကှဲလှဲနဟေု လှတျတျောကိုယျစား လှယျ မြား ပွောကွား
နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျနှငျ့ COVID- 19 ဆိုငျရာ အပွနျအလှနျ ဆှေးနှေးခွငျး အစီအစဉျတှငျ မှနျပွညျနယျ ဝနျကွီးခြုပျ က သထုံခရိုငျ ပွညျသူ့ဆေးရုံနှငျ့ ရေးမွို့နယျပွညျသူ့ဆေးရုံတို့၌ အသကျရှူစကျ နှဈခုစီရှိဟု ပွောကွားခဲ့သျောလညျး တကယျ့ မွပွေငျအခွအေနနှေငျ့ ကှဲလှဲမှုရှိနကွေောငျး လှတျတျောကိုယျစားလှယျမြား ပွောကွားသညျ။ မေ ၅ ရကျက ပွုလုပျသညျ့ နိုငျငံ တျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနှငျ့ ကရငျပွညျနယျ၊ မှနျပွညျနယျနှငျ့ တနင်ျသာရီတိုငျးဝနျကွီးခြုပျမြား COVID- 19 ဆိုငျရာ အပွနျအလှနျဆှေးနှေးခွငျး အစီးအစဉျတှငျ မှနျပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျ ဒေါကျတာအေးဇံက သထုံခရိုငျ ပွညျသူ့ဆေးရုံနှငျ့ ရေးမွို့နယျပွညျသူ့ဆေးရုံတို့၌ အသကျရှူစကျနှဈခုစီရှိဟု ပွောကွားခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
“မှနျပွညျနယျ မျောလမွိုငျဆေးရုံကွီးမှာ Ventilator လေးခုရှိပါတယျ။ သထုံမှာ Ventilator နှဈခုရှိပါတယျ။ ရေးမွို့နယျမှ Ventilator နှဈခုရှိပါတယျ” ဟု မှနျပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျ ဒေါကျတာအေးဇံက ပွောကွားသညျ။ အဆိုပါကိစ်စနှငျ့ပတျသကျ၍ မှနျပွညျနယျ ရေးမွို့နယျ ပွညျသူ့ဆေးရုံတှငျ အသကျရှူစကျ (Ventilator) မရှိသညျ့အပွငျ သထုံခရိုငျ ပွညျသူ့ ဆေးရုံတှငျ လညျး Portable Ventilator စကျတဈလုံးသာရှိဟု နယျမွခေံ လှတျတျောကိုယျစားလှယျမြားက ပွနျလညျပွောကွားခဲ့ခွငျးဖွဈ သညျ။
“ကြှနျတျောတို့ အရငျကထငျထားတာက ကြောကျကပျဆေးတဲ့စကျမှာ အသကျရှူစကျသုံးရတယျလို့ သိထားတယျ။ အဲဒါနဲ့ သထုံခရိုငျဆေးရုံမှာ အဲဒီစကျတဈလုံးရှိတယျ။ နောကျ Portable Ventilator တဈလုံးရှိတယျ ထငျနတော။ ညနကေဘဲ သထုံ ခရိုငျဆေးရုံအုပျကွီးကို လှမျးပွီးအတညျပွုတော့ ကြောကျကပျဆေးတဲ့စကျမှာ အသကျရှူစကျမရှိဘူး။ Portable Ventilator စကျတဈလုံးတညျးရှိတယျလို့ ပွောပါတယျ။ ICU Ward တှမှောသုံးတဲ့ Ventilator စကျတော့ မရှိဘူးလို့သိရတယျ” ဟု ဦးအောငျကြျောသူက ဆိုသညျ။ https://news-eleven.com/article/172288
ရခိုငျပွညျနယျ၊ ရသတေ့ောငျမွို့နယျ အမကျြတောငျကြေးရှာ မူလတနျးလှနျကြောငျးက ဆရာမ ဒျေါခြိုဇငျအောငျ မလေ ၃ ရကျ နေ့ မန ကျပိုငျးက မိုငျးထိသှားတဲ့အတှကျ စဈတှမွေို့က အမှတျ ၁၇ ကုတငျ ၁၀ဝ စဈဆေးရုံမှာ ပို့ဆောငျကုသနရေတယျလို့ သိရပါတယျ။ ဆရာမဟာ ရသတေ့ောငျမွိုကနယျက ခမရ ၅၃၆ တပျထဲမှာနထေိုငျသူဖွဈပွီး မျောတျောဆိုငျကယျနဲ့ မိခငျဖွဈသူ အတှကျ နှားနို့ထှကျဝယျစဉျမှာ အခုလိုဖွဈတာလို့သိရပါတယျ။ ဖွဈစဉျမှနျကနျကွောငျးနဲ့ ခွထေောကျတဈဖကျထိခိုကျသှားလို့ ရနျကုနျမင်ျဂလာဒုံစဈဆေးရုံကိုကိုပို့ဆောငျ ကုသမယျလို့ သတငျးကွားတယျလို့ ရသတေ့ောငျမွို့နယျ ပညာရေးလုပျသားသမဂ်ဂ အဖှဲ့ဝငျ ကိုစိုးလငျးဦး က RFA ကိုပွောပါတယျ။
ANP ပါတီရဲ့ ရသတေ့ောငျမွို့နယျ ကိုယျစားလှယျ ဒျေါခငျစောဝကေတော့ ဒီဖွဈစဉျကိုမသိရသေးကွောငျး ပွောပါတယျ။ ရသတေ့ောငျ ကို ညနမှေ ခရီးကပွနျရောကျမှာဖွဈလို့ ဖွဈစဉျကို စုံစမျးမယျလို့ ပွောပါတယျ။ တခြိနျထဲမှာလညျး တပျမတျောနဲ့ AA အကွား စဈရေးတငျးမာမှုတှရှေိနတေဲ့ ရသတေ့ောငျမွို့နယျထဲက ငတောကျတူခြေ ရှာဟောငျးနဲ့ ရှာသဈ နှဈရှာလုံး မီးလောငျနပွေီး တစုံတယောကျက ရှို့တဲ့ မီးတှလေို့ ဒသေခံတှကေ ပွောကွပါတယျ။ အဲဒီရှာနှဈရှာဟာ ရသတေ့ောငျမွို့နယျရဲ့ မွောကျဘကျ တဈမိုငျလောကျအကှာ အစိုးရတပျမတျော ခမရ ၅၃၈ ရဲ့ ခြောငျးတဈဖကျမှာရှိတာဖွဈပွီး နှဈရှာပေါငျး အိမျခွေ ၁၀ဝ ကြျောနဲ့ လူဦးရေ ၇၀ဝ ကြျောရှိတယျလို့သိရ ပါတယျ။
ရက်ခိုငျ့တပျတျော AA ပွောခှငျ့ရသူ ခိုငျသုခကို RFA က ဆကျသှယျမေးမွနျးရာမှာတော့ ရသတေ့ောငျဘကျမှာ တိုကျပှဲဖွဈပှား တာမရှိကွောငျး၊ ရှာနှဈရှာ မီးရှို့ခံရတယျဆိုတာ ဟုတျမှနျပွီး တပျမတျောဘကျက တပျနဲ့နီးလို့ ရညျရှယျခကျြရှိရှိ တမငျရှာတှေ ကို မီးရှို့တာဖွဈတယျလို့ ပွောပါတယျ။ ဒီစှပျစှဲခကျြနဲ့ပတျသကျပွီး RFA က သီးခွား အတညျပွုနိုငျခွငျးတော့ မရှိပါဘူး။ ရခိုငျ လူမြိုးတှနေဲ့ ကြေးရှာသားတှအေပျေါမှာ တပျမတျောက တမငျရညျရှယျခကျြရှိရှိ ရာဇဝတျမှုတှေ ကြူးလှနျနတေယျဆိုတဲ့ စှပျစှဲ ခကျြတှနေဲ့ပတျသကျလို့တော့ တပျမတျောအနနေဲ့ အရပျသားပွညျသူတှအေပျေါ တမငျသကျသကျ တိုကျခိုကျတာမြိုးမရှိ ကွောငျး၊ ကြေးရှာတှကေို အခွပွေုပွီး တိုကျပှဲဖျောဆောငျတာ ရှောငျရှားဖို့နဲ့ အရပျသားတှကေိုအကာကှယျယူ တိုကျခိုကျတာ မြိုး AA အနနေဲ့ ရှောငျရှားဖို့လိုကွောငျး ဗိုလျမှူးခြုပျဇျောမငျးထှနျးက အရငျက RFA ကို မကွာခဏ ဖွကွေားထားပါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/news/yathaetaung-mine-one-teacher-wound-0505202008 1003.html
ပွညျထောငျစုဘတျဂကျြပါ ဌာန ၆၀ ကြျောရဲ့ စုစုပေါငျးအသုံးစရိတျဟာ ဒသေဆိုငျရာဌာန ၂၄ ခုရဲ့ စုစုပေါငျးအသုံးစရိတျ ထကျ ဘတျဂကျြအရ နညျးနတေယျလို့ ကယားပွညျနယျလှတျတျော ပွညျသူ့ငှစောရငျး ‌စောငျ့ကွညျ့စဈဆေးရေးကျောမတီက ပွောပါတယျ။ မလေ ၇ ရကျက ကငျြးပတဲ့ ဒုတိယအကွိမျ ကယားပွညျနယျလှတျတျော အရေးပျေါအစညျးအဝေးမှာ ပွညျနယျ စီမံကိနျးနှငျ့ဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီး ဦးမျောမျောရဲ့ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှဈအတှကျ ကယားပွညျနယျရဲ့ ဘဏ်ဍာငှေ အရသုံးစာရငျးနဲ့ ပတျသကျပွီး ပွညျသူ့ငှစောရငျးစောငျ့ကွညျ့ စဈဆေးရေးအဖှဲ့ဝငျ ဖရူဆိုမွို့နယျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးခငျမောငျထှနျး (ခ)နျောအီးက ပွောပါတယျ။
“ပွညျထောငျစုမှ လိုငှထေောကျပံ့ကွေး ၇၉ ဒသမ ၉ ဘီလီယံကြျောနှငျ့ ဒသေတှငျး အမှနျတကယျရငှေ ၉ ဘီလီယံပေါငျး ၈၈ ဒသမ ၉၃ ဘီလီယံကို ဒသေဘတျဂကျြဌာန ၂၄ ဖှဲ့ကသာ သုံစှဲနတောဖွဈလို့ ဘတျဂကျြအရ အလှနျမြားပွားနတောကို တှရေ့ပါတယျ။ ပွညျထောငျစုဘတျဂကျြပါ ဌာန ၆၀ ကြျော စုစုပေါငျးအသုံးစရိတျမှာ ဒသေဘတျဂတျြပါ ဌာန ၂၄ ခုရဲ့ စုစုပေါငျး အသုံးစရိတျနဲ့ သိပျမကှာတာကွောငျ့ ပွညျထောငျစု ဘတျဂကျြပါ ဌာနမြားမှာ ဘတျဂကျြ အရနညျးလကျြရှိပွီး ဒသေဘတျ ဂကျြ ဌာနတှကေ အရမြားနတောကို သုံးသပျတှရှေိ့ရပါတယျ။
၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု လြာထားခကျြမှ ခနျ့မှနျးငှစောရငျးမှာ ရငှေ ၈၈ ဒသမ ၉၃ ဘီလီယံဖွဈပွီး သုံးငှေ စုစုပေါငျးမှာလညျး ၈၈ ဒသမ ၉၃ ဘီလီယံ ဖွဈပါတယျ။ အမှနျတကယျရငှမှော ၈ ဘီလီယံကြျောသာရှိပွီး ပွညျထောငျစုကနေ ထောကျပံ့ငှေ ၇၉ ဒသမ ၉ ဘီလီယံကြျော ထောကျပံ့ပေးထားတာတှတေ့ယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒီနောကျ ပွညျသူ့ငှစောရငျးစောငျ့ကွညျ့ စဈဆေး ရေးကျောမတီရဲ့ စိစဈခကျြအစီရငျခံစာကို တငျပွခဲ့ပွီး ဒီအပျေါ ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျတှကေ အကွံပွုဆှေးနှေး နိုငျဖို့ အမညျစာရငျးတငျသှငျးနိုငျကွောငျး ပွညျနယျလှတျတျောဥက်ကဋ်ဌက ကွညောခဲ့ပါတယျ။ မနကျဖွနျမှာတော့ ဘတျဂကျြ ငှစောရငျးလြာထားခကျြနဲ့ပတျသကျပွီး အတညျပွုမပွု ဆကျလကျဆှေးနှေးဖို့ရှိနပေါတယျ။ http://burmese.dvb.no/arch ives/386602
ရခိုငျပွညျနယျ၊ မငျးပွားမွို့နယျ ရာမောငျတံတားအောကျမှာ ဈေးဆိုငျရောငျးခနြတေဲ့ အမြိုးသမီးတဦး ဧပွီ ၇ ရကျ မှနျးလှဲ ၂ နာရီ ဝနျးကငျြလောကျက လကျနကျငယျကညျြထိမှနျ ဒဏျရာရရှိသှားပါတယျ။ ရာမောငျတံတားနားက အမျးသားကြေးရှာက ဈေးရောငျးသူ ဒျေါအေးခမျြးခိုငျ အသကျ ၃၆ နှဈဟာ လကျနကျငယျကညျြထိမှနျခဲ့တာကွောငျ့ ဘယျဘကျခွသေလုံးမှာ ကညျြ ဖောကျဝငျသှားလို့ မငျးပွားပွညျသူ့ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူနရေတယျလို့ ကာယကံရှငျ ဒျေါအေးခမျြးခိုငျက ဒီဗှီဘီကို ပွော ပါတယျ။
“နလေ့ယျ ၂ နာရီလောကျကဖွဈမယျ ကမြက ရာမောငျတံတားအောကျဈေးဆိုငျဖှငျ့ပွီး ဆိုငျရောငျးနတော။ ကလေးနဲ့အတူ ထိုငျနတော။ အဲ့ဒီအခြိနျမှာ ကညျြက ကမြဆီကိုလာထိတယျ။ ခွသေလုံးကို ဖောကျဝငျသှားတယျ။ သားကတော့ဘာမှ မဖွဈ ဘူး။ ရာမောငျတံတားအနားမှာ တပျမတျောက တပျစှဲထားတာရှိတယျ။ ဘယျကပဈလိုကျမှနျးတော့ကမြ မသိဘူး။ လကျရှိမှာ တော့ ခွသေ လုံးမှာ ကညျြဝငျသှားတာကွောငျ့ မငျးပွားဆေးရုံကို ရောကျရှိနပွေီး ဓာတျမှနျရိုကျကူးထားတာ အဖွသေိရဖို့စောငျ့ ဆိုငျးနတေယျ”ဒဏျရာက အသကျအန်တရာယျ စိုးရိမျစရာမရှိပမေယျ့ လမျးမလြှောကျနိုငျဘူးလို့လညျး ဒျေါအေးခမျြးခိုငျက ပွောပါတယျ။
အဆိုပါပဈခတျမှုဟာ ဘယျလကျနကျကိုငျအဖှဲ့ရဲ့ လကျခကျြလညျးဆိုတာကိုတော့ မသိရသေးသလို ဘယျလကျနကျကိုငျ အဖှဲ့ အစညျးကမှလညျး သူတို့ရဲ့လကျခကျြလို့ ထုတျဖျောဝနျခံလမေ့ရှိပါဘူး။ သင်ျဂဟကမျးလကျလကျရက်ခိတအဖှဲ့အသငျးဥက်ကဋ်ဌ ကိုအမျးသားကွီးက “ ဒီနကေ့တော့ တိုကျပှဲဖွဈတာတော့ မကွားမိဘူး။ လယောဉျနဲ့လာပဈနတောတှရှေိတယျ။ လကျနကျကွီး တှနေဲ့ ပဈခတျနတောတှရှေိတယျ။ နောကျပွီး ရာမောငျနားက ရတေပျ ကလညျး ပဈခတျနတောတှရှေိတယျ။ တောငျကုနျးတှေ ကို လကျနကျကွီးတှနေဲ့ ပဈနတောတှရှေိနတေယျ။ ဖုံသာခြောငျးဘကျ တောငျတနျးတှကေို တလြှောကျပဈနတောတှရှေိနေ တယျ။ တိုကျပှဲနဲ့ မသကျဆိုငျပဲ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး အရပျသားတှေ သဆေုံးတာ၊ ဖမျးဆီးခံနရေတာ၊ ညှဉျးပနျး နှိပျစကျခံရပွီး သဆေုံးတာတှမြေားပွားလာနပေါတယျ။” လို့ ပွောပါတယျ။ http://burmese.dvb.no/archives/386621
တရုတျနယျစပျ ကနျပိုငျတီနယျစပျတှငျထားရှိသော Quarantine မြားကို မွဈကွီးနားသို့ ရှပွေ့ောငျးရနျ ပွညျနယျအစိုးရက စီစဉျ နကွေောငျး သိရသညျ။
လကျရှိ Quarantine မြားကို ထားရှိသောနတှေငျ မိုးရာသီဝငျလြှငျ မလုံခွုံတော့သဖွငျ့ မွဈကွီးနားနှငျ့ ဝိုငျးမျောမွို့သို့ ရှပွေ့ောငျးထားရနျ လိုအပျကွောငျး ကခငျြပွညျနယျ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးနှငျ့ လူ့စှမျးအားရငျးမွဈဝနျကွီးက ပွောသညျ။ “Quarantine တှကေို ထားဖို့ ပွညနျနယျအစိုးရက လုပျပေးနိုငျတာက အဆောကျအဦးဘဲ လုပျပေးနိုငျတယျ။ အဆောကျအဦး ဆိုပမေယျ့လညျး မိုးကာနဲ့ဘဲ အဖွဈသဘော ဆောကျထားပေးတယျ။ နောကျ ပွညျတျောပွနျအလုပျသမားတှအေတှကျ ကနျြးမာရေးဆိုလညျး စိတျပူရတယျ။ ကနျပိုကျတီဆိုရငျလညျး ကခငျြပွညျနယျမှာ အခွားဒသေတှနေဲ့မတူဘဲ အလှနျအေးတဲ့ ဒသေဖွဈတယျ။ အခုဆို မိုးရာသီခြိနျရောကျလာပွီ။ အကယျှုမြား မထငျမှတျဘဲ လမေုနျတိုငျးတှေ လာမယျဆိုရငျ စိုးရိမျစရာရှိ ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ရှပွေ့ောငျးနထေိုငျသငျ့နတေယျ”ဟု သူကပွောသညျ။
လကျရှိ ကနျပိုကျတီတှငျ ၂၁ ရကျ Quarantine ခံယူနသေညျ့ ပွညျတျောပွနျအလုပျသမား ၄၀ဝ ကြျောရှိနပွေီး ထိုသူမြားကို မွဈကွီးနား သတျမှတျနရောမြားသို့ ရှပွေ့ောငျးရနျပွငျဆငျနခွေငျးဖွဈသညျ။ ပွညျတောငျပွနျ Quarantine ဝငျနသေူမြားကို ပွညျနယျအစိုးရ ဘတျဂကျြဖွငျ့ ကူညီထောကျပံ့ရနျ အစီစဉျမရှိသေးသဖွငျ့ အလှူရှငျမြားဖွငျ့သာ ဆကျလကျရပျတညျသှားရ မညျဟု သိရသညျ။ ကခငျြပွညျနယျအတှငျး Quarantine စငျတာ ၂၆၀ ခနျ့ရှိပွီး တရုတျပွညျ လှယျဂယျြဂိတျနှငျ့ ကနျပိုကျတီ ဘကျမှ ပွနျလာသညျ့ ကခငျြပွညျနယျ ပွညျတှငျးနှငျ့ပွညျပ စုစုပေါငျး ၅၃၄၆ ဦး ရှိနပွေီဟု ပွညျနယျအစိုးရထံမှ သိရသညျ။https://burmese.kachinnews.com/2020/05/05/%e1%80%80%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%95%e1
ရခိုငျပွညျနယျ မဲဆန်ဒနယျ အမှတျ (၄) မှ အမြိုးသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးကြျောကြျောသညျ ဦးနှောကျအမွှေးပါးရောငျ ရောဂါဖွငျ့ မေ ၆ ရကျ နံနကျက စဈတှမွေို့ ပွညျသူ့ဆေးရုံတှငျ ကှယျလှနျခဲ့ကွောငျး ၎င်းငျးနှငျ့ နီးစပျသညျ့ ကိုယျစားလှယျအခြို့ ၏ ပွောကွားခကျြအရ သိရသညျ။
ဦးကြျောကြျောသညျ ၂၀၁၀ နှငျ့ ၂၀၁၅ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲ နှဈကွိမျဆကျ အနိုငျရ လှတျတျောကိုယျစားလှယျဖွဈသညျ။ ဦးကြျောကြျောသညျ ၂၀၁၅ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲတှငျ ရခိုငျအမြိုးသားပါတီမှ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျကာ အနိုငျရရှိခဲ့ပွီး ၂၀၁၉ ခုနှဈအတှငျး ပါတီမှ နုတျထှကျကာ ရခိုငျ့ဦးဆောငျပါတီသို့ ဝငျရောကျကာ ပါတီ၏ ဗဟိုအကွံပေးကောငျစီဝငျအဖွဈ ဆောငျ ရှကျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ဦးကြျောကြျောသညျ မွောကျဦးမွို့ တောငျရပျ (ဘီအိုစီရပျကှကျ) ဇာတိဖွဈပွီး ဥပဒဘှေဲ့ရတဈဦးဖွဈကာ အငွိမျးစား အထကျ တနျးပွ ကြောငျးဆရာတဈဦးလညျး ဖွဈသညျ့အပွငျ ၎င်းငျးကှယျလှနျမှုအပျေါ ရခိုငျဦးဆောငျပါတီက ဝမျးနညျးကွောငျး သဝဏျ လှာ ထုတျပွနျခဲ့သညျ။ https://news-eleven.com/article/172573
ဟားခါးတက်ကသိုလျတှငျ Facility Quarantine ထားရှိသူမြားသညျ အပွငျမှ အဖှဲ့အစညျးမြား ကူညီမှုကွောငျ့သာ အဆငျပွနေေ ပွီး အစိုးရဘကျမှ ကူညီမှုတဈခုမှမရှိဟု စောငျ့ကွညျ့ လူနာ တခြို့ထံမှသိရသညျ။ “ကြှနျတျောတို့က အဆငျပွတေယျ။ အပွငျက အဖှဲ့စညျးလေးတှေ ကူညီပေးလို့ပေါ့နျော ဒါပမေယျ့အဆငျပွတေယျဆိုတာ အစိုးရကူညီတာ တဈခုမှမရှိဘူး ၊ အပွငျက အဖှဲ့ စညျးတှေ ဘာသာရေးတှေ ဒါတှကွေောငျ့ အဆငျပွတောပါ” ဟု Facility Quarantine ဝငျ Pu Cia That က ပွောသညျ။
အိမျသာ၊သနျ့ရှငျးရေးတှငျလညျး အတှငျးကကြ လုပျဆောငျမှုမရှိပဲ အပွငျမှသာ စောငျ့ရှောကျမှု မြားလုပျနခွေငျးကွောငျ့ အခကျခဲမြားရှိနပွေီး ကနျြးမာရေးဝနျထမျးမြား အနဖွေငျ့လညျး အတှငျးကကြ စောငျရှကျမှု့မရှိဟုလညျး သိရသညျ။ အိမျသာကို စောငျ့ကွညျ့လူနာမြားမှ ကိုယျထူကိုယျထ ပွငျဆငျမှုမြားလုပျခဲ့ပွီး ယခုမှသာ အနညျးနှငျ့အမြား အသုံးပွုနိုငျသညျဟုသိရသညျ။ “ကြှနျတျောတို့ ဝငျလာကတညျးက သူတို့ လုံးဝမစီစဉျခဲ့တာက ရနေဲ့ အိမျသာဖွဈတယျ၊ ရကေအခုထိလညျး ပုံမှနျလာတာမရှိပွီး ကြှနျတျောတို့ ပွောမှ ဖှငျ့ပေးတယျ၊ အိမျသာက သူတို့လညျး အထဲဝငျပွီးလုပျဖို့ အဆငျမပွတေော့ ကိုယျ့ဟာကိုပဲလုပျနတေယျ၊ အိမျသာပိုကျတှထေဲ မှာလညျး ရှံ့တှပေဲ ပွညျ့နတေယျ ၊မနကေ့ နညျးနညျး ကိုယျ့ဟာကိုယျ ပွငျလိုကျတော့ အခု နညျးနညျး သုံးလို့ ရတဲ့ဟာတှတေော့ ရှိလာပါပွီ၊”ဟု Facility Quarantine ဝငျသူ တဈဦးက ပွောသညျ။ လကျရှိဟားခါးတက်ကသိုလျတှငျ Facility Quarantine ထားရှိသူ ၅၁ ဦးရှိပွီး ၄၈ ဦး မှာ Negative ဖွဈပွီး ကနျြသုံးဦးမှာ စဈဆေးလကျြရှိကွောငျး သိရသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-72662
ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့က ဦးဆောငျပွီး Mask ကမျပိနျးပွုလုပျမှု လူစုလူဝေးဖွဈပျေါခဲ့သဖွငျ့ ဝဖေနျမှုမြားရှိခဲ့သညျ။ တောငျကွီးမွို့တှငျ ရှမျးပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့ဝနျကွီးခြုပျ ဦးဆောငျ၍ ပွုလုပျပွီး ရှမျးတောငျ မွို့နယျပေါငျး ၂၁ မွို့နယျတှငျ တပွိုငျနကျထဲ ပွုလုပျခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ တောငျကွီမွို့ မီးပုံးပြံကှငျးအပေါကျဝ တှငျ မေ ၇ ရကျ နံနကျ ၇ နာရီတှငျ စတငျ၍ ကမျပိနျးပွုလုပျခဲ့ခွငျးဖွဈပွီး၊ ရှမျးပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့ ဝနျကွီးခြုပျနှငျ့ အစိုးရအဖှဲ့ဝငျ ဝနျကွီးမြား၊ ဌာနဆိုငျရာ တာဝနျရှိသူမြား၊ အရပျဘကျအဖှဲ့အစညျးမြား၊ ပရဟိတလူမှုရေး အသငျးအဖှဲ့မြား စသဖွငျ့ အဖှဲ့အစညျးပေါငျးစုံတို့ ပါဝငျသော ပူးပေါငျးအဖှဲ့တို့ သညျ အဝရောကုနျးသာယာကှငျးဘေးရှိ လမျးမပျေါတှငျ ရောငျးခနြသေော ယာယီပြံကြ ဈေးသညျမြားနှငျ့ ဈေးဝယျသူမြား အား Mask ပေးဝခွေငျး၊ လကျဆေးရညျ၊ အသိပညာပေး လကျကမျးစာစောငျမြားကို ပေးဝခေဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
အလားတူ ရှမျးပွညျနယျတောငျပိုငျးရှိ တောငျကွီး၊ ညောငျရှေ၊ ရှညေောငျ၊ ဟိုပုံး၊ ဆီဆိုငျ၊ ပငျလောငျး၊ လှိုငျလငျ၊ ပငျလုံ၊ ဟဲဟိုး၊ အောငျပနျး၊ ကလော၊ ပငျဖွဈ၊ အငျတော၊ ရပျစောကျ၊ နမျ့စနျ၊ ဖယျခုံ၊ မိုးဗွဲ၊ ရှာငံ၊ ပငျးတယ၊ အေးသာယာ၊ လငျးခေး၊ မောကျမယျ၊ မိုးနဲ၊ မိုငျးပနျ စသညျ့မွို့မြားတှငျလညျး Mask ကမျပိနျးမြား တဈပွိုငျနကျပွုလုပျခဲ့သညျ။ ထို့ပွငျ ရှမျးအရှနှေ့ငျ့ ရှမျးမွောကျတို့တှငျလညျး ဆကျလကျ ဆောငျရှကျသှားမညျ ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
ထိုသို့ ကမျပိနျးပွုလုပျရာတှငျလညျး Social Distancing ကို လိုကျနာဆောငျရှကျပေးကွရနျ၊ တဈယောကျနှငျ့ တဈယောကျ ခွောကျပခှောပွီး လူစုလူဝေး မဖွဈပျေါစရေေးကို အထူးသတိထား ဆောငျရှကျပေးကွပါရနျ သတိပေး နှိုးဆျောထားပွီး၊ ပရဟိတ အသငျးအဖှဲ့မြား၊ ကြောငျးသားကြောငျးသူမြား၊ အရပျဘကျ အဖှဲ့အစညျးမြား ဌာနဆိုငျရာမြားအားလုံးပူးပေါငျး ပါဝငျ ပေးကွရနျ တိုကျတှနျးထားကွောငျး စီမံကိနျးနှငျ့ ဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီး ဦးစိုးညှနျ့လှငျက ပွောကွားသညျ။ ယငျးသို့ ပွောကွားမှုမြား ရှိခဲ့သျောလညျး လူစုလူဝေးမြားဖွဈပျေါခဲ့သဖွငျ့ တောငျကွီးမွို့ခံအခြို့က လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာမြားတှငျဝဖေနျမှုမြား ထှကျ ပျေါလာခဲ့ပွီးနောကျ စီမံကိနျးနှငျ့ ဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီး ဦးစိုးညှနျ့လှငျက လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာတှငျ ပွနျလညျ တောငျးပနျခဲ့ရ သညျ။အဆိုပါ Mask ကမျပိနျးကို တဈပတျလြှငျ တဈကွိမျခနျ့ တဈလကွာ ဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈကွောငျး ဦးစိုးညှနျ့လှငျက ပွော ကွားသညျ။ https://news-eleven.com/article/172567
ရခိုငျပွညျနယျ၊ တောငျကုတျမွို့နယျ၊ ဆားပွငျကြေးရှာမှ အကွမျးဖကျမှုတိုကျဖကျြရေး ဥပဒဖွေငျ့ ဖမျးဆီးခံထားရသော ဒသေခံ ၅ ဦးကို ယနေ့ မလေ ၇ ရကျနကေ့ အထောကျအထား မခိုငျလုံ၍ မွို့နယျတရားရုံးက ပွနျလှတျပေးခဲ့သျောလညျး ထပျမံ ပွနျ အဖမျးခံလိုကျရကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။ အဆိုပါ တောငျကုတျမွို့နယျ၊ ဆားပွငျကြေးရှာမှ ဒသေခံ ၅ ဦးကို ဧပွီလ ၅ ရကျနေ့ က တပျမတျောသားမြား အပါအဝငျ ၊ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြားက စဈဆေးစရာရှိသညျဟုဆိုကာ ချေါယူခဲ့ပွီးနောကျ ရက်ခိုငျစဈတပျ (AA) နှငျ့ပတျသကျ ဆကျနှယျမှုရှိသညျဟုဆိုကာ အကွမျးဖကျမှု တိုကျဖကျြရေး ဥပဒဖွေငျ့ ဖမျးဆီး ခြုပျနှောငျခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
ထိုသို့ အကွမျးဖကျ ဥပဒဖွေငျ့ အမှုဖှငျ့ကာ ဖမျးဆီးစဈဆေးခဲ့ပွီး ယနတှေ့ငျ ခြုပျရမနျ သကျတမျးစသေ့ညျ့အတှကျ တောငျကုတျ မွို့နယျ တရားရုံသို့ တရားစှဲတငျရာတှငျ အထောကျအထား ခိုငျလုံမှုမရှိသဖွငျ့ တရားရုံးမှ ပွနျလှတျပေးခဲ့သျောလညျး နောကျ ထပျ ဗုံးဖောကျခှဲမှုတခုဖွငျ့ ထပျမံဖမျးဆီး ထိနျးသိမျးခဲ့ရလိုကျရခွငျးဖွဈကွောငျး မိသားစုဝငျမြားက ပွောသညျ။ ယငျးဖမျးဆီးခံ ထားရသူ ဆားပွငျကြေးရှာသား ၅ ဦးမှာ ဦးပွုံးခြို၊ ဦးသနျးနိုငျ၊ ဦးလှဖွူ၊ ဦးအောငျထူး၊ ဦးအောငျမွငျ့တို့ ဖွဈပွီး ၎င်းငျးထဲမှ ဦးပွုံးခြို မှာ ရခိုငျအမြိုးသားပါတီ (ANP) ဝငျ တဦးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
တောငျကုတျမွို့နယျ ANP ပါတီမှ ဒုဥက်ကဋ်ဌ ဦးဖကွှေယျ က “ပထမ ဖမျးတုနျးတော့ သူတို့ကို စညျးရုံး ဟောပွောတယျ။ ငှကွေေး ကောကျခံတယျ။ ရိက်ခာပို့တယျဆိုတဲ့ စှပျစှဲခကျြနဲ့ဖမျးတာ။ ဒီနေ့ သကျသအေထောကျအထား မခိုငျလုံလို့ တရားရုံးက လှတျပေး လိုကျပွီး နာရီဝကျလောကျအကွာမှာ နောကျထပျ ဗုံးဖောကျခှဲမှုနဲ့ ထပျဖှငျ့ပွီးတော့ ခြုပျရမနျ ယူသှားတယျ”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွော သညျ။ ဗုံးခှဲမှုဖွငျ့ ရဲတပျဖှဲ့မှ ခြုပျရမနျတောငျးခဲ့ရာတှငျ တောငျကုတျမွို့နယျ တရားရုံးမှ မလေ ၁၁ ရကျနအေ့ထိ ခြုပျရမနျ ၄ ရကျသာ ပေးလိုကျကွောငျးလညျး သိရသညျ။
တောငျကုတျမွို့နယျ ရဲတပျဖှဲ့မှူး ရဲမှူးသနျးနိုငျကတော့ ၎င်းငျးဆားပွငျကြေး ရှာသား ၅ ဦး၏ အမှုကို တပျမတျောက တရားလို လုပျ တိုငျတနျးထားခွငျးဖွဈပွီး တောငျးကုတျမွို့နယျအတှငျး ဗုံးဖောကျခှဲသညျ့ ဖွဈစဉျမြားရှိသညျ့အတှကျ ဆကျစပျမှု ရှိမရှိ ဆို သညျကို စဈဆေးရနျ ထပျမံအမှုဖှငျ့ စဈဆေးနခွေငျးသာဖွဈကွောငျး ပွောသညျ။ လကျရှိအခြိနျတှငျ တောငျကုတျမွို့နယျ အတှငျး နိုငျငံရေးပါတီမြားအကွားတှငျ ရှုပျထှေးမှုမြား ဖွဈပျေါနသေညျ့အတှကျ မွို့လုံခွုံရေးကို တငျးကွပျထား ကွောငျးလညျး ဒသေခံမြားထံမှ သိရသညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/05/07/222151.html
မွဝတီမွို့တှငျ အရေးပျေါကာလ ညမထှကျရအမိနျ့ ထုတျပွနျထားသျောလညျး လိုကျနာမှုမရှိဘဲ ငါးဂိမျးလောငျး ကစားရုံ ဖှငျ့လှဈထားသူနှငျ့ လာရောကျကစားသူမြားကို မေ ၆ ရကျ၊ နံနကျ ၂ နာရီခနျ့တှငျ ဖမျးဆီးလိုကျသညျ ဟု မွဝတီမွို့မရဲစခနျး တာဝနျရှိမြားက ပွောသညျ။
ကိုဗဈ ကာလ ညမထှကျရ အမိနျ့ထုတျပွနျထားစဉျ အဖှဲ့စုံပါသညျ့ လှညျ့ကငျးအဖှဲ့က မွဝတီမွို့နယျအတှငျး ကငျးလှညျ့ ဆောငျ ရှ ကျ နစေဉျ မွဝတီမွို့၊ အမှတျ(၄)ရပျကှကျ၊ အမှတျ(၂)ခဈြကွညျရေးလမျး၊ ခွံကှကျတဈခု အတှငျး ငါးဂိမျးလောငျးကစား ရုံသညျ ပိတျထားခွငျးမရှိဘဲ လောငျးကစား ပွုလုပျနသေညျ့အတှကျ ဝငျရောကျ ရှာဖှဖေမျးဆီးမှုမြား ပွုလုပျခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ ထိုသို့ ဝငျရောကျရှာဖှစေဉျ အစဉျအလာအတိုငျး ငါးဂိမျးလောငျးကစားရုံ မနျနဂြော၊ ကိုစိုငျး ဆိုသူသညျ ထှကျပွေး တိမျးရှောငျ သှားပွီး လောငျးကစားပွုလုပျရာတှငျအသုံးပွုသညျ့ ငါးမနျးလောငျးကစား ဂိမျးစကျ ၆ လုံး နှငျ့အတူ ဆကျစပျပစ်စညျးမြား၊ လောငျးကစားပွုလုပျကွသူ ၁၁ ဦး ဖမျးဆီးရမိခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ဖမျးမိ ဖွဈစဉျအပျေါ လောငျးကစားရုံ မနျနဂြော ကိုစိုငျးဆိုသူကို (ပ)၃၇၁/၂၀၂၀ လောငျးကစား ဥပဒေ၊ ပုဒျမ- ၁၆(က)/ ၁၇(က) တို့ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ အရေးယူထားကွောငျး မွဝတီမွို့မရဲစခနျးက သတငျးထုတျပွနျထားသညျ။ မွဝတီမွို့တှငျ ကိုဗဈ အရေးပျေါကာလ ည ၁၀ နာရီမှ မနကျ ၄ နာရီထိ ညမထှကျရ အမိနျ့ကို ဧပွီ ၁၈ရကျက ထုတျပွနျထားပွီးနောကျ ပွညျသူမြား လိုကျနာမှုရှိမရှိ သိရှိနိုငျရနျ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့ ပူးပေါငျးအဖှဲ့က ညစဉျ လှညျ့ကငျးမြားဖွငျ့ စောငျ့ကွညျ့ ဆောငျရှကျလကျြ ရှိသညျ။ ထိုသို့ ဆောငျရှကျရာတှငျ လိုကျနာမှု မရှိသူမြားကို ဧပွီ ၂၀ ရကျနေ့ ညပိုငျးမှစ၍ ဖမျးဆီးအရေးယူမှုမြားပွုလုပျခဲ့ပွီး မေ ၅ ရကျနထေိ့ အမိနျ့မလိုကျနာသူ လူ ၃၀ဝ ဦးကြျော ဖမျးဆီးအရေးယူခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ http://kicnews.org/202 0/05/%e1%80%8a%e1%80%99%e1%80%91%e1%80%bc%e1%80%80%e1%80
ကခငျြပွညျနယျ မွဈကွီးနားအတှငျး ပွညျတျောပွနျမြားကို Quarantine ထားရှိနရောမြားတှငျ စတေနာ့ဝနျထမျးအဖွဈ လုပျအားပေးရနျ လူအငျအား လိုအပျနသေညျဟု Kachin State Covid-19 Prevention Network မှ သိရသညျ။
“ကြှနျမတို့က မွို့တှငျးမှာရှိတဲ့ Quarantine စငျတာနဲ့ ရပျကှကျတှမှော ဆေးဖနျြးတာလုပျတယျ။ အခုနောကျပိုငျးက လူအငျ အားပိုလိုအပျလာတာပေါ့။ Quarantine စငျတာက ၄ ခုရှိတယျ။ တဈနရောမှာက ၂ ယောကျစီထားပေးတယျ။ ဆေးဖနျြးတဲ့ အပိုငျးဆိုရငျလညျး တဈဖှဲ့မှာ ၄ ယောကျလောကျလိုတယျ။ အဲ့ဒီလူတှဘေဲ နတေို့ငျးလုပျလို့မရဘူး။ ညဆိုရငျလညျး တအား နကျတဲ့အထိ လုပျရတဲ့အတှကျ အိပျရေးပကျြတာတှဖွေဈတာပေါ့။ ပွီးရငျအခုဆို Volunteer လုပျတဲ့ ကာလဆို တဈလ လောကျရှိသှားပွီ။ အဲ့တော့ ဆေးဖနျြးတဲ့ ပထမ အသုတျကို ပွနျနားခိုငျးရတယျ။ အဲ့တော့ လူအငျအားနညျးသှားတာပေါ့။ လူအငျအားက ၃၀ လောကျဘဲရှိတယျ။ အခုဆို ၁၀ ယောကျဘဲ ကနျြတော့တယျ”ဟု Kachin State Covid-19 prevention Network မှ မဆိုငျးနူးပနျ ပွောသညျ။ အစိုးရသတျမှတျထားသညျ့ ပွညျတျောပွနျ Quarantine စငျတာမြားအပွငျ ရပျကှကျ အတှငျး ရောဂါကာကှယျရေး လုပျငနျးမြား ဆောငျရှကျနိုငျဖို့ စတေနာ့ဝနျထမျး ၆၀ ကြျော လိုအပျနသေညျဟု ထပျမံပွော ဆိုသညျ။
ထို့ကွောငျ့ Volunteer အဖွဈပါဝငျလိုသူမြားကို လူမှုကှနျယကျမှတဆငျ့ ချေါယူသှားမညျဟုသိရသညျ။ ပွညျနယျအတှငျး ပွညျတျောပွနျမြားနှငျ့ Quarantene ဝငျနသေူမြားကို အစိုးရမဟုတျသော အရပျဖကျအဖှဲ့အစညျးမြား၏ စတေနာ့ဝနျထမျး အငျအားဖွငျ့ ရောဂါကာကှယျရေးလုပျငနျးမြားကို လုပျဆောငျနကွေသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/202 0/05/06/covid19%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%
ကိုဗဈ -၁၉ စတငျဖွဈပှားရာ တရုတျပွညျ ဝူဟနျမွို့တှငျ အကဉျြးကသြညျ့ မွနျမာနိုငျငံသား ၂၆၀ ကြျော ယနေ့ မနကျပိုငျးက သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး မူဆယျမွို့သို့ပွနျလညျဝငျရောကျလာကွောငျး သိရသညျ။ တရုတျနိုငျငံတှငျ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ ဖမျးဆီးထောငျခခြံရသညျ့ မွနျမာနိုငျငံသား ၂၆၀ ကြျောအား မလေ ရ ရကျ ယနမေ့နကျပိုငျး က တရုတျအာဏာပိုငျမြားက မွနျမာအာဏာပိုငျမြားထံ လှဲအပျပေးရာ ထိုအထဲတှငျ ကိုဗဈ စတငျဖွဈပှါးရာ ဝူဟနျမွို့၌ အကဉျြးကသြူ ၁၄၁ ဦး ပါဝငျကွောငျး မူဆယျမွို့နယျ အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးသူရိနျ ကသြှမျးသံတျောဆငျ့ သို့ ပွောသညျ။
ထိုသူမြားကို ယနေ့ မနကျပိုငျး တရုတျအာဏာပိုငျမြားက သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး မူဆယျမွို့နယျ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးထံသို့ လှဲ ပွောငျးပေးခဲ့သညျ။“ ဒီနေ့ တရုတျပွညျ ဝူဟနျမွို့က ၁၄၁ ဦး၊ တခွားပွညျနယျနဲ့ဆိုရငျတော့ ၂၆၀ ကြျောရှိတယျ။ မနကေ့ လညျး တရုတျဘကျက ၅၈ ဦး လှဲပွောငျးပေးတယျ”ဟု မူဆယျမွို့နယျ အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးသူရိနျ က သြှမျးသံတျောဆငျ့ သို့ ပွောသညျ။ တရုတျပွညျ ထောငျအသီးသီးမှလှဲပွောငျးလာခဲ့သူမြားအားလုံးကို လကျရှိမှာ ကနျြးမာရေး စဈဆေးနကွေောငျး၊ ကနျြးမာရေးအတှကျ ဖြားနာမှုရှိ၊ မရှိ စဈဆေးသညျ့အပွငျ ကနျြးမာရေး ဌာန မှ ညှနျကွားထားသညျ့ တဲ့ HIV/ AIDS ကိုလညျး ထညျ့သှငျးစဈဆေးပေးကွောငျး သိရသညျ။
ဝူဟနျမွို့အကဉျြးထောငျမှ အကဉျြးသားမြားပါလာသညျ့အတှကျ စိုးရိမျမှုမြားစှာရှိကွောငျး၊ ထိုသူမြားကို ကနျြးမာရေး စဈဆေး မှု သခြောစှာ ပွုလုပျပေးသငျ့ကွောငျး၊ ကိုဗဈ -၁၉ ရှိ၊မရှိ လညျး ဓာတျခှဲခနျး နမူနာ ပေးပို့ကာ စဈဆေးသငျ့ကွောငျး မူဆယျ ဒသေခံမြားက ပွောသညျ။ ထိုသူမြားအတှကျ နရေေးထိုငျရေးကို မူဆယျမွို့ သကျဆိုငျရာ ဌာန၊ မူဆယျဒသေခံမြား နှငျ ပရဟိတ အဖှဲ့တို့က ပူးပေါငျးကာဆောငျရှကျကွကွောငျး သိရသညျ။ မွနျမာ-တရုတျနယျစပျ မူဆယျမွို့ရှိ နယျစပျဂိတျမြားကို တရုတျနိုငျငံမှ ဧပွီ ၁ ရကျ မှစတငျကာ ဝငျ၊ထှကျခှငျ့ ရကျအကနျ့ အသကျမရှိ ပိတျလိုကျသညျ။ https://burmese.sha nnews.org/archives/16453
မှတျခကျြ။ သကျဆိုငျရာ သတငျးမီဒီယာအသီးသီးမှ ကောကျနုတျဖျောပွခွငျး ဖွဈပါသညျ။
*** ပွီး ***